ပြန်ဖွင့် Accounts ကို: စာမျက်နှာ 1 - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
စာသားအောက်ရှိလင့်ခ်များတွင်လူများ၏ပြန်လည် rebooting (ပြန်လည်ထူထောင်ရေး) အတွေ့အကြုံများ၏ပထမ ဦး ဆုံးအသုံးပြုသူအကောင့် ၂၀၀၀ ကျော်ကိုတွေ့နိုင်သည်။ ငါတို့ဖန်တီးခဲ့တယ် ပြန်ဖွင့် Accounts ကို: စာမျက်နှာ2နှင့် Accounts ကိုပြန်ဖွင့်: စာမျက်နှာ 3ကျွန်တော်တို့ရဲ့ system အဖြစ်တစ်ခုတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်ဤမျှလောက်အောင်မြင်မှုမကိုင်တွယ်နိုင်ဘူး။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ကနေပြန်လည်နာလန်ထူဖော်ပြတိုတောင်းပုံပြင်များ၏ 8 စာမျက်နှာများ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8။ (ဒါကြောင့်ပထမဦးဆုံးလက်နာလန်ထူအကောင့်ယခုစုစုပေါင်း 5,000 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို) ။
စာရေးသူတို့ကထောက်ပံ့ထားလျှင်တစ်ဦးကို restart အကောင့်အသက်နှင့်အတူစတင်သည်။ တချို့ကယင်း reboot ၏အရှည်နှင့်အတူစာရေးသူနေတဲ့ကိုးကားနှင့်အတူအခြားသူများကိုစတင်ဖို့။ အားလုံးနီးပါးကို restart အကောင့်မူရင်း post မှ link တစ်ခုဆံ့နှင့်အများဆုံးတစ်ဦးရဲ့ user name ရှိသည်။
ရက်ပေါင်း ၉၀ အစီရင်ခံစာများကိုလည်းသင်တွေ့လိမ့်မည်။ အများအားဖြင့်လွဲမှားသောအယူအဆမှာ YBOP သည်ရက်ပေါင်း ၉၀ အား rebooting period တစ်ခုအဖြစ်အကြံပြုသည်။ မထားဘူး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကွဲပြားသောကြောင့်အရှည်ကွဲပြားခြားနားသည်။ များစွာသောသူတို့သည်ရက်ပေါင်း ၉၀ တွင်အစီရင်ခံစာရေးရန်ရွေးချယ်ကြသော်လည်းအများစုသည်ရက်ပေါင်း ၉၀ မတိုင်မီအကြိမ်ကြိမ်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားလေ့ရှိကြောင်းသတိပြုပါ။
ဤစာမျက်နှာကို porn စွဲသူများပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းဖြင့်ရေးသားထားသော "အကြံဥာဏ်ကော်လံ" ပါရှိသည်။
အနည်းငယ် 90-နေ့ + အစီရင်ခံစာများ reddit.com NoFap မှ။
အဆိုပါအခြား Porn စမ်းသပ်မှု - ဆောင်းပါး၏အောက်ဖေါ်ပြပါအကြောင်းအရာ ၁၀၀၀ ကျော်ကိုဖတ်ပြီး“ rebooting သက်သာခွင့်များ” ကိုဖတ်ပါ။
ငါ PMO မပါဘဲနေထိုင်ခြင်း၏ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်တစ်ကိုယ်ရေသမားဖြစ်သော်လည်းသူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစု၊ ယောဂ၊ အနှိပ်၊ လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်အသက်ရှူမှုများကိုနေ့စဉ်အားကိုးနေရသည်။ ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်နှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုအေးအေးဆေးဆေးအနားယူနိုင်သည့်သဘာဝနည်းလမ်းများစွာကိုလေ့လာနေသည်။ ငါကလူတွေကိုပိုပြီးဖြေလျော့ပေးပြီးရက်ရောတယ်။ ဒါပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အကြီးအနာကျင်မှု, lethargy, စျြလြူရှုမှု, ဝမ်းနည်းမှု, စိတ်ပျက်ခြင်းနှင့်အထီးကျန်ခံစားရတယ်။ ကျွန်ုပ်တွင်းရှိအချိန်၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်ကြာချိန်သည်ကျိန်းသေကျဆင်းနေပါသည်။ ကျွန်တော့် dopamine အပ်ကျဆင်းသွားသည့်အခါတိုင်း၊ တိုးတက်မှုနှင့်အတူပြproblemနာတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့သည်မေ့လျော့ခြင်းဖြစ်သည် ငါတို့သည်အဘယ်သို့ခဲ့ကြသည်တက် messed သောအခါကြှနျုပျတို့စတင်ခဲ့သည်။ ဟားဟား
ပြန်ဖွင့်ခြင်းသည် linear မဟုတ်ပါ (ပုံမှန်အားဖြင့်အကြိမ်ကြိမ်ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်ပါ) ။ ရှိပါတယ် အတက်အကျအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှလမ်းကြောင်းသစ်အထက်သို့ပေမယ့်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အာရုံကြောဓာတုဗေဒဆိုင်ရာစိတ်ဓာတ်အပြောင်းအလဲများ (The Pits) သည်ခဏတာဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။ အချို့လူများကဤစိတ်အပြောင်းအလဲများသည်ကြာရှည်စွာပြင်းထန်မှုမကျဆင်းပါဟုပြောကြားသည်။ငယ်ရွယ် reboot နေဖြင့်ဂရပ်) ။ သူတို့အကြိမ်ရေအတွက်ကိုလျော့ချ, သူတို့ဖြစ်ပျက်သည့်အခါသူတို့ပိုမိုလျင်မြန်စွာလွန်သွားပြီးသောကဘာလဲအပြောင်းအလဲများဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲသူတို့အရှောက်သွားပါစေရန်နှင့်ကျန်းမာအာရုံ (ဒါကြောင့်ထွက်လေ့ကျင့်ခန်း, လူမှုရေး, ကာ rewiring လေ့ကျင့်ခန်း, တန်ဖိုးရှိရှိတစ်ခုခုလုပ်နေတာနှင့်) ကိုဖွင့်ဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူခြင်းနှင့်ပိုမိုလွယ်ကူရရှိသွားတဲ့။
ကြှနျတေျာ့စိတျထဲ dopamine အလုအယက်အချို့ကိုမျိုးပေါ်ခဲ့ငါ့ကိုသတိပြုမိမလိုဘဲညစ်ညမ်းမှချော်နဲ့တူတကယ်တော့ငါ့အ relapses အချို့ကိုအတော်လေးအောင်မြင်သော / ပျော်ရွှင်ရက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်အရာခပ်သိမ်းရုံဒဏ်ငွေသွားပုံရသည်ရင်တောင် Self-ထိန်းချုပ်မှုအမြဲလိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်, စိတျထဲတှငျစောင့်ရှောက်လော့။
ဤသူသညျမိမိအ graph ဖို့ဆုံးဖြတ် ကို restart အတွေ့အကြုံကို:
ပြီးခဲ့တဲ့ MO က x ၀ င်ရိုးကနေတစ်ရက်၊ ဂရပ် ၃ ခု၊ y ၀ င်ရိုးအပေါ်မူတည်သည်။ ပထမအချက်မှာကုန်ကြမ်းဒေတာဖြစ်သည်။ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ ကြင် Non-linear ပြသထားတယ်။ ကျန် ၂ ခုမှာပျမ်းမျှ ၃ ရက်ပျမ်းမျှ ၆ ရက်ပျမ်းမျှပျမ်းမျှကိုလှိမ့်နေသည်။ Non- linear နေဆဲသိသာ။ မှတ်စု: ပထမ ၅ ရက်မှာဘာတွေထည့်ရမှန်းမသိခဲ့ဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကနေရာတစ်နေရာပြီးတစ်နေရာတည်းဖြစ်နေလို့ပဲ။
လူတိုင်း၏အတွေ့အကြုံသည်အနည်းငယ်ကွဲပြားသည်။ သင့်ခန္တာကိုယ်အတွင်းရှိ ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုများမည်သို့ပေါ်လာသည်ကိုလေ့လာရန်မှာစွန့်စားခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုပြောခဲ့သည်
ဤတပ်ဖွဲ့များအားလုံးသည်အလုပ်ခွင်တွင်ဖြစ်သည်။ စိုက်ထူခြင်း၊ နံနက်တိုင်းစိုက်ထူခြင်း၊ အော်ဂဇင်မှအော်ဂဇင် / တိုက်တွန်းမှု၊ ချိုင့်ဝှမ်းခံစားမှုစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ငါ O ကိုရန်တိုက်တွန်းခဲ့ပေမယ့်ချိုနှင့်မဟုတ်သောနှင့်စိုက်ထူရှိသည်မဟုတ်ခဲ့သည့်ကြိမ်ရှိခဲ့သည်။ ငါတကယ် horny ခံစားခဲ့ရနှင့်အောက်ထပ်ဘာမျှမခံစားမိသည့်အခါကြိမ်ရှိခဲ့သည်။ ထိုအခါငါစိုက်ထူနှင့်အတူနှိုးနှင့်နေ့က၏ကျန်ပြည့်စုံ flatline အတွက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘယ်မှာရှည်လျားသောနှစ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်နေ့ ၁၆ ရက်၊ နေ့ ၂၂ ကနေ ၃၅ ရက်ကြားကအရေးကြီးဆုံးအချိန်ကာလ ၄၈ ကနေအချိန်ကုန်လွန်လာတာနဲ့အမျှအခြေအနေတွေကပိုပြီးသဟဇာတဖြစ်လာပြီဆိုတာပြသနေတယ်။
၁ နှစ် - လိင်၊ ကြမ်းတမ်းသောစွမ်းအားနှင့်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အသားအရေတွင်သက်သောင့်သက်သာရှိမှုဖြင့်ကျွန်ုပ်ဘဝကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်
၁ နှစ် - ED၊ ပျင်းရိခြင်း၊ အများကြီးပိုပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းသော, စိတ်ခံစားမှု, အာရုံစူးစိုက်, လှုံ့ဆော်မှု, စကားနှင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့။
၁ နှစ် - HOCD, ED နှင့်အခြားအကျိုးသက်ရောက်မှုများ - ယခုငါမျှဝေလိုသောအရာများစွာကိုလေ့လာသင်ယူခဲ့သည်
၁ နှစ် - ကျွန်ုပ်သည်အလွန်နှိုးဆွခြင်းနှင့်ကမောက်ကမဖြစ်မှုမရှိဘဲလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်ပြီးအခြားအကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိသည်
၁ နှစ် - ငါပျော်ရွှင်တယ်၊ ပိုကောင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချတယ်။ ငါကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတယ်
၁ နှစ် - ငါပြောင်းလဲလိုက်တာဘယ်လောက်အံ့သြရတယ်
၁ နှစ် - အဓိကပါရာဒိုင်းပြောင်းလဲမှု၊ တိုးတက်ကောင်းမွန်သောစိုက်ထူမှုများ၊ ဆက်ဆံရေးများ၊ စွမ်းအင်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှု
၁ နှစ် - အိမ်ထောင်ပြုသည်။ လိင်သည်ပိုမိုမကြာခဏကြာကြာ၊ ပိုကောင်းလာသည်။ ငါကပိုပုလ်ဖြစ်လာတယ်၊ သူကfemတ္ထိယလာလေ
၁ နှစ် - ပိုမိုတီထွင်ဖန်တီးမှု၊ စွမ်းအင်နှင့်ပျော်ရွှင်မှု၊ ရှက်စိတ်နည်းမှု၊ ဆက်ဆံရေးများတိုးတက်လာခဲ့သည်
၁ နှစ် - စွမ်းအင်နှင့်လှုံ့ဆော်မှုများပိုများလာခြင်း၊ ပို၍ ယုံကြည်စိတ်ချမှု၊
၁ နှစ် - စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ စွမ်းအင်များစွာပိုရခြင်း။
၁ နှစ် - ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ကျွန်တော်ဟာပိုပြီးတက်ကြွပြီးအသည်းအသန်လိင်မှုဘ ၀ ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။
1 နှစ် - အဘယ်သူမျှမ porn / fap: ငါဘယ်လိုပြုခဲ့တာလဲ
၁ နှစ် - Porn ဟာကျွန်တော့်ကိုယုံကြည်မှုကင်းမဲ့ပြီးစိတ်ဓာတ်ကျမှုနည်းတဲ့အားနည်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်စေခဲ့တယ်။
၁ နှစ် - သေးငယ်သောခြေလှမ်းများသည်ကြီးကျယ်သောအရာတစ်ခုကို ဦး တည်စေသည်
၁ နှစ် - ဒီနေ့သူစိမ်းတွေဟာသူတို့လိုပဲငါ့ကိုမဖွင့်ဘူး
၁ နှစ် - အကျိုးခံစားခွင့်တွေရှိတယ်၊ သင်ကြိုးစားရုန်းကန်နေရတဲ့ငွေပမာဏကများတယ်။
၁ နှစ် - ဤသည်မှာအခန်း၏အဆုံးဖြစ်သည်။ အဲဒီစွဲလမ်းမှုဟာမရှိတော့ဘူး၊ ငါဟာအပျိုမဟုတ်ဘူး။
လွန်ခဲ့သော ၁ နှစ်ကကျွန်ုပ်သည်အရူးဖြစ်၏
၁ ရက် - ရက်ပေါင်း ၉၀ လုပ်ရန် - fetishes ကို deconstructed, fetishes၊ ဆက်ဆံရေးဟာအများကြီးတိုးတက်လာတယ်
၁ နှစ် + - အောင်မြင်မှုအတွက်အာမခံချက်ပေးသောရိုးရှင်းသောအစွန်အဖျား
100 ရက် - စကားလက်ဆုံပြောဆိုခြင်းနှင့်မျက်လုံးချင်းဆုံခြင်းသည်ယခု ပို၍ လွယ်ကူစေသည်။ ငါနေ့တိုင်းပိုကောင်းနှင့်ပိုကောင်းခံစားရသည်။
ရက်ပေါင်း ၁၀၀ - ယခုလူတစ်ယောက်လိုသာမန်ခံစားချက်။
၁၁ လ - Girlfriend (အပျိုစင်မဟုတ်တော့တော့)၊ အချိန်နောက်ကျနေပြီ၊
၁၂၅ ရက် - (ED) အကျင့်ဟောင်းတွေကိုငါဘယ်တော့မှပြန်သွားမှာမဟုတ်ဘူး
ရက်ပေါင်း 180 - ယခု shit ပြုသောအမှုရောက်လာ!
ရက်ပေါင်း ၁၉၀ - မစ်ရှင်ပြီးမြောက်ပြီ။ ယခု r / nofap မှ r / pornfree သို့ပြောင်းရန်အချိန်ရောက်လာပြီ
2 လအတွင်းငါ၏အ ED ပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေမယ့်ကိုယ့်ပြန်ရောက်သွားတယ်။
၂ နှစ် - Porn & ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းစွဲခြင်း၊ ဆက်ဆံရေးပြProbleနာများ၊ ED နှင့် Flatline!
၂ နှစ်အတွင်း - ပရိုဂရမ်ကိုပြန်လည်ပရိုဂရမ်တင်သည်
ရက်ပေါင်း ၂၀၀ - ပြန်လည်ရှင်သန်ခြင်း၊ အထောက်အကူပြုသောရည်းစား၊ SUCCESS!
၂၈ လ - NoFap အကြောင်းမေ့လိုက်ပါသို့မဟုတ်သင် fap ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည်
၃ နှစ်အစီရင်ခံစာ - ပိုမိုတည်ငြိမ်မှု၊ ပိုမိုကောင်းသောလိင်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှု
3 နှစ် - ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအများကြီး
ရက် ၃၀၀ - လူမှုရေးနှင့်ပညာရေးတိုးတက်မှု၊
ရက်ပေါင်း ၃၀၀ ညစ်ညမ်း - အခမဲ့ - စိုးရိမ်စိတ်နှင့်စိတ်ကျဝေဒနာကိုသိသိသာသာလျှော့ချပေးခြင်း၊
304 နေ့ရက်များ Hardmode; ယနေ့လက်ထပ်!
399 ရက် - ငါ ED အားနည်းနေစိုက်ထူခဲ့အချို့သော: ယခုငါဝယ်လိုအားအပေါ် ** **fနိုင်
၄ နှစ် - ၁၀၀% Porn အခမဲ့ (ED)
ရက်ပေါင်း ၄၀ - ကျွန်ုပ်၏အမြင်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအမှန်တကယ်တွေ့မြင်နိုင်သည်
ရက်ပေါင်း ၄၀၁ - ပြတ်သားသောအာရုံ၊ ကျောင်းပြန်စ၊ သဟဇာတရှိသည်ဟုခံစားရသည်
470 Days - ဒါဟာရက်ပေါင်းများစွာမကပေမယ့်ဇာတ်ကောင်အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်တယ်
5 အကြောင်းရင်းအဘယ်ကြောင့်အမျိုးသားများ Porn Up ကို Give ဖြစ်ရမည် (ကောငျးအမျိုးသားများအတွက် Project မှ)
ရက်ပေါင်း ၅၀၀ - ငါကဒီမှာ၊ ငါကလူတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူး။ ငါက ၁၀ လူပဲ။
၆ လ - ED - တကယ်တမ်းကျတော့သေးငယ်သောအရာများကနှိုးဆွခြင်းကကောင်းသည်
၆ လ - ကျွန်ုပ်တွင်အလုပ်လုပ်သောလိင်တံရှိသည်။
၆ လ - ပို၍ စွမ်းအင်နှင့်စိတ်အားထက်သန်မှု၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုမိုရှိခြင်း၊ အမျိုးသမီးများနှင့်ပရောပရည်ပြုလုပ်ခြင်းသည်သဘာဝကျသည်
၆ လ - ညစ်ညမ်းမှုကင်းမဲ့သော (တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း) - ယခင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဦး စားပေးမှုများပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်
၆ လ - sensitivity ပြန်ရောက်ပြီ။ ED ပျောက်သွားပြီ
၆ လ - ဒါက ၁၇ ကြိမ်မြောက်ရုပ်ရှင်လိုပါပဲ
၆၁၇ ရက် - စူပါပါဝါများမရှိပါ။ မင်းသာရှိတယ်
၆၂၃ ရက် - ကျွန်တော့်ဇနီး၊ မိသားစု၊ ကျွန်တော့်အိမ်နဲ့ငွေကြေးတည်ငြိမ်မှုကိုဆုံးရှုံးခဲ့တယ်
၈ လကြာ၊ ငါပြန်မသွားဘူး
၈၃၂ ရက် - အိမ်ထောင်ပြုပြီးလိင်ဆက်ဆံခဲ့သော်လည်းလိင်အကျင့်ယိုယွင်းမှုမရှိဘဲလိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်လျော့ကျသွားပုံရသည်။
၈၅၀ + ရက်“ ယခုကျွန်ုပ်သည်လူတစ်ယောက်နှင့်တူလာပြီ”
၉ လ - ED: ပိုပြီးယုံကြည်မှုပိုရှိလာသည်၊ fetishes များမှေးမှိန်သွားပြီ၊ အဆင့်တိုင်း၌အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်ကျွန်ုပ်ဆက်သွယ်နိုင်သည်
၉ လ - အကယ်၍ ကျွန်ုပ်လိုအပ်လျှင်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်
၉ လ - အိမ်ထောင်သည် (ED) - ကောင်းမွန်သောယုံကြည်မှု၊
90 ရက်အကြာကျွန်မစိတ်ပျက်ပုရွက်ဆိတ်၏ဘဝ-force နဲ့စိတ်ဓာတ်ကျ, ထုံဖုတ်ကောင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယနေ့ငါ့အသက်ကိုလှည်ထားပါတယ်
ရက်ပေါင်း 90 ရက် hardmode ။ ဤမျှလောက်အမြတ်မျှော်လင့်ခဲ့ပါဘူး
တစ်ဦးကအသက်တာကို changer: နောက်တဖန်ပုံမှန်ခံစားစတင်ရန်အစွန်းရောက်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိခဲ့သူတစ်ဦးကောင်လေး မှစ. ။
လူသစ်တစ် ဦး - အပြာလိုင်းထဲကနေထွက်ရတာအရမ်းကောင်းတယ်
တစ်ဦးကလွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်, ငါ 8-10x / ရက်သတ္တပတ်အလေ့အထရှိခဲ့သည်။ ထိုအခါငါ့သမီးလမ်းလျှောက်နှင့်ညဉ့်အချိန်တွင်သူမ၏စားခွက်ထဲကခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ဖို့သင်ယူခဲ့တယ်။
တစ်နှစ်စင်ကြယ်သော။ PIED အနာကိုငြိမ်းစေ။ အတူတူအားလုံး pornstars အဘို့အကြှနျုပျ၏ gf ကုန်သွယ်မှုမဟုတ်ဘူး
(ကျမရဲ့အပျိုစင်ဘဝကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရ) စိုးရိမျခံစားခြင်းမရှိဘဲမင်းသမီးစကားပြောနိုင်ခြင်း, Motivation တိုးမြှင့်, စိုးရိမ်ပူပန်အဆင့်ဆင့်ယုတ်လျော့
PMO ၏နှစ် ၃၀ ပြီးနောက် - ကျွန်ုပ်ဘ ၀ တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံစဉ်ကာလအတွင်းစိုက်ထူခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်
NoFap နှစ်ခု 90 + နေ့ကစမ်းသပ်မှုတွေလုပ်နေတာပြီးနောက်, ဒီတစ်ခုအံ့သြဖွယ်ခရီးဖြစ်ခဲ့သည်။
များစွာသောဆုံးရှုံးမှုပြီးနောက်, တဦးတည်းနည်းလမ်းနောက်ဆုံးတော့ငါ့ကိုအောင်မြင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်အတူစာချုပ်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
နှစ်ပေါင်းများစွာ ED ပြီးတဲ့အခါကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ကျွန်တော်ဟာအကောင်းဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုကိုခံစားခဲ့ရတယ်။
အသက် ၁၃ နှစ် - လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုလျော့နည်းခြင်း၊ ယုံကြည်စိတ်ချမှုပြန်လည်ရရှိခြင်း၊ စိုက်ထူခြင်းသည်ခိုးယူခြင်းနှင့်တူသည်
အသက် ၁၃ - ဗီဒီယိုဂိမ်းစွဲစွဲလမ်းနေသောကလေးငယ်တစ် ဦး မဟုတ်တော့ပါ
အသက် ၁၄ - ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်ကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမျှမမျှော်လင့်ခဲ့သော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။
အသက် ၁၄ - ၃၆၅ ရက်အကြာ - လူကြိုက်များခြင်း၊ ဘေ့စ်ဘောပြန်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်မြတ်နိုးခြင်း၊ ကျွန်ုပ်၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုများပျောက်ကွယ်သွားခြင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်လူမှုရေးလိပ်ပြာတစ်ကောင်ဖြစ်လာသည်
အသက် ၁၄ - ကျွန်ုပ်သည်အကျိုးခံစားခွင့် ၁၀၀ ကိုစာရင်းပြုစုနိုင်သော်လည်းသင်သည်၎င်းတို့အားလုံးကိုအရင်မြင်ဖူးလိမ့်မည်
အသက် ၁၄ - ကျွန်ုပ်သည်တနေ့လုံးဗီဒီယိုဂိမ်းများနှင့်ကစားစရာများကစားနေသောအဝလွန်၊
အသက် ၁၄ - အောက်ဘက်သို့လှည့်ထွက်သွားသည်
အသက် ၁၅ - ၃ လွန်ခဲ့သောနှစ်ကကျွန်ုပ်သည် Nofap ကိုလုပ်ခဲ့ပြီး PMO သို့တဖြည်းဖြည်းပြန်သွားခဲ့သည်။ ပြောင်းလဲမှုများကိုမကြိုက်ပါ
အသက် ၁၅ - ၃၀ + ရက် - Flat Line အပြင်ခြားနားချက်။
အသက် ၁၅ - ၄၉ ရက် - ED ရောဂါပျောက်ကင်းသွားသည်။ ကျွန်တော်အခု ၁၀၀% ဘယ်နေရာမှာမဆိုရနိုင်ပါတယ်၊
အသက် ၁၅ - ၆ လ - သက်သေပြချက်အမှတ်များရပ်တန့်ပါ၊
အသက် ၁၅ - ၆ လရုန်းကန်ရသော်လည်းသိသာထင်ရှားသည့်အကျိုးကျေးဇူးများ
အသက် ၁၅ မှ ၇၇ ရက် - ကျွန်ုပ်၏ဘဝတိုးတက်ကောင်းမွန်လာသည်
အသက် ၁၅ - ရက် ၉၀၊ ၂ နှစ်ကြိုးစားပြီးသည်
အသက် ၁၅ - ရက် ၉၀ - ကျွန်ုပ်သည်လူတစ်ယောက်နှင့်မတူကြောင်းယခုငါသိပြီ
အသက် ၁၅ နှစ် - ပိုမိုကောင်းမွန်သောလှုံ့ဆော်မှု၊ ဝက်ခြံပျောက်စေခြင်း၊ စိုးရိမ်စိတ်လျော့နည်းခြင်း၊
အသက် ၁၅ နှစ် - NoFap ကကျွန်တော့်ဘဝကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲစေခဲ့သလဲ။
အသက် ၁၅ နှစ် - ငါ့ဘ ၀ ကိုပျော်မွေ့ခဲ့တယ်လို့မထင်ဘူး
အသက် ၁၅ နှစ် - စွမ်းအင်ပိုမိုများပြားလာသည်။ လူမှုရေးစိတ်ပူပန်မှုပျောက်ကွယ်သွားပြီ၊ ယုံကြည်စိတ်ချမှုပိုများလာသည်။
အသက် ၁၅ - ကျွန်ုပ်၏ညစ်ညမ်းသောအလေ့အထများကိုဘယ်တော့မျှပြန်သွားပါ
အသက် ၁၅ နှစ် - NoFap ကကျွန်တော့်ဘဝကိုစာသားအရကယ်တင်ခဲ့တယ်
အသက် ၁၅ - ကျွန်ုပ်၏ခင်မင်ရင်းနှီးမှု၊
အသက် ၁၅ - ကျွန်ုပ်ဘာသာရပ်များအားလုံးတွင် C မှ C သို့သွားခဲ့သည်။ သူငယ်ချင်းများနှင့်အသိအကျွမ်းများပိုများလာပါစေ
အသက် ၁၆ နှစ် - ယခုမိန်းကလေးများနှင့်စကားပြောဆိုရန်ယုံကြည်စိတ်ချမှု
အသက် ၁၆ နှစ် - ကျွန်ုပ်သည်နေ့စဉ်စိန်ခေါ်မှုများကိုလက်ခံပြီးရိုးရိုးလေးသာယာပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာများကိုကြိုဆိုပါတယ်
အသက် ၁၆ - ၈၀ ရက်အစီရင်ခံစာ - လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောလူတစ် ဦး
အသက် ၁၆ - ရက် ၉၀ - လူမှုရေး၊ ရှက်တတ်မှုနည်းပါးသောသူများသည်လူများကိုမျက်စိထဲသို့ကြည့်ရှုနိုင်သည်
အသက် ၁၆ - ပို၍ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်ခြင်း၊ လူမှုရေးစွမ်းရည်များတိုးတက်လာခြင်း၊ ကျွန်ုပ်မိသားစုနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာရှိခြင်း၊ ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်သည်အဆ ၁၀၀ ပိုကြီးသည်ဟုခံစားရသည်
(၁၆) နှစ်သက်တမ်းရှိ ကျွန်ုပ်တွင်ယုံကြည်မှုရှိခြင်း၊
အသက် ၁၆ နှစ် - ၅ နှစ်ခွဲအကြာသတ်သေခြင်း
(၁၆) နှစ် - သင်ပြောနိုင်သည်မှာ၊ အဘယ်ကြောင့်? ငါပြန်အသက်ရှင်ပြီလို
အသက် ၁၆ နှစ် - လိင်တူချင်းသို့မဟုတ် HOCD (ကျွန်ုပ်၏ HOCDers အတွက်ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံနှင့်အကြံဥာဏ်)
အသက် (၁၆) - ဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့်မှတ်ဉာဏ်ပြန်ခြင်း၊ ယခုဂုဏ်ပြုသောကျောင်းသား
အသက် (၁၆) - လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုများကိုဖယ်ရှားပြီးစွမ်းအင်များများရခြင်း၊
အသက် ၁၆ - အဆင့်အတန်းများ၊ အိပ်မက်များကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပြီ၊ ကျွန်ုပ်ခန္ဓာကိုယ်သည်သားရဲဖြစ်သည်
အသက် ၁၆ နှစ် - ငါလုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့အတိုင်းငါလုပ်ခဲ့ဖူးပြီးနောက်ဆုံးတော့ငါဟာပျော်ရွှင်မိတယ်။ နောက်တဖန်ငါဖြစ်သည်။
အသက် ၁၆ နှစ် - ငါဟာအားကစားကိုစွန့်ခွာခဲ့တယ်၊ ဝါသနာကိုဖြတ်ခဲ့တယ်။ ကျောင်းပြီးတဲ့နောက်မှာ ၂၄/၇ လုပ်ငန်းတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်
အသက် ၁၆ နှစ် - ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်ပိုင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိခဲ့ပြီး၊
အသက် ၁၆ နှစ် - ကျွန်ုပ်ဘ ၀ ၌ဤပျော်ရွှင်မှုကိုတစ်ခါမျှမခံစားခဲ့ဖူးပါ။ တဖန်ငါကဲ့သို့ကိုယ်ခံစားရတယ်။
အသက် ၁၆ နှစ် - ယခုတွင်ငါသည်မိန်းကလေးများ၊ လိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးကိုကွဲပြားစွာကြည့်သည်။ ကျွန်တော်လူသစ်ပါ
အသက် ၁၆ နှစ် - ငါစိတ်ဓာတ်ကျတယ်၊ မလှုပ်ရှားဘူး၊ ရှက်တတ်တယ်
အသက် ၁၆ - ငါကပိုအားသန်တယ် လူမှုရေး၊ ရင်းနှီးဖော်ရွေမှု၊ ယုံကြည်မှုရှိမှု၊ စိုက်ထူသာ။ ကောင်း၏
အသက် ၁၆ နှစ် - ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ကျွန်ုပ်၏စွမ်းအင်မည်သည့်နေရာမှလာသည်ကိုကျွန်ုပ်ပိုမိုလေ့လာသင်ယူခဲ့သည်
အသက် ၁၆ နှစ် - ယုံကြည်မှုနှင့်စွမ်းအင်ပိုမိုကောင်းမွန်မှု၊
အသက် ၁၆ နှစ် - စွမ်းအင်နှင့်လှုံ့ဆော်မှုများပိုများသောအဆင့်များ၊ ယခုတွင်ကျွန်ုပ်တွင်စရိုက်ရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ချစ်နိုင်စွမ်းရှိသည်
အသက် ၁၆ နှစ် - ကျွန်ုပ်၏အပြောင်းအလဲ (အားလုံးနီးပါး) - ၆၀ ရက်အစီရင်ခံစာ
အသက် ၁၆ နှစ် - ယုံကြည်မှုသည်လွန်စွာများပြားလာပြီးကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုခံစားရသည်။ အခမဲ့။
အသက် ၁၆ နှစ် - လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုမရှိ၊ ယုံကြည်မှုတိုးလာသည်။ ဦး ခေါင်းကရှင်းနေသည်
အသက် ၁၆ နှစ် - စွဲစွဲလန်းလန်းမဟုတ်ပေမယ့်ညစ်ညမ်းမှုကကျွန်တော့်ကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်
၁၆ နှစ် - ၁ နှစ်အခမဲ့ Porn ။ NoFap ကိုယခု
(၁၆) နှစ် - nofap လုပ်ပြီးကတည်းကငါဟာငါအတွက်တော့အပျော်ရွှင်ဆုံးပဲဆိုတာသံသယဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။
အသက် ၁၆ နှစ် - လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ထိတ်လန့်စရာများပျောက်ကွယ်သွားပြီ၊ ကျွန်ုပ်မည်သူမဆိုနှင့်စကားပြောနိုင်သည်၊
အသက် ၁၆ နှစ် - လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုပျောက်ကွယ်လုနီးပြီ
အသက် ၁၆ နှစ် - လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုပျောက်ကွယ်လုနီးပြီ။ ငါကပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိရှိ၊
၁၆ နှစ် - အကျိုးကျေးဇူးများသည်ကြီးမားသည်။ အမျိုးသမီးများ၏အာရုံစူးစိုက်မှု၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုလည်းရှိတယ်
အသက် ၁၆ - ကျွန်ုပ်တို့သည်လူမှုရေးအရအဆင်မပြေသောယောက်ျားများမှတစ်နေ့လုံးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုယောက်ျားများအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်
အသက် ၁၆ - ကျွန်ုပ်ရရှိခဲ့သည့်အရာသည်မရည်ရွယ်ဘဲဖြစ်သည်။ မိန်းမတွေကို sexthings အဖြစ်မဆက်ဆံဖို့ကျွန်မသင်ယူခဲ့တယ်
အသက် ၁၆ နှစ် - NoFap ကကျွန်တော့်အတွက်ဘာလုပ်ပေးခဲ့သလဲ
အသက် ၁၆ နှစ် - လွန်ခဲ့သောရက်ပေါင်းတစ်ရာကျော်ကကျွန်ုပ်ဘဝတိုးတက်လာသည်ကိုသင်မယုံနိုင်ဘူး
အသက် ၁၇ - ၁ နှစ် - စွမ်းအင်၊ ပျော်ရွှင်မှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချမှုတိုးလာသည်။ အကြှနျုပျ၏ဆက်ဆံရေးအကြီးအကျယ်တိုးတက်ပါပြီ။
အသက် ၁၇ - ၁ နှစ် - မိန်းကလေးများနှင့်စကားပြောရန်မကြောက်၊ မျက်လုံးချင်းဆုံနိုင်ခြင်း၊ မိန်းကလေးများသည်အရာဝတ္ထုများအဖြစ်မရှုမြင်တော့ပါ
အသက် ၁၇ - ၁၆၇ ​​နေ့များ - ကုန်ပစ္စည်းများပြုလုပ်ရန်စွမ်းအင်နှင့်လှုံ့ဆော်မှုများပိုများသည်
အသက် ၁၇ - ၃၇၆ Porn ကိုစွန့်လွှတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးသည့်နေ့များ
အသက် ၁၇ - ၅ လ: စွမ်းအင်နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုပိုမိုများပြားလာခြင်း၊
၁၇ နှစ်မှ ၅၀ ထိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများကိုကုသရန်နေ့ရက်များ
အသက် ၁၇ - ရက် ၉၀ အစီရင်ခံစာ - ကျိုးနွံစွာထိုက်တန်သည်! (ငါစွဲလမ်းမဟုတ်သော်လည်း)
အသက် ၁၇ - ရက် ၉၀ - ငါဟာလုံးဝကွဲပြားတဲ့လူတစ်ယောက်လိုခံစားရတယ်။ ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးသမီးများနှင့်ကြည့်ရှုပါ
အသက် ၁၇ - ရက် ၉၀ - ယုံကြည်စိတ်ချမှု၊
အသက် ၁၇ - ရက် ၉၀ - လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုလျော့နည်းသွားခြင်း၊
အသက် ၁၇ - ရက် ၉၀ ။ အရာရာတိုင်းသည်ကွဲပြားခြားနားပုံမပေါ်ပါ။
အသက် ၁၇ နှစ် - ဝက်ခြံပျောက်သွားခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ၏အာရုံစူးစိုက်မှု၊ အဆင့်မြင့်မှု၊ ၅၀ ပေါင်၊
အသက် ၁၇ - စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျမှုများပျောက်ကွယ်သွားခြင်း၊ ယုံကြည်မှုတိုးပွားလာခြင်း၊
အသက် ၁၇ - ကြည်လင်သော ဦး ခေါင်း၊ ကျွန်ုပ်စိတ်ကိုပြောပါ၊ ပို၍ ရက်ရောစွာနှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနိုင်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအစဉ်အဆက် initmate ကြားဆက်ဆံရေး
အသက် ၁၇ - ယုံကြည်မှု၊ စွမ်းအင်၊ ဦး နှောက်မှေးမှိန်သွားခြင်း၊ အမျိုးသမီးများကိုတန်ဖိုးထားလေးမြတ်ခြင်း
အသက် ၁၇ - ယုံကြည်မှုပိုမိုလေ့လာပါ
အသက် ၁၇ - လွန်ခဲ့သောလများကဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည့်အချိန်၌ပိုကောင်းသောဘဝကိုမရှာဖွေနိုင်ပါ
အသက် ၁၇ နှစ် - လွတ်လပ်ခွင့်ကြေငြာချက် - ၁.၅ နှစ် porn မပါဘဲ
အသက် ၁၇ - ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအသံ၊ ပိုမိုတိကျသောမှတ်ဉာဏ်၊ စွမ်းအင်နှင့်ယုံကြည်မှုပိုရှိခြင်း၊ အနာဂတ်အတွက်ပိုမိုရှင်းလင်းသောအစီအစဉ်များ
အသက် ၁၇ - စိတ်ကျရောဂါသည်လုံးဝပျောက်ကင်းသွားပြီ၊ ယုံကြည်မှုပိုရှိလာပြီးမှတ်ဉာဏ်နှင့်စွမ်းအင်တိုးတက်လာသည်
အသက် ၁၇ - ED ပျောက်ကင်းသွားသည်။ ကျွန်တော်လူသစ်ပါ
(၁၇) နှစ် - ED: ၁ နှစ်ကြာတဲ့လိင်မှုကိစ္စဟာကျွန်တော့်ကို ၁၀ နှစ်ကျော်လုံးလုံးကုထုံးကိုကုသပေးခဲ့တယ်
အသက် ၁၇ - ED: နိုးကြား၊
အသက် ၁၇ - ကျွန်ုပ်၏အထက်တန်းကျောင်းပြီးသောနှစ်ကိုအပြည့်အဝခံစားနိုင်ခြင်း
အသက် ၁၇ - ပိုကောင်းတဲ့ခံစားချက်၊ စွမ်းအင်ပိုရှိမယ်၊ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစဉ်းစားပါ၊ ငါ့ပြproblemsနာတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့သင်ယူခဲ့တယ်
အသက် ၁၇ - D's & F's မှအခန်းကဏ္honorကိုလေးစားရန်၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာမရှိတော့ပါ
အသက် ၁၇ - HOCD & ညစ်ညမ်းသော ED
အသက် ၁၇ - ငါကပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိပြီးပျော်ရွှင်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ
အသက် (၁၇) - ကျွန်ုပ်သည်လူအများစုထင်မြင်ယူဆရသောအဆင့်မြင့်သောဘဝတွင်နေထိုင်လျှက်ရှိသည်
အသက် ၁၇ နှစ် - ကျွန်ုပ်သည်ယာယီကျေနပ်မှုထက်ရေရှည်အောင်မြင်မှုကိုအာရုံစိုက်သည်
အသက် ၁၇ - ငါဟာတခြားလူတစ်ယောက်ပါ။ ငါကလူလိုပိုပြီးခံစားရတယ်
အသက် ၁၇ - စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများစွာခံစားခဲ့ရသည်
အသက် ၁၇ - ငါကြည့်ကောင်းလာပြီ
အသက် ၁၇ - ငါအတူတူပဲဖြစ်ပေမဲ့ငါ့ရဲ့လူမှုရေးစိတ်ပူပန်မှုနဲ့စိတ်ဓာတ်ကျမှုတွေပျောက်ကွယ်သွားပြီ။
အသက် ၁၇ - ယုံကြည်မှု၊ စွမ်းအင်၊ အကောင်းမြင်မှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုတိုးပွားစေသည်။ ဝေးလျော့နည်းလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု။ ပိုပြီးအမှုအရာပြီးပြီ။ ပိုများသောမိန်းကလေးဆွဲဆောင်မှု
အသက် ၁၇ - ကျွန်ုပ်၏လမ်းကြောင်းမှမြူကိုရုပ်သိမ်းလိုက်သည်
အသက် ၁၇ နှစ် - သေစေလောက်သောရောဂါ၊ ဦး နှောက်မြူ၊ မလုံခြုံ၊ ပျင်းရိ - အပြောင်းအလဲအားလုံး
အသက် ၁၇ - ရှည်လျားသောဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်၊ ကျွန်ုပ်သည် ၄၆ ရက်နေပြီးကျွန်ုပ်၏ ADHD ပျောက်ဆုံးသွားပြီ။
အသက် ၁၇ - ပိုပြီးယုံကြည်မှုပိုရှိပါစေ၊
အသက် ၁၇ နှစ် - ယုံကြည်မှုပိုရှိရန်၊ တက်ကြွသော၊ စိတ်အားထက်သန်ရန်နှင့်အရေးအကြီးဆုံးမှာ ပို၍ ပျော်ရွှင်ရန်ဖြစ်သည်။ အဲဒါကျွန်တော့်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်
အသက် ၁၇ - ပို၍ များသော (မိန်းကလေးများနှင့်အထူးသဖြင့်) အထွက်များ၊ အဆင့်များသည်အလွန်တိုးတက်လာခဲ့သည်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောမိမိကိုယ်ကိုသတိပြုမိခြင်း
(၁၇) နှစ် - လူမှုရေး၊ ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအသံ၊
အသက် ၁၇ နှစ် - ပိုအပြုသဘော၊ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ယုံကြည်မှုအရကျွန်ုပ်သည်လူမှုရေးလိပ်ပြာတစ်ကောင်နီးပါးဖြစ်သည်
အသက် ၁၇ နှစ် - ပို၍ စိတ်တိုလွန်း။ စိတ်ဖိစီးမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာကိုင်တွယ်ရန်၊ ပိုမိုလွယ်ကူစွာပြောဆိုရန်
အသက် ၁၇ - ကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်မှုသည်အလွန်နိမ့်သည်။ ယခုကျွန်ုပ်မည်သူမဆိုနှင့်အချိန်မရွေးစကားပြောနိုင်သည်
အသက် ၁၇ နှစ် - ဦး နှောက်မှေးမှိန်သွားခြင်း၊ စိတ်ကျဝေဒနာလုံးဝနီးပါးမရှိတော့သည့်အတွက်လုံးဝမုန်းတီးမှုဖြစ်လာသည်
အသက် ၁၇ - ထိတ်လန့်စရာတိုက်ခိုက်မှုများ၊ စွမ်းအင်နှင့်ယုံကြည်မှုပိုရှိခြင်း၊ ဦး နှောက်မှေးမှိန်ခြင်း၊ အိပ်စက်ခြင်းပိုကောင်းခြင်း
အသက် ၁၇ နှစ် - ယခုတွင်ကျွန်ုပ်သည်အလွန်ပွင့်လင်းပြီးပြီ၊ မည်သူမဆိုချဉ်းကပ်နိုင်ပြီးမည်သည့်အခြေအနေကိုမဆိုကိုင်တွယ်နိုင်သည်
အသက် ၁၇ - တစ်နှစ်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏လှုံ့ဆျောမှုနှင့်စွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုလျှင် nofap မှရရှိသော်၎င်းသည်အောင်မြင်သည်။
အသက် ၁၇ နှစ် - PMO ကကျွန်တော့်ကိုတားဆီးခဲ့တယ်
အသက် ၁၇ - မိန်းကလေးများကိုကွဲပြားစွာရှုမြင်ခြင်း၊
အသက် ၁၇ - ပြင်းထန်သောညစ်ညမ်းသောသွေးဆောင်မှု ED - နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသားတစ် ဦး နှင့်ထပ်တူထပ်မျှခံစားရသည်။
အသက် ၁၇ - လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ရှက်စိတ်ပျောက်သွားခြင်း။ ယုံကြည်မှုအတွက်ကြီးမားသောတိုး။ ကျွန်တော့်စိတ်ကပိုပြီးရှင်းလင်းတယ်
အသက် ၁၇ - လူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှု၊ ဦး တည်ချက်မရှိခြင်းနှင့်လူသတ်သမား ED ။
အသက် ၁၇ နှစ် - ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးမှလူငယ်လူသားခရီးစဉ်
အသက် ၁၇ - လွန်ခဲ့သော ၄၇ ရက်ကကျွန်ုပ်လူသားများခံစားခဲ့ရသည့်တစ်ခုတည်းသောအချိန်ဖြစ်သည်။
အသက် ၁၇ - စွမ်းအင်တန်ချိန်များသောအားဖြင့်မိန်းကလေးငယ်များနှင့်ပုံမှန်စကားပြောနိုင်သည်၊ အမျိုးသမီးများသည်လှပသည်
အသက် ၁၇ နှစ် - ၁၃၅ ရက်ကြာ (ED) ကိုပြန်လည်ဆယ်တင်ခဲ့သည်။
အသက် ၁၇ နှစ် - စွဲစွဲလမ်းမှုမရှိခဲ့ပါ။ စွမ်းအင်၊ ယုံကြည်မှု၊ မောင်းနှင်မှု၊
အသက် ၁၇ - ကျွန်ုပ်တို့သည်မှားယွင်းသောအတွေးအခေါ်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏စစ်မှန်သောအတွေးအခေါ်သို့ပြောင်းလဲပစ်သည်
အသက် ၁၇ - ပြောင်းလဲသွားတာကိုသင်မယုံဘူး
အသက် ၁၇ - သုည ဦး နှောက်မှေးမှိန်ခြင်း၊ လူမှုရေးစိတ်ပူပန်မှုပျောက်ကွယ်သွားပြီး၊ Libido ပြန်လှည့်လာသည်
အသက်အရွယ် 17 - နောက်ထပ်အချိန်, ဖြောင့်တစ်ဦးကဖွင့်, စိတ်ချလက်ချလူတွေကိုစကားပြော
အသက် ၁၈ - ရက် ၁၀၀ ။ ဦး နှောက်မြူ၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊
အသက် ၁၈ - ၁၀၂ ရက်။ ကျွန်ုပ်၌ယုံကြည်မှုနှင့်စစ်မှန်သောဆက်ဆံရေးရှိသည်
အသက် ၁၈ - ရက် ၃၀ ရက်အစီရင်ခံစာ။
အသက် ၁၈ - ၃၆၅ ရက် - ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးများကိုကွဲပြားစွာမြင်သည်၊ ပညာရေးတိုးတက်မှု
အသက် ၁၈ - ၆ လအစီရင်ခံစာ။ ကျွန်ုပ်တွင် ED နှင့်ထိခိုက်လွယ်မှုမရှိခဲ့ပါ
အသက် ၁၈ - ရက် ၆၀ - ကျွန်ုပ်စပြီးကတည်းကကျွန်ုပ်တို့၌ကောင်းသောအရာများသာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
အသက် ၁၈ - ရက် ၉၀ နှင့်ယခုဒုတိယဘဝဖြစ်သည်။
အသက် ၁၈ - ရက် ၉၀၊ ယုံကြည်မှုတန်ချိန်၊ လူမှုရေးအရများစွာဖြစ်သည်
အသက် ၁၈ - ၆ လကြာအပြောင်းအလဲ
အသက် ၁၈ - မြူရုပ်သိမ်းပြီ အဘယ်သူမျှမကပို objectify အမျိုးသမီးများ, လူမှုရေး။
အသက် ၁၈ - အလုပ်ခွင်၌ချီးမွမ်းစကားများခြင်း၊ ယေဘုယျအားဖြင့် ပို၍ လေးစားခြင်း
အသက် ၁၈ - ၄.၅ နှစ်ကြာကြိုးစားပြီးနောက်ရက်ပေါင်း ၉၀ ရောက်ပြီ
အသက် ၁၈ - မတိုင်မီကကျွန်ုပ်သည်အတန်းတင်ပြသခြင်းကိုလုံးဝအသေအချာမသိခဲ့။ ငါအုပ်စုအလုပ်ကိုမုန်း၏
အသက် ၁၈ - မွေးနေ့အကောင်းဆုံးမွေးနေ့ - စာသား NoFap တစ်နှစ်ပြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာအမှန်တကယ်ကလစ်နှိပ်လိုက်ပါ
အသက် ၁၈ - ကျွန်တော့်အခွံထဲကထွက်လာပြီးနောက်ဆုံးမှာကောင်မလေးရနိုင်လာတယ်
အသက် ၁၈ - ED & နှောင့်နှေးနေသောသုတ်ရည်လွှတ်မှုပျောက်ကင်းသွားသည်။ အားလုံးသည်အစတွင်အလွန်မျှော်လင့်ချက်မဲ့နေပုံရသည်
အသက် ၁၈ - ED & PE: ရက်ပေါင်း ၈၀ - ယခုစိတ်ကူးယဉ်လိင်ဆက်ဆံပါ။
၁၈ နှစ် - ED ဟာကုသပြီးပြီ
အသက် ၁၈ - ED သည်ရောဂါပျောက်ကင်းပြီးစိုးရိမ်စိတ်နည်းလာသည်
အသက် ၁၈ - ED ပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးခြင်း
အသက် ၁၈ - ED ပျောက်ကင်းသွားသည်။ ယခုတွင်ငါသည်အမျိုးသမီးများသည်သူတို့ကိုကန့်ကွက်မည့်အစားလှပသောလူများအဖြစ်ရှုမြင်သည်။
အသက် ၁၈ - ED သွားပြီ စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့ ပိုပြီးလူမှုရေး။
၁၈ နှစ် - ED - ရက်ပေါင်း ၁၃၀
အသက် ၁၈ - စွမ်းအင်နှင့်ယုံကြည်မှုပိုမိုရရှိပြီးနေ့စဉ်မိန်းကလေးများမှာလည်းဆွဲဆောင်မှုရှိသည်
အသက် ၁၈ နှစ် - ပျော်ရွှင်မှုခံစားရ၊ ပိုမိုအကောင်းမြင်သောယုံကြည်မှုရှိပြီးလှုံ့ဆော်မှုခံရသည်။ စွမ်းအင်ပိုကြီးသည်။ အများကြီးပိုကောင်းအဆင့်။ လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိတော့ပါ
အသက် ၁၈ - ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေမှုမှလူသစ်သို့ပြောင်းလဲခြင်း
အသက် ၁၈ နှစ် - ယုံကြည်မှုပိုမိုကြီးထွားလာခြင်း၊ ရှားပါးစွာရွှေ့ဆိုင်းခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ၊ ဆက်ဆံရေးနှင့်လိင်ကိုပိုမိုရှုထောင့်နှင့်ပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
အသက် ၁၈ - စွမ်းအင်ပိုကြီးသည်။ ပိုပြီးယုံကြည်မှု။ ငါလူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်လျော့နည်းခံစားရတယ်နှင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်အကြောင်းကိုကောင်းသောခံစားရတယ်။ မိန်းကလေးတွေကနေရာတိုင်းငါ့ကိုကြည့်နေတယ်
အသက် ၁၈ - ပို၍ ပျော်ရွှင်သော၊ စိတ်အားတက်ကြွသော၊ စွမ်းအင်တိုးတက်ခြင်း၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောစိုက်ထူခြင်း
(၁၈) နှစ် - FemDom စွဲလမ်းမှုကိုငါဘယ်လိုကန်ခဲ့လဲ
အသက် ၁၈ နှစ် - ကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ခဲ့ရသောဘဝတိုးတက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်သည်အလွန်အံ့အားသင့်ပြီးအံ့အားသင့်ခဲ့သည်
အသက် ၁၈ - ကျွန်ုပ်သည် ပို၍ ယုံကြည်မှုရှိပြီးရင့်ကျက်သောခံစားမှုကိုခံစားနေရသည်။ ဆက်ဆံရေးပိုကောင်းဖြစ်ကြသည်။ မိန်းကလေးများကသတိပြုမိလာခြင်း
အသက် ၁၈ - ဘုရား၌ရှိသောလူကိုပုံမှန်လူသားတစ် ဦး အနေဖြင့်သူကပြောတယ်
အသက် ၁၈ - မိန်းမများကိုကျွန်ုပ်မဖော်ပြလိုတော့ပါ။
အသက် ၁၈ - ကျွန်ုပ်ဘဝ၌ယခင်ကထက် ပို၍ ပျော်ရွှင်မိသည်။
အသက် ၁၈ - ကျွန်ုပ်သည် ပို၍ ယုံကြည်မှုရှိပြီးမိန်းကလေးများနှင့်နီးကပ်သည်။ ငါသူတို့နှင့်အမှန်တကယ်ဆက်သွယ်နေသလိုခံစားရသည်
အသက် (၁၈) နှစ်မှ (၃၉) နှစ်အတွင်းပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ nofap တွင်ယခုနှစ်အောင်မြင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
အသက် ၁၈ - ကျွန်ုပ်၌သူငယ်ချင်းများများစားစားရှိပြီးလူမှုရေးအခြေအနေများကိုလည်းမကြောက်တော့ပါ
အသက် ၁၈ - ကျွန်ုပ်သည်ဘုရားသခင်တစ်ပါး၏လှုံ့ဆော်မှုခံရသည်။ ကျွန်တော်လုပ်ချင်ရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး
အသက် ၁၈ - ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အသားအရေ၌အဆင်ပြေပါသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်မည်သူ့ကိုမျှစကားမပြောနိုင်ပါ၊
အသက် ၁၈ - လွန်ခဲ့သော ၆ လတာကာလ၌ကျွန်ုပ်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအချိန်ရှိခဲ့ပြီး၊ ပထမ ၃ နှစ်ခွဲအထက်နှစ်ကျောင်းပေါင်းများစွာထက်အမှတ်တရများပိုမိုပြုလုပ်ခဲ့သည်
အသက် ၁၈ - ကျွန်ုပ်၏ရိုးသားသောထင်မြင်ချက်အရ NoFap သည်ကျွန်ုပ်တို့ယောက်ျားများ၏အစစ်အမှန်အလားအလာကိုထုတ်ဖော်ပြသသည်
အသက် ၁၈ - သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါသန္ဓေတည်သွားပြီ၊
အသက် ၁၈ - ယုံကြည်မှုပိုမိုတိုးမြှင့်လာခြင်း၊
အသက် ၁၈ - အမြဲတမ်းတပ်မက်သောစိတ်၊ ငါဘယ်တော့မျှကျေနပ်ရောင့်ရဲခြင်းမရှိ၊
အသက် ၁၈ - လူမှုရေးအရအဆင်မပြေမှုနည်းပါးပြီးအာရုံစူးစိုက်မှုနည်းပါးပြီး ၅ နှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ရည်းစားရခဲ့သည်
အသက် ၁၈ - ပိုမိုရည်မှန်းချက်ကြီးသော၊ စွမ်းအားရှိမှု၊ ယုံကြည်မှုရှိမှု၊ စိတ်ရှည်မှု၊ ပျော်ရွှင်မှုနှင့်အထွက်များ
အသက် ၁၈ နှစ် - လူမှုရေးအရပိုမိုယုံကြည်မှုနှင့်စွမ်းအင်ပိုရနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်မိန်းကလေးများနှင့်
၁၈ နှစ် - စွမ်းအင်၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းမှု၊ ကျောင်းကပိုတောင်လွယ်တယ်၊ လူအားလုံးနဲ့စကားပြောနေတယ်
အသက် ၁၈ နှစ် - အမျိုးသမီးများပိုမိုလေးစားမှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှု၊ မျက်စိစက်ဝိုင်းများပျောက်ကွယ်သွားခြင်း၊
အသက် ၁၈ - အဲဒီမှာအာရုံခံနိုင်စွမ်းပိုများလာတယ်၊ အော်ဂဇင်ကောင်းကောင်းနဲ့ကျွန်တော့်ဘဝကိုပြောင်းလဲလိုက်တယ်။
အသက် ၁၈ - ပိုပြီးယုံကြည်မှုအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများနှင့်ဖြစ်သည်
အသက် ၁၈ နှစ် - စွမ်းအင်အသစ်၊
အသက် ၁၈ - လိင်ဆက်ဆံစဉ်အတွင်း၌အာရုံခံစားမှုမရှိပါ
အသက် ၁၈ - ပုံ - F ** k ဟုတ်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးအောင်မြင်သောလိင်
အသက် ၁၈ - ညစ်ညမ်းရုပ်ထွက်ခြင်းမှပြproblemsနာအားလုံးကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါ၊ သို့သော်သံသရာကိုအဆုံးသတ်ခြင်းသည်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်သို့ရောက်ရန်အလွန်ကြီးမားသောခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
(၁၈) နှစ်မှ (၅) နှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးသည်
အသက် ၁၈ - မဆုတ်မနစ်အာရုံစူးစိုက်မှု၊ ပိုထွက်လာပြီးယုံကြည်မှုရှိခြင်း
အသက် ၁၈ - ပြင်းထန်သော HOCD - ကျွန်ုပ်၏ပထမ ၈ လ
အသက် ၁၈ - တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျိန်းသေငါ့အကျင့်ဟောင်းဖြစ်လာသည်
၁၈ နှစ် - အကျိုးကျေးဇူးများစွာ (၁၂၁ ရက်)
အသက် ၁၈ - ဒီစွဲလမ်းမှုကကျွန်တော့်ကိုဒီကမ္ဘာမှာမှတ်သားနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းနဲ့ ED ကိုပေးခဲ့တယ်
၁၈ နှစ် - မင်းရဲ့ရဲရင့်မှုကိုပြန်လည်ရခြင်းအကြောင်းပါ။ ဒါကအမျိုးသမီးတွေကိုဆွဲဆောင်တာပါ။
၁၈ နှစ် - ဒီခရီးကို ၉ လအတွင်းအပြုသဘောဆောင်တဲ့စွမ်းအင်ရှိစေတယ်
အသက် ၁၈ - လူမှုရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်လူများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းကိုမုန်းတီးသည်
၁၈ နှစ် - လူမှုရေး၊ ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအသံ၊ ကျွန်ုပ်မရပ်တန့်နိုင်ဟုခံစားရသည်
အသက် ၁၈ - NoFap ဖြင့်ကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်အသက်ရှင်နေထိုင်ပြီးအမှန်တကယ်လူတစ်ယောက်လိုခံစားခဲ့ရသည်
အသက်အရွယ် 18 - ငါအခုလည်ပတ်လူ့ဖြစ်လျက်ရှိပေါ့
အသက် ၁၉ - (ED & DE) စိတ်ကျဆင်းမှုလျော့နည်းလာခြင်း၊
အသက် ၁၉ - ED (HOCD) - နှစ် ဦး စလုံးသည်နောက်ဆုံး၌ပျောက်ကွယ်သွားသော်လည်း၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်သည်
အသက် ၁၉ - (အေဒီ) ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လကစပြီးငါအကြိမ်ပေါင်း ၂၅၀ ကျော်ထပ်ခါထပ်ခါပြုခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့ရက်ပေါင်း ၉၀ ထိရောက်သွားတယ်
အသက် ၁၉ - (ED) စိုးရိမ်စရာများစွာရှိသည်
အသက် ၁၉ - လွန်ခဲ့သော ၁ နှစ်ကကျွန်ုပ်သည်ချိန်းတွေ့ရန်အလားအလာမရှိသောနယ်စပ်ဒေသစိတ်ဓာတ်ကျသည့်လူမှုရေးအရစိုးရိမ်ပူပန်သောရှက်တတ်သူဖြစ်သည်
၁၉ နှစ် - ၁ နှစ်ရုန်းကန်ရမှု - ရက်ပေါင်း ၉၀ ရက်၊
အသက် ၁၉ - ၁ နှစ် - ကျွန်ုပ်သည်ရုပ်သိမ်းခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းသောဆိုးကျိုးများမှကင်းလွတ်သည်။
အသက် ၁၉ - ၂၈ ရက် (ED)
အသက် ၁၉ - ၃၆၅ နေ့ရက်များ - ကျွန်ုပ်သည်နေ့သစ်ကိုကြည့်။ ပျော်ရွှင်စွာနေ့တိုင်းထခဲ့သည်
အသက် ၁၉ - ၆ လ။ ၂၀၁၃ နွေရာသီမတိုင်မီကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ပင်မမှတ်မိ
အသက် ၁၉ နှစ်မှ ၇ လအထိကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ပြင်းထန်သော Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျမှုများကိုပြုပြင်နိုင်ခဲ့ပြီး၊
အသက် ၁၉ - ၇ လ: ED သွားပြီ၊ စွမ်းဆောင်ရည်၊
အသက် ၁၉ - ၇၈ ရက် ED ကုသ, PE ကုသ, DE ပျောက်ကင်းအောင်ကုသ!
အသက် ၁၉ - ရက် ၉၀ ။ ကျွန်ုပ်သည်ပိုမိုယုံကြည်မှုရှိကြောင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုသတိထားမိသော၊
အသက် ၁၉ - ရက် ၉၀ ။ ကျွန်ုပ်သည်ဤအရာကိုကြာမြင့်စွာမခံစားရပါ။
အသက် ၁၉ - ရက် ၉၀ - အခြားသူများပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ပိုမိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပြီးမျက်လုံးချင်းထိခြင်း
အသက် ၁၉ - စိုးရိမ်ပူပန်မှုလျော့နည်းသွားပြီးမိန်းကလေးများကိုနမ်းခြင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သော၊ ပျော်ရွှင်သောသူဖြစ်သည်
အသက် ၁၉ - ဆိုးရွားသည့်ရောဂါပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်ခြင်း။ ကျွန်ုပ်သည်လိင်တူချစ်သူလားမခက်ခဲသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်လိင်တူချစ်သူလားမေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။
၁၉ နှစ် - ယခုမိန်းကလေးများနှင့်ပုံမှန်စကားလက်ဆုံပြောဆိုနိုင်ပြီ
အသက် ၁၉ - အသားအရေကြည်လင်ပြီးစွမ်းအင်ပိုမိုများပြားသည်။ ကျွန်ုပ်မျက်စိအတွင်းရှိလူများကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်
အသက် ၁၉ - ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအသံ၊ စွမ်းအင်ပိုမိုများပြားမှု၊ လူမှုရေးစိတ်ပူပန်မှုနည်းပါးခြင်း၊ မျက်စိနှင့်ထိတွေ့ရန်လွယ်ကူခြင်း၊
အသက် ၁၉ - ED ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်ခြင်း (PMO မရှိရက်ပေါင်း ၁၁၀ ကျော်)
အသက် ၁၉ - ED သည်ရက်ပေါင်း ၃၀ တွင်ကုသပေးခဲ့သည်
အသက် ၁၉ - ED သည်ရက်ပေါင်း ၁၂၀ အတွင်းကုသခံခဲ့ရသည်
အသက် ၁၉ - ED သည်ကုသခြင်း၊
၁၉ နှစ် - ED၊ ၁၄၉ ရက်
အသက် ၁၉ - ED၊ စိတ်ဓာတ်ကျနေသူ၊ လူမှုရေးဆန့်ကျင်မှု၊ အဆင့်အတန်းမကောင်းသော၊
၁၉ နှစ်မှ ၁၉ နှစ်၊
၁၉ နှစ် - ED၊ အပြောင်းအလဲများအကြောင်းစဉ်းစား
အသက် ၁၉ - အေဒီ - ၃၃ ရက်တွင်လိင်သည်ယခုအံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။
အသက် ၁၉ - အေဒီ: ကျွန်ုပ်၏တစ်လမှတ်တမ်း
၁၉ နှစ် - ED - အမြန်ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည်။ ၄ နှစ်ပျက်ကွက်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်၏တပ်မက်မှုသည်တဖြည်းဖြည်းပြန်လာသည်ကိုခံစားနိုင်သည်။
အသက် ၁၉ - ဝတ်စားဆင်ယင်မှုကင်းသော၊ စွမ်းအင်ပြည့်ဝသောနှင့်အာရုံစိုက်ထားသောမိန်းကလေးများသည်ငါ့ကိုကွဲပြားစွာကြည့်ရှုကြသည်
အသက် ၁၉ - ပို၍ ရင်းနှီးသော၊ ပို၍ အဆင်ပြေသော၊ ရဲရင့်ခြင်း၊ လူများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းသည်ဘယ်သောအခါမျှမလွယ်ကူခဲ့ပါ။
အသက် ၁၉ နှစ် - ကောင်းမွန်စွာခံစားပါ။ ယုံကြည်မှုတိုးလာသည်။ အိပ်စက်အနားယူသည်။ သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများနှင့်ဆက်ဆံရေးပိုကောင်းသည်။ အမျိုးသမီးများအပေါ်ကောင်းမွန်သောအမြင်များ
၁၉ နှစ် - ၂ နှစ်ကြိုးစားပြီးနောက် ၉၀ ဘဝပြောင်းလဲမှုသည်မယုံနိုင်စရာပင်!
(၁၉) နှစ် - အီရတ်တွင်အတင်းအဓမ္မပြန်ဖွင့်သည်။ ယခုငါကျွန်ုပ်၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာများကိုနားလည်ပါပြီ
အသက် ၁၉ - ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးအလုပ်ရရှိခဲ့ပြီးပထမဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်
အသက် ၁၉ - ပိုပြီးပျော်ရွှင်မှုရှိပြီးယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊
အသက် ၁၉ - ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိလူများရှိခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏အပြားကိုကုသနိုင်သည်
၁၉ နှစ် - HOCD နှင့် ED
၁၉ နှစ် - HOCD - ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုလျှော့မတွက်ပါနဲ့
အသက် ၁၉ - ကျွန်ုပ်သည်ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းသော၊ သာမာန်အမျိုးသမီးများအား ပို၍ ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်ဟုရှုမြင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုများတဖြည်းဖြည်းမှေးမှိန်လာသည်
အသက် ၁၉ - ကျွန်ုပ်သည်မိမိကိုယ်ကိုသာမကအခြားသူများနှင့်ပါစိတ်လှုပ်ရှားမှုပိုင်းဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုရှိသည်ဟုခံစားရသောအလွန်သတိထားမိသောလူတစ်ယောက်ဖြစ်လာသည်။ ငါထုံနေတော့တယ်
အသက် ၁၉ နှစ် - PMO ကိုရပ်ပြီးကတည်းကကျွန်ုပ်ရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ပြည့်စုံသောစာရင်းတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်လုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်အရာအားလုံးသည်ဤစကားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည် - ချစ်ခြင်း။
အသက် ၁၉ - ငါမွေးဖွားလာသည်ဟုခံစားရသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသည့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုပိုင်းဆိုင်ရာတည်ငြိမ်သောမြည်းဖြစ်သည်
အသက် ၁၉ - Fapping & Porn သည်အလွန်အန္တရာယ်များသည်ဟုကျွန်ုပ်လုံးဝမထင်ခဲ့ပါ။
အသက် ၁၉ - လူဂုဏ်အသရေကိုလူသားတို့တွင်တွေ့မြင်ရသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ပို၍ ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်
အသက် ၁၉ - ကျွန်ုပ်သည် Nofap ကိုသံသယတစ်ခုအဖြစ်စတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပြproblemနာရှိကြောင်းသံသယကင်းစွာဖြင့် ၁၀ ရက်ကြာခဲ့ပြီးယခုမနက် ၅၀ တွင် nofap ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
အသက် ၁၉ - ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးများကိုကွဲပြားစွာရှုမြင်သည်။ ယုံကြည်မှုပိုရလာသည်
အသက် ၁၉ - ကျွန်ုပ်သည်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားခြင်း၊ ရှက်ခြင်း၊
အသက် ၁၉ - ကျွန်ုပ်သည် ၁၃ နှစ်တွင်အမာခံ fetish အချိန်ကာလတစ်ခုတွင် ၁၀ ခုကြည့်ရှုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ် ၁၄ နှစ်အရွယ်တွင်ခဲယဉ်းသည်။
အသက် ၁၉ - ငါတကယ့်ကမ္ဘာကိုပျော်မွေ့ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်ရန်သင်ယူသည်
အသက် ၁၉ - ကျွန်ုပ်သည်ပုဂ်ဂိုလျနှင့်ပိုမိုလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုခံရသည်
အသက် ၁၉ - ညစ်ညမ်းသောဘဝတွင်နေထိုင်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုကျွန်ုပ်ခံစားခဲ့ရသည်။ လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ်က ၅၉၉ နှစ်ကျော်
အသက် ၁၉ နှစ် - လိင်ဆက်ဆံနေသမျှကာလပတ်လုံးငါ ED ခံစားခဲ့ရသည်
အသက် ၁၉ - ကျွန်ုပ်သည် ပို၍ အာရုံစူးစိုက်သည်၊ ပိုမို၍ စွမ်းအင်ပြည့်ဝသည်၊ ကျွန်ုပ်သည် ပို၍ ကြိုးစားလုပ်ကိုင်သည်၊ ကြာရှည်စွာအလုပ်လုပ်သည်၊ ကျွန်ုပ်၏ gf နှင့်ကျွန်ုပ်၏ဆက်ဆံရေးသည်အရှိန်အဟုန်မြင့်တက်လာသည်
အသက် ၁၉ - ပိုမိုစွမ်းအင်ပြည့်ဝသော၊ ၁၀ စက္ကန့်အတွင်းချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိတော့ပါ။
အသက် ၁၉ - ပိုမိုပွင့်လင်း။ ဖော်ရွေပျူငှာသော၊ ပျော်ရွှင်သော၊
အသက် ၁၉ - ပို၍ ယုံကြည်မှုရှိပြီးလှုံ့ဆော်မှုများခံရပြီး၊ ဝမ်းနည်းခြင်းသို့မဟုတ်ရေလောင်းခြင်းများမရှိတော့ပါ
၁၉ နှစ် - ကျွန်ုပ်၏ဖခင် - အသက် ၅၃ နှစ်တွင်စစ်မှန်သော Fapstronaut
အသက် ၁၉ - လူထုရှေ့စကားပြောခြင်းနှင့်အတူရုန်းကန်နေရခြင်းသည်အခြားသူတစ် ဦး နှင့်တူသည်
၁၉ နှစ် - NoFap + လိင် = ထူးဆန်းသောလိင်ဆိုင်ရာဖျက်ခြင်းများကိုဖျက်ဆီးပစ်သည်
၁၉ နှစ် - NoFap၊ ငါ့ဘဝမှာအကောင်းဆုံးအရာတွေလုပ်နိုင်ခဲ့တယ် !!
(၁၉) နှစ် - ED ရောဂါပျောက်ကင်းသွားသောရောဂါ - ယခုငါနှင့်အတူအခြေချချင်သောမိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်
အသက် ၁၉ - ညစ်ညမ်းရောဂါမှ ED ရောဂါပျောက်ကင်းသွားသည်။ ပြန်သွား၏ အခုငါထပ် ED ရပြီ
အသက် ၁၉ - ဆက်ဆံရေးပိုကောင်းသော၊ လူမှုရေးပိုကောင်းသည်၊ ကျွန်ုပ်သည် ပို၍ ပျော်စရာကောင်းသည်၊ ငါ့အတန်း၏ထိပ်တန်းဖြစ်သည်
အသက် ၁၉ - စွမ်းအင်ဤမျှလောက်၊ ADHD ဆေးများလျှော့ချခြင်း၊ အဆင့်များတိုးတက်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်၏စိတ်ဓာတ်ကျမှုကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့သည်
၁၉ နှစ် - ယုံကြည်စိတ်ချမှုပိုများလာရန်၊ စွမ်းအင်ပိုမိုများပြားရန်၊
(၁၉) နှစ် - ပို၍ လှုံ့ဆော်မှုနှင့်စွမ်းအင်များ၊ အမျိုးသမီးများနှင့်ပေါင်းသင်းခြင်း၊
(၁၉) နှစ် - NoFap ကကျွန်တော့်အပေါ်အပြောင်းအလဲများစွာကိုတိုင်းတာ။ မရနိုင်ပါ။
အသက် ၁၉ - ကျွန်ုပ်ဘဝ၏အကောင်းဆုံးရက် ၉၀
အသက် ၁၉ - ၆ လနောက်ပိုင်းမှာသင်ကြားခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာ
၁၉ နှစ် - ဒီဖြစ်စဉ်ဟာသိပ်ပြီးမများပါဘူး
အသက် ၁၉ - အမျိုးသမီးများအားကွဲပြားစွာရှုမြင်ပါ၊ ပို၍ ယုံကြည်မှုရှိကြောင်း၊ ဖော်ပြမှု၊ အာရုံစူးစိုက်မှု၊
၁၉ နှစ် - အပျိုစင်၊
အသက် ၂၀ - (DE, ပျော့ ED) ကျွန်ုပ်ဘဝတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုချစ်သည်
အသက် ၂၀ - (ED) ပိုမိုကောင်းမွန်သောခံစားချက်များနှင့်စိုက်ထူမှုများ
အသက် (၂၀) ​​- (ED) ပိုမိုရှင်းလင်းသောစိတ်၊ တည်ငြိမ်မှု၊
အသက် ၂၀ - (ED) ငါးပတ်အစီရင်ခံစာ
အသက် ၂၀ - (ED) ပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက်ကိုးလလိုအပ်သောကောင်မလေးပြန်ကောင်းလာရန်
အသက် ၂၀ - (အေဒီ) ၂၁၂ ရက်နှင့်နေဆဲကုသမှု
အသက် ၂၀ - ၁၈၀ ရက် P၊ M၊ O မပါသည့်နေ့ရက်များ ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်သည်စိတ်လှုပ်ရှားမိသည်။
အသက် ၂၀ - ၂၅၀ ရက် - ကျွန်ုပ်၏သူရဲကောင်းသည် ၁၀ နှစ်အတွင်းကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်သည်။
အသက် ၂၀ မှ ၄ ပတ်အအေးကြက်ဆင်မွေးပြီးရက်သတ္တပတ်များစွာအကျိုးကျေးဇူးများစွာခံစားခဲ့ရသည်။
အသက် ၂၀ - ၉၀ ရက်အစီရင်ခံစာ - ၎င်းသည်ကျိုးနပ်ပါသည်
အသက် ၂၀ - ရက် ၉၀ ရက် hardmode! လူသစ်တစ် ဦး နှင့်တူခံစားရန်စတင်
အသက် ၂၀ - ၉၀ ရက် - ထောင်မှလွတ်မြောက်ရန် (ကျွန်ုပ် NoFap မတိုင်မီ pussy နည်းနည်း)
အသက် ၂၀ - ၉၀ ရက် - နောက်ကျသောသုတ်ရည်လွှတ်မှုမရှိခြင်း၊
အသက် ၂၀ - ၉၀ ရက် ဘဝပြောင်းလဲခြင်းအတွေ့အကြုံ :)
အသက် ၂၀ - အကျိုးခံစားခွင့်များစွာ (ED)
အသက် ၂၀ - ယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်ပြုတ်ကျပြီးနောက်ကျွန်ုပ်ထင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရန်ပြန်သွားပါ။
အသက် ၂၀ - လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုအနည်းငယ်မှသည် alpha သဘောထားသို့တိမ်တိုက်လွတ်အတွေးများ
အသက် ၂၀ - စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းသောလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုပျောက်ကွယ်သွားပြီ၊
အသက် ၂၀ - ED & DE ရက် ၁၅၀ အောင်မြင်သောလိင်ဆက်ဆံမှု
အသက် ၂၀ - ED & libido ပျောက်ကင်းသွားသည်။ စိတ်မပူပါနဲ့
အသက် ၂၀ - ED နှင့်လိင်စိတ်နည်းခြင်း - ရက်ပေါင်း ၁၅၀
အသက် ၂၀ - ED နှင့်အချိန်မတန်မီသုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းသည်အခြားအကျိုးကျေးဇူးများစွာကိုကုသပေးခဲ့သည်
အသက် ၂၀ - ED သည် ၁၀ လအတွင်းကုသသော်လည်းကောင်းလာသည်။
အသက် ၂၀ - ED သည်ပျောက်ကင်းသွားသော်လည်း ၉၀ ရက်ပြန်လည်စတင်စဉ်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်
အသက် ၂၀ - ED ရောဂါပျောက်ကင်းသွားပေမယ့်ကျွန်တော်ကမျက်နှာပြင်ပေါ်ကနေခြစ်ခြစ်နေတယ်
အသက် ၂၀ - ED ပျောက်ကင်းသွားပြီ၊
အသက် ၂၀ - ED ရောဂါပျောက်ကင်းသွားပြီ၊ ငါဟာ ၁၀၀x ပိုပြီးမိန်းကလေးတွေကိုဆွဲဆောင်တယ်၊ ပြီးတော့ငါနဲ့အတူပိုနေတယ်
အသက် ၂၀ - ED ရောဂါပျောက်ကင်းသွားပြီ၊ နံနက်သစ်သားသည်နောက်ကျောပြန်လာပြီ၊ ပို၍ လူမှုရေးအရယုံကြည်မှုရှိမည်၊
အသက် ၂၀ - ED ပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးခဲ့ပြီး၊ အခြားကောင်းမွန်သောအကျိုးကျေးဇူးများစွာ (ဒုတိယ reboot)
အသက် ၂၀ - ဆေးကုသမှုခံယူပြီးနောက် ED သည်ရက်ပေါင်း ၂၀၀ ကြာသည်
အသက် ၂၀ - ဆေးကုသမှုခံယူခဲ့သည့် ED! Viagra အတွက်မလိုအပ်တော့ပါ။
အသက် ၂၀ - ED ရောဂါပျောက်ကင်းသွားသည်။ ငါဘယ်တော့မှမပျော်ဘူး ပိုကောင်းတဲ့ Tourrettes
အသက် 20 - နှစ်ပေါင်း ED ။ ကျွန်တော့်ရဲ့နောက်ဆုံးဆက်ဆံရေးပျက်ပြားသွားတယ်
အသက် ၂၀ - ED သည် ၂ လအတွင်းကုန်သွားသည်။ ခေါင်မိုးမှတဆင့်ယုံကြည်မှု။ ဘဝမှာအကြီးအလုပ်နေတာ။
အသက် ၂၀ - ED ပျောက်ကွယ်သွားပြီ၊ ယုံကြည်မှုတိုးလာသည်။ လူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်လျော့နည်းလာသည်။ လိင်အရသာပြန်ပြောင်းလာသည်။
အသက် ၂၀ - ED: ၁၁၃ ရက် - လိင်သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ Nofap အလုပ်လုပ်တယ် !!
အသက် ၂၀ - ED: ယုံကြည်မှုပြန်ရုတ်သိမ်း၊
အသက် ၂၀ - ED - လိင်ကိစ္စသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းထက်ဆယ်ဆပိုကောင်းသည်သာမကကျွန်ုပ်သည်ဘဝကို ပို၍ နှစ်သက်သည်
အသက် ၂၀ - ED: အချို့သောဆေးများပြန်လည်သောက်ခြင်းသည် ၁၉၁ ရက်ဖြစ်သည်
အသက် ၂၀ - ED: တစ်ချိန်ကကုသခံခဲ့ရပြီးစေ့စပ်ခဲ့သည်၊ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကြောင့် ED ကြောင့်ငါသူမနှင့်ကွဲသွားခဲ့သည်
အသက် ၂၀ - ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကျဆုံးခြင်း။ နွေ ဦး ရာသီ 20. ဒင်းရဲ့စာရင်း။ ငါ့ဘဝမှာအမြင့်ဆုံး GPA
အသက် ၂၀ - ပြောင်းလဲသွားတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်လိုခံစားရတယ်၊ မိန်းကလေးတွေနဲ့စကားပြောရတာတောင်စိတ်မပူပါနဲ့
အသက် ၂၀ - အဆင့်များတိုးတက်လာခြင်း လူမှုရေး၊ စွမ်းအင်ပိုများမှု၊ စိတ်ဓာတ်မကျမှု၊
အသက် ၂၀ - ယုံကြည်မှုပိုမို၊ အခြားသူများနှင့်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောဆက်နွယ်မှု
အသက် ၂၀ - ၇ နှစ်ကြာသုတ်သင်ပယ်ရှင်းပြီးနောက်အနာပျောက်ခဲ့သည်
အသက် ၂၀ - မြင့်မားသောယုံကြည်မှုနှင့်စွမ်းအင်၊ လူတိုင်းနှင့်မျက်လုံးချင်းဆုံခြင်း၊
အသက် ၂၀ - ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်၏အခြားသူများအကြောင်းအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောနှုန်းထားများကိုသင်ယူနေပါသည်
အသက် ၂၀ - ကျွန်ုပ်အပေါ်အလွန်နက်ရှိုင်းသောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အပေါ်တွင်သက်ရောက်ခဲ့သောဆိုးကျိုးများကိုမမြင်ခဲ့ပါ။
အသက် ၂၀ - ကျွန်ုပ်၌လိင်မှုကိစ္စမရှိခဲ့ပါ
အသက် ၂၀ - ကျွန်ုပ်ပိုမိုကောင်းမွန်လာသည် (ကင်ဆာမှလွတ်မြောက်သူ)
အသက် ၂၀ - ကျွန်ုပ်သည်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအောင်မြင်မှုနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများစွာကို nofap တွင်အကြွေးတင်နေသည်
အသက် ၂၀ - ကျွန်ုပ်သည်ရိုးသားစွာစိတ်ဓာတ်ကျခဲ့ပြီးယခုကျွန်ုပ်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော့် ED ပျောက်ကင်းသွားသည်
အသက် ၂၀ - ကျွန်ုပ်သည်လူမှုရေးကိစ္စမဟုတ်ပါ။ ယခုတွင်ကျွန်ုပ်သည်ကောလိပ်တွင်လူကြိုက်များသည်။ ငါကမိန်းကလေးတွေနဲ့မတော်ဘူး၊ ယခုအဆင့်သည်ကောင်းသော။
အသက် ၂၀ - ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုမရှိ၊ အရာအားလုံးပြောင်းလဲသွားပြီ။
အသက် ၂၀ - nofap ကငါ့ဘ ၀ ကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်လို့ငါပြောမယ်
အသက် ၂၀ - ကျွန်ုပ်သည်ယနေ့ ၄၆၁ ရက်အတွေ့အကြုံအတွက်မဟုတ်ခဲ့ပါကကျွန်ုပ်သည်ယနေ့ကျွန်ုပ်၏လူငယ်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ
အသက် ၂၀ - ငါ့ကိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုပြန်ပေးတဲ့အတွက် nofap ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အသက် ၂၀ - ကျွန်ုပ်သည် ၇၅% ပိုမိုထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိပြီး ဦး နှောက်မှေးမှိန်လာသည်
အသက် ၂၀ - ကျွန်ုပ်သည် ၂.၅ နှစ်လုံးလုံး nofap ကိုကြိုးစားနေသည်။ ကျွန်ုပ်ဘဝသည်အတိအကျတိုးတက်ခဲ့သည်
အသက် ၂၀ - အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်နိုးနိုးကြားကြားတိုးတက်မှုရှိခြင်း၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများတွင် ၀၀% စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊ ယုံကြည်မှုပိုမိုမြင့်မားခြင်း၊
အသက် ၂၀ - တိုးလာ - အတွေးရှင်းလင်းမှု၊ အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်း။ အရာအားလုံး၏ပျော်ရွှင်မှု, ယုံကြည်မှု, ရည်းစားနှင့်အတူဆက်သွယ်ရေး
အသက် ၂၀ - အလုပ်အကိုင်ကမ်းလှမ်းမှုများ၊
အသက် ၂၀ - ဦး နှောက်မှေးမှိန်ခြင်း၊ စိုးရိမ်စိတ်လျော့နည်းခြင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်။ လုံခြုံစိတ်ချမှုကိုခံစားရသည်
အသက် (၂၀) ​​- T နည်းပါးခြင်း၊ သုတ်ရည်လွှတ်မှုနောက်ကျခြင်း၊
အသက် ၂၀ - တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်တော်တော်သဘာဝကျသောအပြုအမူတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံသည်သင့် ဦး နှောက်ကိုအလွန်လှုံ့ဆော်ခြင်းဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားသည်
အသက် ၂၀ - ဆေးကျောင်းသား။ ၅ လအတွင်းငါသည်ညစ်ညမ်းသောသွေးမှ ED ရောဂါပျောက်ကင်းသွားသည်
အသက် ၂၀ - စွမ်းအင်၊ လူမှုရေး၊ ညစ်ညမ်းမှုပိုမိုများပြားလာသည်နှင့်အမျှယခုအခါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်“ meh” ဖြစ်သည်။
အသက် ၂၀ - ပို၍ အရောင်တောက်တောက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောခံစားမှုအပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်လာလျှင်ကမ္ဘာသည်အရောင်နှင့်အသံပျောက်သွားသည်
အသက် ၂၀ - ၀ မ်းနည်းစရာမလိုဘဲနာကျင်မှုနှင့်ငြင်းပယ်ခြင်းကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်
အသက် (၂၀) ​​- စွမ်းအင်နှင့်လှုံ့ဆော်မှုများပိုမို၊
အသက် ၂၀ - ကျွန်ုပ်၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုမှာအကြီးအကျယ်ကျဆင်းသွားသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယခင်ကထက် ပို၍ ချစ်မြတ်နိုးပြီးအခြားသူများကိုလေးစားမှုရှိသည်။ ငါသည်လည်းမလုံခြုံတော့တော့ပါ
အသက် ၂၀ - ကျွန်တော့် ED ကိုအပြည့်အဝ reboot မလုပ်ခဲ့ပေမဲ့အများအားဖြင့်တော့ပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။
အသက် ၂၀ - ကျွန်ုပ်ဘဝပြောင်းလဲသွားသည်
အသက် ၂၀ - ကျွန်ုပ်ဘဝသည်ယခုအခါ ၁၀ သန်းရာခိုင်နှုန်းပိုကောင်းပြီးကျွန်ုပ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အသက် ၂၀ - ကျွန်ုပ်၏ gf နှင့်ကျွန်ုပ်၏ဆက်ဆံရေးသည်ယခင်ကထက် ပို၍ ကောင်းမွန်သည်။ ကြည့်ရတာပိုသက်သာလာတယ်
(၂၀) နှစ် - ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုဆိုတာခေါင်မိုးပေါ်ကနေ။ ငါလမ်းပိုမိုဆွဲဆောင်မှုခံစားရတယ်
အသက် ၂၀ - ကျွန်ုပ်၏လူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်ကိုမကုသနိုင်သေးသော်လည်းတိုးတက်မှုအနည်းငယ်ကိုကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။
အသက် ၂၀ - ကျွန်ုပ်၏အောင်မြင်မှုပုံပြင်နှင့်ကျရှုံးမှုကိုကျော်လွှားနိုင်ခြင်း
အသက် ၂၀ - ကျွန်ုပ်၏အတွေးများသည်မလှုပ်ရှားနိုင်၊
အသက် ၂၀ - သူငယ်ချင်းအသစ်များနှင့်ဝါသနာများ။ ကျွန်ုပ်သည်အဆင့်မြှင့်တင်ခံရသောလူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်
အသက် ၂၀ - ကျွန်တော့်ဘဝ၏အကောင်းဆုံးအချိန်ကိုရရှိခြင်းကြောင့်လူများကိုစိုးရိမ်ခြင်းမရှိတော့ပါ။
အသက် ၂၀ - ဦး နှောက်မှေးမှိန်တော့မည်မဟုတ်၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုမရှိတော့ပြီ၊ ကျွန်ုပ်၏အဆုံးအဖြတ်ပေးမှုမှာ ၁၀၀% အထိဖြစ်သည်။
အသက် ၂၀ - PIED မရှိတော့ပါ၊ ကျွန်ုပ်ဘဝတွင်ယောက်ျားတစ်ယောက်နှင့်ပထမဆုံးခံစားပါ
အသက် ၂၀ - စူပါပါဝါ များမှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်ဘဝ၏အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်
အသက် ၂၀ - လူတွေကငါ့ကိုအရင်ကလိုမရှက်တတ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်။
အသက် ၂၀ - PIED နှင့်နှောင့်နှေးနေသောသုတ်ရည်လွှတ်မှုပျောက်ကင်းသွားသည်။ ဦး နှောက်မြူမရှိတော့ပါ
အသက် ၂၀ - ပိုကောင်းသောဘဝဆုံးဖြတ်ချက်များကိုချသည်
အသက် (၂၀) ​​- PIED - နှစ်များတွင်ပထမ ၁၀၀% စိုက်ထူခြင်း။
အသက် ၂၀ - ၀ က်စွဲစွဲလမ်းမှုနှင့်ကာလကြာရှည်သော fetish များပျောက်ကုန်ပြီ
အသက် (၂၀) ​​- Porn သည် ED သွေးဆောင်သော်လည်း ED ကိုညစ်ညမ်းစေသောဆေးစွဲခြင်းမဟုတ်ပါ - ကုသရန် ၂ လ။
အသက် ၂၀ - Porn သွေးဆောင် ED ကိုအောင်အောင်မြင်မြင်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၁၇ နှစ်မှစ၍ ပထမဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်
အသက် ၂၀ - မကြာသေးမီကပထမဆုံးခံစားခဲ့ရသည့်ခံစားမှုနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်း။ ပျော်ရွှင်မှုပိုလူမှုရေး
အသက် ၂၀ - PIED မှပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့သည်။ ရည်းစား အလေးအနက်ထား - ယခုကြီးသောလိင်ဆက်ဆံ။
အသက် ၂၀ - ယုံကြည်မှုပြန်လာခြင်း၊ စွဲလမ်းခြင်းမရှိတော့ပါ
အသက် ၂၀ - ED ကိုကုသရန်ခြောက်လ (ရည်းစားနှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်)
အသက် ၂၀ - ရက်ပေါင်း ၁၂၀ တွင်အပြားပြားနေဆဲ (ကျွန်ုပ်သည်ဆိုးဆိုးရွားရွား - ညစ်ညမ်းသောတောင်မှ ED)
အသက် ၂၀ - လူတွေနဲ့စကားပြောရတာပိုလွယ်ကူသွားပြီ၊ ကျွန်မရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုပျောက်ကွယ်သွားပြီ၊ မိန်းကလေးတွေကကျွန်မကိုပိုပြီးစွဲလမ်းစေတယ်
အသက် ၂၀ - ဤအရာသည်သင်၏ဘဝကိုပြောင်းလဲနိုင်သည် (femdom, cuckold စွဲ)
အသက် ၂၀ - အမျိုးသမီးများနှင့်လူကြီးလူကောင်းကျွန်ုပ်ပျောက်ဆုံးနေသော X ကိုတွေ့ရှိခဲ့
အသက် ၂၀ - သင်၏ဘ ၀ သည် Nofap နှင့်လုံးဝမတူနိုင်ပါ၊ ၎င်းထက်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသည်။
အသက်အရွယ် 20 - ဇောက်ချစကားသံကိုပိုမိုအာရုံစိုက်, အားကောင်း, ပထမအနမ်း,
အသက်အရွယ် 20 - PIED သွားပြီ, စစ်မှန်သောလူကြီးလူကောင်းအသွင်ပြောင်း
(၂၁) နှစ် ၂၁ - ကျွန်ုပ်၏အပြုအမူနှင့်သဘောထားအမြင်တွင်ကြီးမားသောပါရာဒိုင်းပြောင်းလဲမှု
အသက် ၂၁ နှစ် -“ အပျိုစင်အပျိုစင်”
အသက် ၂၁ - လုပ်ငန်းစဉ်အလုပ်ဖြစ်တယ်။
အသက် ၂၁ - (၅) လကြာလိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်
အသက် ၂၁ - (ED)၊ ၆ ပတ်ကြာအောင်မြင်မှုပုံပြင်
(၂၁) နှစ် - (ED)၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်များတိုးများလာခြင်း၊ လူမှုရေးဘဝများပြားလာခြင်း၊
အသက် ၂၁ - (ED) - ၈ လ PMO အခမဲ့ဖြစ်ပြီး၊
(၂၁) နှစ် - ED (ED) - လုံး ၀ လုံးထည် - အောင်မြင်ခြင်း!
အသက် ၂၁ - (ED) - တစ်နှစ်ကျော်သည်
အသက် - ၂၁ နှစ် - ပိုမိုကောင်းသောအာရုံစူးစိုက်မှု၊ ကျန်းမာရေး၊ ဆက်ဆံရေးနှင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအား
အသက် (၂၁) နှစ် - တစ်နှစ် - လှုံ့ဆော်မှု၊ ယုံကြည်မှုနှင့်လူမှုရေးအဆောက်အအုံတိုးမြှင့်မှု၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောမျက်လုံးချင်းဆက်သွယ်ခြင်း၊
အသက် ၂၁ နှစ် - ၁.၅ နှစ်တာ Nofap နှင့်ကျွန်ုပ်အတွက်လုပ်ပေးသည်
အသက် ၂၁ - ရက်ပေါင်း ၁၀၀: ကျွန်ုပ်သည် Lil 'ခွေးကောင်လေးမဟုတ်တော့ပါ
အသက် ၂၁ - ရက် ၁၅၀ - ED ကိုကုသရန်
အသက် ၂၁ ရက်မှ ၁၈၀ ရက်အတွင်းကျွန်ုပ်သည်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ မပေါင်းသင်းခြင်း၊ လိင်၌စိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
အသက် ၂၁ - ရက် ၂၀၀ တွင်ကျွန်ုပ်သည်စိတ်ပျက်စရာကောင်းသည်၊ ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့ပြီး၊ လူတိုင်းကိုအပြစ်တင်သည်
အသက် ၂၁ ရက်မှ ၂၀၀ ရက်အကြားစိတ်ခံစားမှုများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာအာရုံစိုက်နိုင်ခြင်းနှင့်စွမ်းအင်ရရှိခြင်း
အသက် ၂၁ ရက်မှ ၂၄၅ ရက်အထိ၊
အသက် ၂၁ - ၄၀ ရက် - စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုပျောက်ကွယ်ခြင်း၊
အသက် ၂၁ - ၄၀ ရက် - အနှစ်တစ်သန်းအတွင်း၌၎င်းပြmillionနာကိုကျွန်ုပ်သည် porn နှင့်လုံးဝဆက်စပ်မှုမရှိခဲ့ပါ။
အသက် ၂၁ - ၅၅၇ ရက်အခမဲ့ဖြစ်သည်
အသက် ၂၁ မှ ၉၀ ရက်အထိ၊ စူပါအင်အားကြီးများပြန်ရောက်လာသည်
အသက် ၂၁ - ရက် ၉၀ နေ့စွဲ။ ငါ့ဘဝမှာအကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်။ အလေးအနက်ထား။
အသက် - ၂၁ ရက် - ၉၀ ရက် - ယုံကြည်မှုမြင့်တက်လာပြီးကမ္ဘာကြီးဟာပိုပြီးထင်ရှားလာတယ်။ မျက်စိအဆက်အသွယ်လွယ်ကူသည်
အသက် (၂၁) ရက် - ရက်ပေါင်း (၉၀) ကောင်းသောအပြောင်းအလဲများ အင်တာနက်အတွက်မနေပါနှင့်၊ ဘဝသည်ဤထက်များစွာပိုကောင်းပါသည်
အသက် ၂၁ ရက်မှရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်းလူမှုရေး၊ စွမ်းအင်နှင့်လှုံ့ဆော်မှုပိုမိုများပြားသည်။ အမျိုးသမီးများ၏အမြင်များပြောင်းလဲသွားသည်
အသက် ၂၁ ရက် - ရက်ပေါင်း ၉၀ - ED မရှိတော့ပါ
အသက် ၂၁ - ရက် ၉၀ ။ လူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်၊ စိတ်ကျရောဂါ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများ
အသက် ၂၁ - ရက် ၉၀ ။ လူမှုဘ ၀ ပြန်လာပြီ၊ ငါ့ကိုလေးစားကြသည်
အသက် ၂၁ - ၉၀ ရက် - အချို့သောမကောင်းတဲ့အရာများ၊
အသက် ၂၁ - ၂ နှစ်နီးပါးတွင်အခမဲ့ဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်၏အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်း
(၂၁) နှစ် - သင့်ရဲ့ d! ck ကိုမထိခြင်းကသင့်ဘဝအပေါ်ဘယ်လောက်အထိအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သလဲ
အသက် ၂၁ - Anorgasmia ပျောက်ကင်းသွားသည်။ Nofap ကကျွန်တော့်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်။ ပထမဆုံးအကြိမ်ငါမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့အော်ဂဇင်စဖူး
(၂၁) နှစ် ၂၁ နှစ် - shemale porn မှယခုနှစ်နှစ်ကြာနေပါ။
အသက် ၂၁ - တွက်ချက်မှုမပြုမီနှင့်အပြီးတွင် (ရက်ပေါင်း ၃၀)
အသက် (၂၁) နှစ် - အကျိုးကျေးဇူးများသည်အလွန်ကောင်းသည်။ ပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချမှုအရငါဟာလူတွေကိုမျက်စိမမြင်တဲ့သူကိုကြည့်ပြီးအားထုတ်မှုမရှိဘူး၊
(၂၁) နှစ် - ဦး နှောက်မှေးမှိန်သွားပြီ ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်သည်စိတ်လှုပ်ရှားမှုများကိုပိုမိုခံစားရသည်
အသက် ၂၁ - ကုသမှုခံယူထားသော DE နှင့် ED: GF နှင့်ပုံမှန်ဆက်ဆံရေး မှလွဲ၍ M သို့မဟုတ် P မရှိပါ
(၂၁) နှစ် - သန္ဓေတည်ခြင်းနှောင့်နှေးခြင်း / Anorgasmia ပျောက်ကင်းသွားသည်
အသက် ၂၁ - ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ - ရက်ပေါင်း ၉၀ အစီရင်ခံစာ
အသက် ၂၁ - စိတ်ကျရောဂါ။ “ သေးငယ်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကမင်းရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်”
အသက် ၂၁ - ED သည်ရောဂါပျောက်ကင်းသွားပြီးလူမှုရေးစိုးရိမ်မှုနည်းသည်
အသက် ၂၁ နှစ် - ED ပျောက်ကင်းသွားပြီ - Nofap ကိုကျေးဇူးတင်တယ်
အသက် ၂၁ - ၃ လတွင် ED ရောဂါပျောက်ကင်းပြီးမိန်းကလေးတစ်ယောက်ရခဲ့သည်
အသက် ၂၁ - ED သည် ၇ ပတ်ခန့်တွင်ပျောက်ကင်းသွားသည်။
အသက် ၂၁ နှစ် - ED ပျောက်ကင်းသွားပေမယ့်ကတိက ၀ တ်ကိုကြောက်ရွံ့မိသွားတယ်
အသက် ၂၁ နှစ် - ED ပျောက်ကင်းသွားပြီ၊ အာရုံစူးစိုက်မှုရရှိသည်၊ လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုများကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့သည်
အသက် ၂၁ နှစ် - ED သည်ယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုကိုတိုးပွားစေခဲ့သည်
အသက် (၂၁) နှစ် - ED ကုသခြင်း၊ ငါ့အတွေးများနှင့်အတွေ့အကြုံများ
အသက် ၂၁ - ED ရောဂါပျောက်ကင်းသွားသည်။ porn နှင့် fapping သည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ကိုမဖြတ်နိုင်တော့ပါ
အသက် ၂၁ - ED ပျောက်ကင်းသွားသည်။ အဆိုပါစွဲခေါင်းကိုအပေါ်ကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်သည်
အသက် ၂၁ နှစ်မှ ၆ နှစ်အထိ ED - ကျွန်ုပ်သည်ကုသခြင်းခံယူရသည်ဟုခံစားရသည်
အသက် ၂၁ - ED သွားပြီ၊ ပို၍ အေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချမှုပိုရလာသည်။ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည်။ GIRL FRIEND!
အသက် ၂၁ - ED ပျောက်သွားပြီးပြန်လည်ထူထောင်ပြီးပြန်လည်နာလန်ထူလာသော်လည်း ၂ နှစ်ခန့်ကြာသည်
အသက် (၂၁) နှစ် - ED ပျောက်ကင်းသွားပြီ၊
အသက် ၂၁ နှစ် - ED၊ PMO မရှစ်လကြာခဲ့သည်
၂၁ နှစ် - ED: ၂.၅ နှစ်ရုန်းကန်ခဲ့ရသော်လည်းနောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်ရောက်ရှိနေပြီ
အသက် ၂၁ ရက် - ရက်ပေါင်း ၃၆၅ ရက် - အိမ်ခေါင်မိုးမှတစ်ဆင့်ယုံကြည်မှု၊
အသက် 21 - ED: 9+ လ။ စိတ်ရှည်ပါ၊
အသက် ၂၁ - ED - ၄ လမှ ၆ လအကြာတွင်လိင်နှင့်အော်ဂဇင်အမြောက်အမြားပျောက်ကွယ်သွားပြီး၊
အသက် ၂၁ - အေဒီ - နောက်ဆုံးတွင်သင့်လျော်သောလိင်ဆက်ဆံမှုရှိခဲ့သည် !!! နောက်ဆုံးတော့ဒစ်ခ်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။
(၂၁) နှစ် - စွဲလမ်းမှု၊ အချစ်ဇာတ်လမ်းစခြင်း
အသက် ၂၁ နှစ် - အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊ ယုံကြည်စိတ်ချမှု၊ လှုံ့ဆော်မှု၊
အသက် ၂၁ - အလွန်အမင်း fetish porn - ရက်ပေါင်း ၆၀ သည်ကြီးမားသောခြားနားမှုကိုထူးခြားစေသည်။
(၂၁) နှစ် - ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေမှုမှသည်ခိုင်မာသောပျော်ရွှင်မှုအထိ
အသက် ၂၁ - တိုးတက်မှုကောင်း (HOCD)
(၂၁) နှစ် - ဘ ၀ အတွက် ပို၍ စိတ်အားထက်သန်မှု၊ ယုံကြည်မှုနှင့်စွမ်းအင်ပိုမိုများပြားမှု၊
အသက် ၂၁ - ဝေးလံသောကင်ညာကျေးရွာတွင်ကြီးပြင်းလာ - PMO သည်ချိုင်းထောက်မရှိတော့ပါ
အသက် ၂၁ - အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာမြင့်မားခြင်း။ စကားဝိုင်းများကိုသယ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူသည်။ ယုံကြည်မှုနဲ့ပြုံးရယ်ပါ
အသက် ၂၁ - NoFap မပြောင်းသော်လည်းကျွန်ုပ်အသက်ကိုကယ်ဆယ်ခဲ့သည် - ၁၀၀ ရက်အစီရင်ခံစာ
အသက် ၂၁ - ကျွန်ုပ်သည်အပြောင်းအလဲမြန်သောလူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ဆက်ဆံရေးနှင့်လိင်ဆိုင်ရာကျွန်ုပ်၏အမြင်များသည်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားသည်
အသက် ၂၁ - ကျွန်ုပ်ဘဝ၏ကဏ္ benefits တိုင်း၌အကျိုးကျေးဇူးများခံစားခဲ့ရသည်ဟုခံစားမိသည်
အသက် (၂၁) နှစ် - ကျွန်ုပ်သည်အပြုသဘောရှိခြင်း၊ အခြေခံကျခြင်း၊ သန့်ရှင်းခြင်း၊ အနားယူခြင်း၊ ယုံကြည်မှုရှိခြင်း၊
အသက် ၂၁ - ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်နှင့်လူ့လိင်အကြောင်းများစွာလေ့လာခဲ့သည်။
အသက် ၂၁ နှစ် - ကျွန်ုပ်သည်ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်နှစ်ပေါင်းများစွာလိုအပ်ခဲ့သည်။ ယခုငါ့ပန်းတိုင်သို့ရောက်ရှိ
အသက် ၂၁ - ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ NoFap ကိုပထမဆုံးအကြိမ်စမ်းသပ်ခဲ့ဖူးတယ်၊ ငါ့ရဲ့ရက်တွေက ၅၅ ရက်။ လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ်က
အသက် ၂၁ - သုံးလအတွင်းစာလုံးရေ ၁၈၀,၀၀၀ ရေးသားခဲ့သည်။
အသက် ၂၁ - ယုံကြည်မှု၊ လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုများ၊ အလုပ်နှင့်ကျောင်းစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာသည်။ အမျိုးသမီးများ၏အမြင်တိုးတက်လာခြင်း
အသက် ၂၁ - ယုံကြည်မှု၊ စွမ်းအင်၊ လှုံ့ဆော်မှု၊ အာရုံစူးစိုက်မှု၊
အသက် ၂၁ - ဖျော်ဖြေနေစဉ်မိမိကိုယ်ကိုဗဟိုပြု၊ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုကင်းမဲ့သော၊
အသက် ၂၁ နှစ် - Magnetism နှင့်ကျွန်ုပ်၏မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကိုတိုးချဲ့လိုသောဆန္ဒ
အသက် (၂၁) နှစ် - ယုံကြည်မှုပိုရှိလာ တကယ်တော့ x21 ပိုပြီး။ ဒီပစ္စည်းပစ္စယတကယ်အလုပ်ဖြစ်
အသက် ၂၁ - ပို၍ ရဲရင့်သော၊ လိမ္မာသော၊ လုံ့လရှိသူ၊ လူမှုရေးနှင့်ကြီးထွားလာခြင်း။ စိုးရိမ်စိတ်လျော့နည်းခြင်း။
အသက် ၂၁ - လူများအတွက် ပိုမို၍ လူမှုရေးနှင့်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခြင်း၊
အသက် (၂၁) - နံနက်သစ်သားသည်ပြန်လာပြီ၊ ယုံကြည်မှုပိုရှိနိုင်သည်။ ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲမိန်းကလေးများနှင့်စကားပြောခြင်း၊ အခြားအပြောင်းအလဲများစွာ
၂၁ နှစ် - ပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိဖို့၊ ကျွန်တော့်ဘဝကိုထာဝရပြောင်းလဲစေခဲ့ပြီ
အသက် (၂၁) နှစ် - ကျွန်ုပ်သည်အသည်းအသန်စွဲစွဲလမ်းသူထံမှ (၁၀၄) ရက်အထိကျွန်ုပ်၏ခရီး (PIED ပါဝင်သည်)
အသက် ၂၁ - လွန်ခဲ့သောရက်ပေါင်း ၁၀၀ ကကျွန်ုပ်ဘဝသည်လုံးဝပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်
အသက် ၂၁ - ကျွန်ုပ်၏လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုပျောက်ဆုံးသွားပြီ။ ငါပတ်ပတ်လည်မှာပိုပျော်ရွှင်တယ် ငါရေတွက်လို့မရတဲ့နည်းတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုကောင်းတဲ့ဗားရှင်းပဲ။
(၂၁) နှစ် - စိတ်ကျရောဂါမဖြစ်ခင် ဦး နှောက်မှေး၊
(၂၁) နှစ် - ED မရှိတော့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသားတစ် ဦး နှင့်ထပ်တူခံစားမှုခံစားရသည်။ ပို၍ ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိရမည်။ ထပ်မံ၍ မထိတ်လန့်ပါနှင့်၊ ယခုအချိန်တွင်အသက်ရှင်ပါ၊ ဘဝ၌ရှိသောအရာများကိုတန်ဖိုးထားလေးမြတ်ပါ။
အသက် (၂၁) နှစ် - ED မရှိတော့ပါ၊
အသက် ၂၁ - နိုဖပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဘဝကိုအခြားအရာများထက်ပိုမိုပြောင်းလဲခဲ့သည်
အသက် (၂၁) နှစ် - NoFap ကကျွန်တော့်ကိုကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဆေးကျောင်းတစ်ခုမှာလက်ခံခဲ့တယ်
(၂၁) နှစ် (၂၁) ကြီးမားသောအရာများပြောင်းလဲခြင်းမရှိသော်လည်းကြီးမားသောကွဲပြားခြားနားမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အသက် ၂၁ - ၄ နှစ်အကြာတွင်ထွက်ခွာသွားသည်
အသက် ၂၁ - ညစ်ညမ်းမှုကိုစွန့်ပစ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်သမျှတွင်အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်
အသက် ၂၁ - အပြုသဘောဆောင်သောပြောင်းလဲမှုများစွာ (ရက်ပေါင်း ၉၀)
အသက် ၂၁ - ရည်းစားနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်နှေးကွေးသွားနိုင်သည် (ED)
အသက် (၂၁) နှစ် - လူမှုရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများသည်ပိုမိုတိုးတက်လာသည်။ စွမ်းအင်ပိုနည်းလာသည်
(၂၁) နှစ် - အချို့ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း၊
အသက် ၂၁ - လိင်မှုကိစ္စပြpornနာ၊
(၂၁) နှစ် - ယူပါ။ အောင်မြင်မှုအတွက်အလွန်စိတ်အားထက်သန်ပါ
အသက် ၂၁ - ဤနောက်ဆုံး ၃ လသည်ကျွန်ုပ်၏လူကြီးဘဝ၏အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးလဖြစ်သည်
(၂၁) နှစ် ၂၁ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်၏ဒုတိယနှင့်နောက်ဆုံးပြန်လည်စတင်ခြင်းဖြစ်သည်။ နီးပါး ED ကနေပြန်လည်ကောင်းမွန်နီးပါး။
အသက် ၂၁ - ဒီ shit ကမင်းဘဝကိုပြောင်းလဲစေလိမ့်မယ်။ nofap ကိုစဉ်းစားနေသူမည်သူမဆိုတစ်လလုပ်ပါ
အသက် ၂၁ - နှစ်လဆက်တိုက် (၉ ယောက်အနက်) - ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမပျော်ခဲ့ပါ
အသက် ၂၁ နှစ် - ကျွန်ုပ်အတွက် nofap လုပ်ခဲ့သည့်အရာနှစ်ခု - ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ပင်ကိုအသိစိတ်ကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။
(၂၁) နှစ် - စိတ်ဓာတ်ကျပြီးလူတွေနဲ့မဆက်သွယ်နိုင်ဘူး
အသက် ၂၁ - သံသယဝင်နေတယ်။ အခုတော့လုံးဝယုံကြည်တယ်။
အသက် ၂၁ - ၄ လအကြာ Woah နှင့်မျှော်လင့်ထားသည်ထက် ပို၍ ကောင်းသည်
(၂၁) နှစ် - သင်ဟာသင့်ဘဝအတွက်ကုထုံးဖြစ်သည်
အသက် ၂၁ - သင်၏ NoFap ခရီးစဉ်တွင် PMO သည်စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောပုံရသည့်နေရာသို့ရောက်သွားသည်။
အသက်အရွယ် 21 -100 ရက်ပေါင်း: ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖော်ပြပိုမိုအခမဲ့ပိုပြီးယုံကြည်မှုနည်း precautious
အသက်အရွယ် 21 - 365 နေ့ရက်များ
အသက် ၂၂ - (အေဒီ) အခြားရှုထောင့်တစ်ခု (ဘာကြောင့်မင်းရဲ့ခေါင်းအုံးကပျောက်ကင်းနိုင်တာလဲ)
အသက် ၂၂ - (ED) လိင်စိတ်ပိုမိုများပြားလာသည်။ နံနက်သစ်သားသည်ပြန်လာပြီ။ ကျွန်ုပ်သည် ပို၍ ယုံကြည်မှု / ပျော်ရွှင်မှုရှိသည်
အသက် (၂၂) နှစ် - (ED)၊ လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုများအကြီးအကျယ်ကျဆင်းခြင်း၊
အသက် ၂၂ - (ED) ၈ ပတ်အတွင်းပျောက်ကင်းသွားသည်
အသက် ၂၂ - (အေဒီ) ။ သင်မနှစ်ကလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကသင် porn မတိုင်မီကသင်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောလူမှုရေးလူကိုပြန်သွားသည်။
အသက် ၂၂ - (HOCD) NoFap ၄ လ - လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုပျောက်ကွယ်သွားခြင်း + မိန်းမများမှထူးဆန်းသောနှိုးဆော်ခြင်းလား။
အသက် (၂၂) မှ (၁) နှစ်အတွင်း - ကျွန်ုပ်သည်အထူးသဖြင့်မိန်းကလေးများနှင့်အတူရှိနေသောအခါ၊ ယခင်ကထက် ပို၍ ပျော်မွေ့စွာနေနိုင်တော့မည်မဟုတ်
အသက် ၂၂ - ၁.၅ နှစ်အစီရင်ခံစာ - သော့သည်မိမိကိုယ်ကိုဆုံးမခြင်းဖြစ်သည်
အသက် ၂၂ - ရက်ပေါင်း ၁၀၀ (ED) ။ ။ ငါ့ဘဝမှာအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲမှုရှိတယ်
အသက် ၂၂ - ၁၀၈ ရက် - ED သည်ပျောက်ကင်းသွားပြီး၊ မျက်လုံးချင်းထိခြင်း၊ စကားစမြည်ပြောခြင်းပိုမိုလွယ်ကူလာသည်
အသက် ၂၂ - ၁၂၆ ရက်အစီရင်ခံစာ။ ED သည် (ရက်ပေါင်း ၈၀ တွင်) လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားပြီးကျွန်ုပ်၏အိပ်မက်များကိုမိန်းကလေးနှင့်ချိန်းတွေ့ခဲ့သည်
အသက် ၂၂ မှ ၁၃၄ ရက်အထိ ED ကိုကုသရန်ကြိုးစားသော်လည်းရည်းစားနှင့်အတူအော်ဂဇင်များစွာရှိသည်
အသက် ၂၂ - ၂၀၅ ရက် - ကျွန်ုပ်၏ရည်မှန်းချက်မည်သည့်နေရာတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်နေသည့်ကွန်ပျူတာ၌ထိုင်နေသောလူတစ်ယောက်မျှမရှိပါ
အသက် (၂၂) မှ (၂၁) နှစ်အတွင်းလူမှုရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်မိန်းကလေးငယ်များအားကြောက်လန့်တုန်လှုပ်သွားခဲ့ကြ GONE!
အသက် ၂၂ - ရက် ၃၀၀ - ED, DE, အမျိုးသမီးများနှင့်ယုံကြည်မှု
အသက် ၂၂ - ရက် ၅၀ - ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တော့ပါ
အသက် ၂၂ - ၅၅ ရက် - အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးလာခြင်း၊ ဦး နှောက်မှေးမှိန်ခြင်း၊ စိုးရိမ်စိတ်လျော့နည်းခြင်း
အသက် ၂၂ - ၆၄ ရက်အရ“ ဇောက်ထိုးလှည့်” ကငါ့ဘဝမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုဖော်ပြဖို့မလုံလောက်ဘူး။
အသက် ၂၂ ကနေ ၇၅ ရက်ကြာတဲ့အထိညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာမရှိတော့ဘူး
အသက် ၂၂ - ၉၀ ရက်နှင့်ကဗျာတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်
အသက် ၂၂ ရက်မှ ၉၀ ရက်အတွင်း DE ရောဂါပျောက်ကင်းပြီးလူမှုရေးအတွက်ပိုမိုလိုအပ်ခြင်း၊ မျက်လုံးချင်းထိခြင်းတို့ပြုလုပ်နိုင်သည်
အသက် ၂၂ - ရက် ၉၀ ကျွန်ုပ်သည်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောလူတစ် ဦး
အသက် ၂၂ - ရက် ၉၀ ရက် - porn သည်အတုအယောင်ပုံရသည်၊ မိန်းကလေးများနှင့်ပိုမိုယုံကြည်မှုရှိပြီးစိုးရိမ်မှုလျော့နည်းကာချိန်းတွေ့ခြင်းဖြစ်သည်
အသက် ၂၂ - ၉၁ ရက်။ ED ပျောက်ဆေး၊ ကျွန်ုပ်သည်အခြားသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်
အသက် ၂၂ - ၉၂ ရက်၊ ကျွန်တော်သူမကိုမေးမြန်းခဲ့သည်။
အသက် ၂၂ - NoFap တစ်နှစ်။ အောင်မြင်သည်။ ကျရှုံးမှုများ။ အမြင့် အနိမ့်များ။ ငါဒီနေရာကိုရောက်နေတုန်းပဲ။
အသက် (၂၂) နှစ် - အာရေဗျအမျိုးသား - ယုံကြည်မှု၊ လူမှုရေးစွမ်းရည်၊ ယခုတွင်ငါသည်အမျိုးသမီးများအားလိင်ကစားစရာမဟုတ်ဟုရှုမြင်သည်။
အသက် ၂၂ - ကျွန်ုပ်စိတ်အတွေးအခေါ်များပြောင်းလဲသွားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ရေလွှမ်းမိုးလာသည်
အသက် ၂၂ - ကျွန်ုပ်ဖြစ်လိုသောလူဖြစ်လာခြင်း
အသက် ၂၂ - porn ကို fetish လုပ်ရန်မခဲယဉ်းနိုင်။ ED သည် ၃ လအတွင်းကုသခံခဲ့ရသည်
အသက် (၂၂) နှစ် - ကျွန်ုပ်၏ ED ကိုကုသသော်လည်းညစ်ညမ်းသောဝက်သို့ပြန်သွားသည်။ ယခုတွင်ကျွန်ုပ်သည် ED ကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်
အသက် ၂၂ - နှေးကွေးစွာသုက်ပိုးပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးခဲ့သည်။
အသက် ၂၂ - စိတ်ကျရောဂါသည်လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားပြီး ဦး နှောက်မှေးမှိန်သွားခြင်း၊
အသက် ၂၂ - စိတ်ကျဝေဒနာပျောက်သွားပြီးလိင်ဘဝကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်၊ ကျွန်ုပ်၏ခွေးသည်ကျွန်ုပ်ကိုချစ်မြတ်နိုးသည်
အသက် ၂၂ - ED နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုပ်ထွေးမှုများ - ရက်ပေါင်း ၉၀ လုပ်ရန် ၄ နှစ်။
အသက် ၂၂ - ၅ နှစ်အကြာတွင် ED ရောဂါပျောက်ကင်းသွားသည်
အသက် ၂၂ - ED သည်ရောဂါပျောက်ကင်းသွားသည်၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ပိုမိုကိုက်ညီပြီး ပို၍ ပျော်ရွှင်သည်
အသက် ၂၂ - ED ရောဂါပျောက်ကင်းသွားပြီးအမျိုးသမီးများ၏ရှုထောင့်ပြောင်းလဲသွားပြီ
အသက် ၂၂ - ED ကုသမှုခံထားရပြီးအချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်မှုသည် ပို၍ ကောင်းသည်
အသက် ၂၂ - ED ပျောက်ကင်းသွားသည်။ လူငယ်တစ် ဦး သည်နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်သင့်သည်ဟုကျွန်ုပ်ခံစားမိသည်
အသက် ၂၂ - အေဒီရောဂါပျောက်ကင်းသွားပြီ - ငါအသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်ကတည်းကဒီစိုက်ထူမှုမျိုးကိုမတွေ့ခဲ့ဘူး။
အသက် ၂၂ - ED ပျောက်ကင်းသွားသည်။ ကျွန်ုပ်၏လိင်စိတ်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအပေါ်တွင်များစွာမူတည်သည်
အသက် ၂၂ - ED ပျောက်ကင်းသွားသည်။ သေချာတာပေါ့ငါ့အဘို့ porn မ။
အသက် (၂၂) နှစ် - ED သည်ပျောက်ကင်းသွားပြီ။ လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုအများစုသွားပြီ။ အချိန်ပိုလိုသည်။
အသက် ၂၂ - ED ပျောက်ကင်းသွားပြီ။ ကျွန်ုပ်၏စိုက်ထူမှုများသည်စိန်နှင့်ကြာရှည်ခံနေပြီဖြစ်သည်။
အသက် ၂၂ - ED၊ DE၊ PE နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှု - ကျွန်ုပ်သည်ယခုဆိုလျှင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသားရဲတိရစ္ဆာန်ဖြစ်သည်
အသက် ၂၂ နှစ် - ED၊
အသက် ၂၂ နှစ် - ED၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကပြားချပ်ချပ်ပြားရှည်လျားသည်
အသက် ၂၂ နှစ် - ED၊ ကျွန်တော့်ဘဝဟာပိုကောင်းလာတယ်။ ဒီမှာ NoFap ရဲ့သိပ္ပံပညာပါ
အသက် ၂၂ - ED၊ လူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်၊ စိတ်ကျရောဂါနှင့် ဦး နှောက်မြူမှုန်
အသက် ၂၂ - ED - ၁၀၅ ရက်၊ ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမပါဘဲ
အသက် ၂၂ - ED - ရက်ပေါင်း ၁၂၀၊ တတိယလူမှစိတ်ကူးယဉ်မည်မဟုတ်ပါ
အသက် ၂၂ - ED ။ ၆ နှစ်ကျော်အတွင်းပထမဆုံးအောင်မြင်သောလိင်ဆက်ဆံမှု
(၂၂) နှစ် - ED - ကျွန်တော့်ဘဝမှာတစ်ခါမှမပျော်ရွှင်ဖူးဘူးလို့ပြောရမယ်
အသက် ၂၂ - အေဒီ။ ၉၇ မှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးလိင်စိတ်ထကြွလာတယ်
အသက် ၂၂ - ED ။ အများကြီးပိုကောင်းတယ်။ ဦး နှောက်မြူမှုန်ဝါးခြင်း၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေး
အသက် ၂၂ - Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုခေတ္တနားပြီးစစ်ဆေးသည်
အသက် ၂၂ နှစ် - Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု - စစ်သား၊
(၂၂) နှစ် - Fapping ။ dat အတွက်အချိန်မရှိခဲ့ပါ
အသက် ၂၂ - မိဘမဲ့သူ၊ တစ်ယောက်တည်း၊ လမ်းလွဲ။ ကျန်းမာသူ၊
အသက် (၂၂) - လိင်မှုကိစ္စနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမရှိသောလိင်အင်္ဂါအပျိုစင်မှလေးနှစ်ခရီး၊ အောင်မြင်သောလိင်အထိ
အသက် ၂၂ နှစ် - အထီးကျန်အပျိုစင်ဘဝ - ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၊ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်များ၊
အသက် ၂၂ - ပြင်းထန်သည့် PIED ရှိပြီ - ယခု - ကျွန်ုပ်သည်တစ်သက်လုံးခဲယဉ်းနေပြီးသူမသင်သည်မည်သည့်ဆေးဝါးများသောက်သုံးခဲ့သနည်းဟုဆိုသည်။
အသက် ၂၂ - NoFap ဖြင့်တစ်နှစ်ခွဲ၊
အသက် ၂၂ - HOCD & ED
အသက် ၂၂ - ကျွန်ုပ်ဘယ်တော့မှသင့်လျော်သောလိင်ဆက်ဆံမှုပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုရိုးသားစွာပြောဆိုခဲ့သည်။ ငါမှားသွားတယ်။ Nofap သည်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေသည်။
အသက် ၂၂ - ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးများကိုနည်းလမ်းသစ်တစ်ခုဖြင့်တန်ဖိုးထားသည်
အသက် ၂၂ - သူမ (ကွန်ဒုံးဖြင့်) သူမအတွင်းသို့ ၀ င်ရောက်ခဲ့သည်။ ၅ ကြိမ် !!!
အသက် ၂၂ - လူမှုရေးအရအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုကျွန်ုပ်တစ်ခါမှမသုံးဖူးသည့်နည်းဖြင့်တပ်မက်ခဲ့သည်
အသက် ၂၂ - ကျွန်ုပ်၏ ED ကိုကုသသော်လည်း၊
အသက် ၂၂ - ငါဟာလူတစ်ယောက်လိုခံစားရတယ်၊ ပုန်းနေတဲ့အခွံလိုခံစားရတယ်
အသက် ၂၂ - ကျွန်ုပ်၏ ipad နှင့်လက်တော့ပ်ကိုဖယ်ရှားပြီးကျွန်ုပ်၏ဖုန်းနှင့် xbox ကိုသော့ခတ်လိုက်သည်
အသက် ၂၂ - ကျွန်ုပ်ကြည့်ရှုခဲ့သည့်အချိန် မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်သည်တစ်နေ့လုံးပျော့ပျောင်းသောဒစ်ကိုခံခဲ့ရသည်။ မကောင်းဘူး။
အသက် ၂၂ - ကျွန်ုပ်သည်စာသားအနေဖြင့်အခြားသူ၊ ပိုကောင်းသောသူနှင့်တူသည်ဟုခံစားရသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ယခု ပို၍ ပျော်ရွှင်မိသည်။
အသက် ၂၂ - PMO ကိုစွန့်ခွာမယ်၊
အသက် ၂၂ နှစ် - အာရုံစိုက်မှုပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်း၊
အသက် ၂၂ - အလုပ်အကိုင်၊ စိတ်ဝင်စားမှုအသစ်များ၊ ကျွန်ုပ်ဘဝတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားသည်
အသက် ၂၂ - ရည်မှန်းချက်နှင့်စွမ်းအင်ပိုမိုများပြားလာခြင်း၊ ဝါသနာအသစ်များ၊ အမျိုးသမီးများအပေါ်အမြင်လွဲမှားခြင်းများမရှိတော့ပါ
အသက် ၂၂ - ပိုပြီးယုံကြည်မှုပို ရှိ၍ အသံနိမ့်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးရည်းစားရှိသည်
အသက် ၂၂ - ပို၍ အသက်ရှင်သန်နိုင်၊ ပို၍ ပျော်ရွှင်ပြီး၊ ပို၍ ပျော်မွေ့သောဘဝရှိသည်
အသက် ၂၂ - ကျွန်ုပ်၏ PIED သည်ဖြေရှင်းပြီးပြီ၊
အသက် ၂၂ - PMO မရှိသည့်ရက်ပေါင်း ၉၀ အပြီးတွင်ကျွန်ုပ်၏အတွေးများ - HOCD, ED နှင့်စိတ်ကျရောဂါ။
အသက် ၂၂ - ယခုကျွန်ုပ်ပြုံးသည်၊ သို့သော်အမျိုးသမီးများနှင့်အကြီးမားဆုံးတိုးတက်မှုမှာ
အသက် ၂၂ နှစ် - Porn မပါဘဲတစ်နှစ်ကျော် -> relapse -> recovery - ဒါကအလုပ်ဖြစ်တယ်။
အသက် ၂၂ - PIED ကိုကုသပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် gf နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုဘယ်တော့မှမလုပ်နိုင်တော့ဟုထင်ခဲ့သည်
အသက် ၂၂ - PIED ကုသမှု - ကျွန်ုပ်သည်ရည်းစားနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုဖြတ်ပြီးကတည်းက ပို၍ ကောင်းမွန်လာသည်။
အသက် ၂၂ - Porn သွေးဆောင် ED: လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကိုဆုံးရှုံးနိုင်ဘူး!
အသက် ၂၂ - တက်ကြွသော၊ လူမှုရေး၊ တက်ကြွသော၊ ယုံကြည်မှုရှိသူ - ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအားလုံးသတိပြုမိသည်
အသက် ၂၂ - ကျောရိုးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့် Fetish (ED)
အသက် ၂၂ - PMO ကိုဖြတ်လိုက်ခြင်းကကျွန်တော့်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သည်
အသက် ၂၂ - လိင်ဆက်ဆံစဉ်ရက်ပေါင်း ၁၄၀ အတွင်းခံစားမှုအသစ်ပြန်ရလာသည်
အသက် ၂၂ - ပြန်လည်သက်သာလာခြင်းနှင့်ပြန်လည်နာလန်ထူခြင်း
အသက် ၂၂ နှစ် - လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုပျောက်ကွယ်လုနီးပြီ၊
အသက် ၂၂ နှစ် - စိတ်ကျဝေဒနာ၊ ADHD၊ စိတ်ပူပန်မှုခံစားခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဆေးများကိုနည်းနည်းလေးလိုအပ်ပြီးပိုကောင်းအောင်ပျော်ရွှင်သည်။
အသက် (၂၂) နှစ် - ရေးသားရန်ရိုးသားစွာပြောဆိုခြင်းများလွန်းသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်လူသစ်တစ် ဦး ဖြစ်လာခဲ့သည်
အသက် ၂၂ - အမြင်အာရုံနှင်းကျခြင်းနှင့် ဦး နှောက်မြူမှု ၉၉% ကုန်သွားပြီးစွမ်းအင်နှင့်ယုံကြည်မှုမြင့်တက်လာသည်
အသက် (၂၂) နှစ် - သင်ပျောက်ဆုံးနေသောအရာကိုပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်မပြီးမချင်းသင်မသိပါ။
အသက်အရွယ် 22 - နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါ့အသက်ကိုပြောင်းပေးဖို့လှုံ့ဆျောမှုနှင့်စွမ်းအင်များ
အသက် ၂၃ နှစ် - အေးဆေးတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည်လင်ပြတ်သားမှု၊ ဘဝကိုပိုမိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခြင်းနှင့်အတူအရာရာတို့၌စွဲမက်လိုစိတ်ရှိခြင်း၊
အသက် ၂၃ - ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးများကိုလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အဖြစ်ရှုမြင်သည်။ အမျိုးသမီးများနှင့်စကားပြောခြင်းအပေါ်ကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်မှုသည်ယင်း၏အစဉ်အဆက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
၂၃ နှစ် - အကျိုးကျေးဇူးများကိုငြင်း။ မရပါ
(၂၃) နှစ် - (ED)“ PMO စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့။ ”
အသက် ၂၃ - (၆) လအစီရင်ခံစာ
အသက် ၂၃ - (ED) ယောက်ျားနှင့်သူ၏ရည်းစားနှစ် ဦး စလုံးသည်သူတို့၏ရက်ပေါင်း ၁၃၀ ပြန်လည်စတင်မှုအကြောင်းဖော်ပြသည်
အသက် ၂၃ - (ED) ကျွန်ုပ်သည်ဘယ်သောအခါမျှ ပို၍ အကျိုးဖြစ်ထွန်းခြင်းမရှိခဲ့ပါ
(၂၃) နှစ် - (ED) လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်ပျော်မွေ့နိုင်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်ပြန်လည်ပြောပြသည်
အသက် ၂၃ - (ED) ကျွန်ုပ်သည်ယုံကြည်မှု၊ ဖန်တီးမှု၊ အေးဆေးမှု၊ ပျော်ရွှင်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်စိန်တုံးကဲ့သို့မာကျောပြီးလေးလံသည်
(၂၃) နှစ် - (ED) စိတ်ဓာတ်ကျမှု၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေမရှိတော့ဘူး
အသက် ၂၃ - (ED) အောင်မြင်သောလိင်ဆက်ဆံမှု။ တူညီတဲ့ညမှာ 23 ကြိမ်!
အသက် ၂၃ - (ED) ၂၃ ရက်အကြာတွင်အောင်မြင်မှု - porn ကိုအမှန်တကယ်စွဲလမ်းမှုမရှိပါ
အသက် ၂၃ နှစ်မှ ၁ နှစ်အထိ - ကျွန်ုပ်သည်သိမ်မွေ့ခြင်းမရှိဘဲပျောက်ဆုံးသွားသောကလေးငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်
အသက် ၂၃ - ရက် ၁၀၀ အတွင်း - အတွင်းငြိမ်သက်မှုနှင့်တိုးတက်မှုများစွာ
အသက် 23 - 1042 ရက်: AMA ။ ၎င်းကို Reddit Community သို့ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်အချိန်ဖြစ်သည်
အသက် ၂၃ - ၁၃၂ ရက် * ကွန်ဂျူရမ် *
အသက် ၂၃ - ၂ သီးခြား reboot: ရက် ၁၀၀ နှင့်ရက်ပေါင်း ၂၀၀
အသက် (၂၃) မှ (၂၇) ရက်အထိကျွန်ုပ်သည်ရက်ပေါင်း ၉၀ မတိုင်မှီကြိုးပမ်းမှု - ပုံမှန်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း
အသက် ၂၃ - ၃၀ ရက်သည်ရက် ၉၀ သို့ရောက်ရန်ကြိုးစားသည်၊ ပို၍ ယုံကြည်မှုရှိသည်ဟုသူဌေးကပြောသည်။
အသက် ၂၃ - ရက်ပေါင်း ၃၀၀: ယခုကျွန်ုပ်၏အရသာများသည် vanilla နှင့်မှန်မှန်ရှေ့သို့
အသက် ၂၃ - ၄၀၅ ရက် - ယုံကြည်မှုများစွာသည်အမျိုးသမီးများအတွက်လွယ်ကူခြင်း၊
အသက် ၂၃ - ၅ နှစ်သည်ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်းအကျိုးကျေးဇူးများစွာရရန်ကြိုးစားသည်
အသက် ၂၃ - ၆၆ ရက်၊ သငျသညျတရားသူကြီးဖြစ်။
အသက် ၂၃ - ၇၁ ရက်။ အကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အပြောင်းအလဲများ၏ရှည်လျားသောစာရင်း
အသက် ၂၃ - ၉၀ ရက်အစီရင်ခံစာ - HOCD၊
အသက် ၂၃ - ရက် ၉၀ -“ ရှင်သန်ရန်ကောင်းသောနေ့”
အသက် ၂၃ - ရက် ၉၀ ။ ယုံကြည်မှုအဆင့်သည်စာသားအရ ၉၀၀၀ ကျော်သည်။
အသက် ၂၃ - ရက်ပေါင်း ၉၀: ED ပျောက်သွားပြီ၊ ငါပရောပရည်လုပ်သည်ကိုတွေ့ရပြီးကျွန်ုပ်သည်တစ်ခုလုံးအပေါ်ပိုမိုရှုထောင့်မှခံစားမိသည်။
အသက် ၂၃ - ရက် ၉၀ ။ ကျွန်ုပ်သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်အဖြစ်စတင်ခဲ့သည်
အသက် ၂၃ - ရက် ၉၀ ။ ငါနောက်တဖန်အိပ်မက်မက်စတင်ခဲ့သည်
အသက် ၂၃ - ရက်ပေါင်း ၉၀: Reboot သည်အခြားသူများကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုစွန့်လွှတ်ရန်ကူညီခြင်းအားဖြင့်အလုပ်အကိုင်သစ်ကိုပြသခဲ့သည်
(၂၃) နှစ် - စွမ်းအင်ပိုသုံးပြီးကျွန်ုပ်လိုအပ်ချက်များအတွက်ပိုမိုတာဝန်ယူပါ။
(၂၃) နှစ် - စွဲလမ်းမှုသည်ပဟေisိတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်ကိုယ်တိုင်၏ကိုယ်ပိုင်ဟန်ဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်သည်
အသက် ၂၃ - ပိုမိုကောင်းမွန်သောလူတစ် ဦး ဖြစ်လာသည်၊ ယုံကြည်မှုပိုရှိလာသည်။ ငွေပိုမိုရရှိသည်၊ အဆင့်ကောင်းများနှင့်လူမှုရေးစွမ်းရည်များရရှိသည်
အသက် ၂၃ - ပိုမိုကောင်းမွန်သောစာနာမှုနှင့်ဆက်ဆံမှုများ၊ စိတ်ဓါတ်တက်ကြွမှု၊
အသက် ၂၃ နှစ် - ယုံကြည်မှုခိုင်မာလာ၊ ဂရုစိုက်တတ်သော၊ စာနာတတ်သော၊ အမျိုးသမီးများသည်လှပသည်
အသက် ၂၃ - နေ့ ၅၀ ။ လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။
(၂၃) နှစ် - နှေးကွေးသောသုက်လွှတ်မှုပျောက်ကင်းသွားပြီ - ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်လေ့ကျင့်နိုင်သည်။
အသက် ၂၃ - ED သည်ကုသမှုခံယူပြီးစွမ်းအင်နှင့်ယုံကြည်မှုပိုမိုရရှိခဲ့သည်
အသက် ၂၃ - ED ပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးခဲ့သည်
အသက် ၂၃ - အေဒီရောဂါပျောက်ကင်းသွားပြီ - ငါလိင်ဆက်ဆံခဲ့သည့်နှစ်များအတွင်းမည်သည့်အရာကမျှဤမျှစစ်မှန်သည့်ခံစားမှုမရှိခဲ့ပါ။
(၂၃) နှစ် - ED၊ ငါလိင်ကိုကြောက်ခဲ့တယ်
(၂၃) နှစ် - ED၊ စိတ်ဓာတ်ပျော့ခြင်း၊ စိုးရိမ်ခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်ခြင်းမရှိခြင်း၊ ကျန်းမာရေးပြissuesနာများ
(၂၃) နှစ် - ED: နေ့များကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်ယခင်ကထက်ကျော်လွန်နေပါသည်
(၂၃) နှစ် - ED: ကျွန်တော့်ရဲ့ V-card ပျောက်သွားတယ်
(၂၃) နှစ် - ED: nofap ဟာနတ်သမီးပုံပြင်တစ်ခုပါပဲ
အသက် ၂၃ - အေဒီ: ကျွန်ုပ်၏ညစ်ညမ်းဂူထဲမှထွက်လာသည်။ ငါအရမ်း cuddling ခက်ခဲရ!
အသက် ၂၃ နှစ် - ED: TCM နှင့် Ayurveda တို့သည်ကူညီနိုင်ခဲ့ပြီ
(၂၃) နှစ် - ED: PIED ထက်ပိုဆိုးတာကကမ္ဘာကိုချန်လှပ်ထားခြင်းပဲ။
အသက် ၂၃ လ - လူမှုရေး၊ တက်ကြွမှု၊ ပါ ၀ င်မှု၊ အာရုံစူးစိုက်မှုစသည်တို့ဖြစ်သည်
အသက် ၂၃ - ပို၍ လူမှုရေး၊ မိန်းကလေးများနှင့်စကားပြောဆိုရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်
အသက် ၂၃ - နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အသားအရေနှင့်ပျော်ရွှင်သည်
(၂၃) နှစ် - လူမှုရေးအရမကျွမ်းကျင်သောညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းသူမှသည်သူ၏မိခင်နှင့်အတူနေထိုင်သောကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အိမ်သို့၊ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်ပြင်ဆင်နေသည်။
(၂၃) နှစ် - အီကွေဒေါနိုင်ငံမှဖြစ်သည်။ porn- သွေးဆောင် ED ပျောက်ကင်းအောင်ကုသ။ rewire ဖို့ Cialis အသုံးပြုခဲ့သည်။
အသက် ၂၃ - လိင်တူချစ်သူ - PIED မှသည်ကျွန်ုပ်ဘဝ၏အကောင်းဆုံးဆက်ဆံရေးသို့
၂၃ နှစ် - ယုံကြည်မှု၊ ပျော်ရွှင်မှု၊ အာရုံစူးစိုက်မှု။ ဒီထက်စိုးရိမ်ပူပန် & အကဲဖြတ်; လိင်သည်ကြီးလှ၏။
အသက် (၂၃) နှစ် - ယုံကြည်စိတ်ချမှုပိုမိုရရှိရန်၊ လှုံ့ဆော်မှုပိုမိုရရှိရန်၊ အရည်အသွေးမြင့်မားသောဘဝအတွက်မောင်းနှင်ရန်။
(၂၃) နှစ် - ADHD နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိခဲ့လျှင် - စိုးရိမ်ပူပန်မှုပျောက်ကွယ်သွားပြီး ADHD တွင်ရှိနေသေးသော်လည်းလျော့နည်းသွားသည်။ ပိုကောင်းတဲ့ဘဝ
(၂၃) နှစ် - ယုံကြည်ရန်ခက်ခဲသည်။ Varicocele နာကျင်မှုပျောက်ဆုံးသွားပြီ။ နာတာရှည်ပါးစပ်အနာပျောက်သွားသည်။
(၂၃) နှစ် - လိင်မတူလိင်၊
အသက် ၂၃ နှစ် - ကျွန်ုပ်သည်ဘ ၀ ၏စွမ်းအင်ကိုစတင်ခံစားနေပြီဖြစ်သည်
အသက် ၂၃ - ကျွန်ုပ်သားကိုသူထိုက်တန်သည့်အချိန်ကိုပေးနိုင်သည်
(၂၃) နှစ် - ငါဟာပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လုံခြုံမှုရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်။
အသက် ၂၃ - ကျွန်ုပ်၏စိတ်အခြေအနေနှင့်လူနေမှုအဆင့်အတန်းတိုးတက်မှုနှေးကွေး။ တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာသည်
အသက် ၂၃ နှစ် - ငါတိုးတက်ပြီ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုကျောင်းပြန်ထားလိုက်တယ်
အသက် ၂၃ - ကျွန်ုပ်သည် 'စူပါအင်အားကြီး' များကိုသတိမပြုမိသော်လည်း၊ ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ပြောင်းလဲပြီးပြောင်းလဲလာသောလူတစ် ဦး ဖြစ်သည်
(၂၃) နှစ် - ငါ NoFap မတိုင်ခင်စိတ်ကျရောဂါရှိတယ်လို့ထင်တယ်
အသက် ၂၃ - ကျွန်ုပ်သည်လူမှုရေးအရအလွန်စိတ်ပူခဲ့ဖူးသည်၊ သို့သော်အရာများပြောင်းလဲသွားသည်
အသက် ၂၃ - ကျွန်ုပ်သည်မိဘများအပေါ်မှီခို။ ငွေရေးကြေးရေးအရမှီခိုနေရခြင်းမှသည်ကွဲပြားသောနိုင်ငံ ၂ နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ပြီးအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်
အသက် ၂၃ - ကျွန်ုပ်ဟာလူသားအသစ်တစ်ခု (ED) ပါ။
(၂၃) နှစ် - ကျွန်ုပ်သည်ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်၏တကယ့်စစ်မှန်သောစိတ်ကိုပြန်ရောက်လာပြီ
(၂၃) နှစ် - ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးများနှင့်အမှန်တကယ်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောဆက်ဆံရေးများတည်ဆောက်နေသည်၊ ကျွန်ုပ်တွင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုများရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်သည် ပို၍ ဥာဏ်စွမ်းရှိသူဖြစ်သည်
အသက် ၂၃ - ကျွန်ုပ်၏ရက်ပေါင်း ၉၀ တွင်“ စူပါအင်အားကြီး” ဟုမခေါ်နိုင်သော်လည်းနောက်ဆုံး ၉၀ အတွင်းကြီးမားသောခြားနားချက်ရှိသည်။
အသက် ၂၃ - လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ရှုထောင့်တစ်ခုသို့ပြန်ရောက်စေခဲ့သည်။
(၂၃) နှစ် - Karezza စမ်းသပ်မှု
(၂၃) နှစ် - ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်စဉ်းစားတတ်အောင်သင်ယူခြင်း
(၂၃) နှစ် - စိတ်ဓာတ်ကျမှုနည်းနေခြင်းနှင့်အာရုံကြောနည်းပါးခြင်း၊ မိန်းကလေးများအားကွဲပြားစွာစဉ်းစားပါ
အသက် ၂၃ - Libido ကျော၊ စွမ်းအင်၊ စိတ်ကြည်လင်မှု၊ လူမှုရေးတိုးတက်မှုများ
(၂၃) နှစ် - ဘဝကပိုပေါများသည်
အသက် ၂၃ - nofap သည်သင်၏ဘဝကိုလုံးဝပြောင်းလဲစေသည့်ပထမခြေလှမ်းဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြခြင်း။ ရက်ပေါင်း ၉၀ လောက်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေတာ၊ အထီးကျန်တာ၊
အသက် ၂၃ - အဓိကအကျိုးကျေးဇူးများမှာယုံကြည်မှုနှင့်ကြံ့ခိုင်မှုဖြစ်သည်။
အသက် ၂၃ - ကြက်ညှာသံလိုက်သို့အသွင်ပြောင်းခြင်း
(၂၃) နှစ် - ယုံကြည်မှုပိုများလာခြင်း၊ ငါကိုယ်တိုင်နဲ့ပိုပြီးအဆင်ပြေပါတယ်
အသက် ၂၃ - ပိုမိုလှုံ့ဆော်မှုနှင့်စွမ်းအင်ပိုမိုစိုးရိမ်စိတ်မရှိတော့ဘဲမဆိုင်းမတွဘဲလူတွေကိုလွယ်ကူစွာစကားပြောနိုင်တယ်၊ အနာဂတ်ကိုအကောင်းမြင်
(၂၃) နှစ် - ကျွန်ုပ်၏ OCD ပျောက်ကွယ်သွားပြီ၊ ကျွန်ုပ်၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုပျောက်ကွယ်သွားပြီ၊ ငါရည်းစားထားရတော့မည်ဖြစ်သည်။
(၂၃) နှစ် - ကျွန်တော့်အချစ်ဇာတ်လမ်းဘဝ porn- သွေးဆောင် ED & DE ပျောက်ကင်းအောင်ကုသ
(၂၃) နှစ် - ကျွန်တော့်ဘဝမှာဘယ်တော့မှမခံစားရဘူး
(၂၃) နှစ် - စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရှိ၊
အသက် ၂၃ - တစ်နှစ် - ED ရောဂါပျောက်ကင်းသွားသည်။ ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအသံ။ အခြားလူများကငါ့ကိုမှတက်ရှာနေ
အသက် ၂၃ - ကုသခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ ပုံဖော်ခြင်း - နံနက်သစ်သည်တသမတ်တည်းရှိပြီးကျွန်ုပ်သည် ပို၍ စိတ်အေးလက်အေးရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုမှာအလွန်နည်းပါးသည်။
အသက် (၂၃) နှစ် - PIED ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်ခဲ့ခြင်း - ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေး (စာရွက်များအောက်တွင်သာမကအပြင်ဘက်တွင်ပါ) သူတို့ဘယ်သောအခါမျှပိုကောင်းလာသည်မဟုတ်ပါ
(၂၃) နှစ် - PED သွေးဆောင်မှုကို ED: နောက်ဆုံးမှာတော့ငါဟာကောင်းမွန်တဲ့လိင် - ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်တယ်
(၂၃) နှစ် - Porn-ED သွေးကိုကုသပေးသည်။ လိင်သည်အလွန်ကောင်းသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးအခေါ်ကိုပြောင်းလဲကြပါစို့။
အသက် ၂၃ နှစ် - Porn-inced ED သည်အပျိုစင်ဘဝပျောက်ဆုံးသွားပြီးရည်းစားရသွားသည်။
(၂၃) နှစ် - Porn-ED သွေးယိုခြင်း၊
(၂၃) နှစ် - ကျွန်ုပ်ပြုခဲ့သမျှအကြီးမားဆုံးလူနေမှုပုံစံစတဲ့ပြောင်းလဲမှု
အသက် ၂၃ - လွန်ခဲ့သောရက်ပေါင်း ၁၂၀ သည်ကျွန်ုပ်ဘဝ၏အကြီးမားဆုံးရက်ပေါင်း ၁၂၀ ဖြစ်သည်။
(၂၃) နှစ် - တစ်ယောက်တည်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျတယ်၊ စိုးရိမ်ပူပန်ပြီးဘယ်တော့မှလိင်မဆက်ဆံဘူး။ အခုဒီအရာအားလုံးကိုဖြေရှင်းပြီးပြီ
(၂၃) နှစ် - အမျိုးသမီးများအလွန်ကြောက်လန့်ခဲ့သည်။ ယခုငါသူတို့ကိုဘယ်ဘက်နှင့်ညာဘက်သို့ထွက်ခွာသွားသည်
အသက်အရွယ် 23 - နက်ရှိုင်းသောဘေ့စကားသံကိုအကြှနျုပျကိုလှည့်ပတ်ဖြစ်ခြင်းတူသောမိန်းကလေးများ, ပိုကောင်းတဲ့ကြွက်သားသေံ
အသက်အရွယ် 23 - ယခု wayyyy ပိုကောင်းစိုက်ထူ, သွားကြောင်းလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု / ဦးနှောက်မြူ
(၂၄) နှစ် - (ED, DE) လိင်သည် ပို၍ ကောင်းသည်၊ လူမှုရေး၊ ပိုမိုလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သည်
အသက် ၂၄ - (ED) ၇၁ ရက် - ယာယီ Viagra အသုံးပြုခြင်း
အသက် ၂၄ - (ED) ၇၃ ရက် - ကျွန်ုပ် reboot လုပ်စဉ်ကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည်
အသက် ၂၄ - (ED) ရက်ပေါင်း ၉၀ -“ နှစ်သိမ့်ဇုန်အကျဉ်းထောင်မှ” မှလွတ်မြောက်ရန်
အသက် ၂၄ - (ED) အလွန်ဆိုးရွားသောဆုတ်ခွာသော်လည်းအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောခရီးဖြစ်သည်
(၂၄) နှစ် - (ED) လူမှုရေးယုံကြည်မှုနှင့်စစ်မှန်သောအမျိုးသမီးများအားဆွဲဆောင်ခြင်း၊
(၂၄) နှစ် - ED (ငါ ED) ငါခက်လာပြီ။
အသက် (၂၄) နှစ် - (၈) လအကြာမှပြန်လည်အသက်ပြန်ရှင်လာသည်။ ယခုအချိန်အထိနှင့်မတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက်တိုးတက်မှု။
အသက် ၂၄ - ရက် ၁၀၀ အဘယ်သူမျှမ PMO!
အသက် ၂၄ - ရက် ၁၀၀ ရှိသော်လည်း ၂ နှစ်ကြာသည်။ ငါပေါ့သောအခါနောက်ဆုံးတော့အောင်မြင်သော
အသက် ၂၄ နှစ်မှ ၂ နှစ် - ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးကြည့်ရှုချိန် မှစ၍ ကျွန်ုပ်၏ဘဝအရည်အသွေးသည်သိသိသာသာပြောင်းလဲသွားသည်
အသက် ၂၄ - ၇ လနှင့်နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်သည်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဟုခံစားမိသည်။
အသက် ၂၄ - ရက် ၉၀ အစီရင်ခံစာ - နောက်ဆုံးကြီးထွားမှု
အသက် ၂၄ - ၉၀ ရက်အစီရင်ခံစာ - ထာဝရပြောင်းသည်
အသက် ၂၄ - ရက် ၉၀ အစီရင်ခံစာ။ ဘ ၀ ဆိုတာရန်ပွဲတစ်ခုပါ။ မီးနှင့်အလိုတော်ပါဝါပြန်သည်။
အသက် ၂၄ - ရက်ပေါင်း ၉၀ ကျွန်ုပ်စိတ်ဓာတ်ကျပြီးမပျော်ခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်နေ့စဉ်လူသစ်တစ် ဦး နှင့်တူသည်။
အသက် ၂၄ - ရက် ၉၀ - ဘဝသည်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာသည်
အသက် ၂၄ - ရက် ၉၀ ။ ပိုမို၍ အခိုင်အမာယုံကြည်မှုရှိပြီးလုံ့လ ရှိ၍ ဦး နှောက်မှေးမှိန်သွားသည်
အသက် ၂၄ - ၉၅ ရက် - ဆယ်နှစ်ကျော်ညစ်ညမ်းရုပ်ထွက်ပြီးနောက်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏အဆုံးတွင်အလင်း။
အသက် ၂၄ - PMO ကိုရှောင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ထူးဆန်းသောကုသမှုမဟုတ်ပါ။
(၂၄) နှစ် - တစ်နှစ်ခွဲနီးပါး - စွဲလမ်းမှုမရှိသူတစ် ဦး ၏အမြင်
အသက် (၂၄) နှစ် - အောင်မြင်သောဖြစ်ရပ်များတွင် PMO မပါဘဲသူတို့၏ဘ ၀ သည်မည်သို့ပိုကောင်းလာသည်ကိုပြောခဲ့သည်၊
၂၄ နှစ် - HOCD ရိုက်နှက်ခြင်း = ကျွန်ုပ်အသက်ကိုကယ်တင်ခြင်း
(၂၄) နှစ် - ကျွန်ုပ်၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုပျောက်ကွယ်သွားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်ဘ ၀ ကိုပြန်လည်ရှင်သန်နိုင်သည်
အသက် ၂၄ - ပိုကောင်းသောအာရုံစိုက်မှု၊ အေးဆေးတည်ငြိမ်မှု၊ လူမှုရေးစိတ်ပူပန်မှုမရှိ၊ မောပန်းမှုမရှိခြင်း၊ အပြုံးဖြင့်ငါ့ကိုကြည့်နေသောမိန်းကလေးများ၊
အသက် ၂၄ နှစ် - အိပ်စက်ခြင်းကပိုကောင်းတယ်၊ နောက်ဆုံးတော့ငါအာရုံစိုက်နိုင်လာပြီ။ ဘဝကိုပိုပြီးအေးဆေးငြိမ်သက်ပြီးသက်သောင့်သက်သာရှိတဲ့အမြင်ကိုစတင်ခံစားခဲ့ရတယ်။
အသက် ၂၄ - အကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲမှု - နေရာတိုင်းမှာမိန်းကလေးတွေကိုငါတွေ့တယ်။ ဒါ့အပြင်, 24 နှစ်အတွင်းပထမ ဦး ဆုံးနေ့စွဲ
အသက် ၂၄ - လိင်မှုဆိုင်ရာ ဦး စားပေးပြောင်းလဲခြင်း (သို့မဟုတ်ပြောင်းပြန်ပြောင်းခြင်း) NoFap မှ ၁ လ
အသက် (၂၄) နှစ် - ကျွန်ုပ်အလွန်အမင်းကြည်လင်သောအသားအရေ၊ စိတ်ပူမှုလျော့နည်းခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုများကိုခံစားမိသည့်အမျိုးသမီးကိုချိန်းတွေ့ခြင်း
အသက် ၂၄ ရက် - နေ့ ၁၅၈ အစီရင်ခံစာ (ပြင်းထန်သော PIED, DE) ။ ငါသည်လည်းဤအကြောင်းကိုစာအုပ်တစ်အုပ်ရေးသားခဲ့သည်။
အသက် ၂၄ - ၅၀“ နောက်ဆုံးရုန်းကန်ရမှုတစ်နှစ်!”
အသက် ၂၄ ရက် ၈၆ ရက်။
(၂၄) နှစ် - သန္ဓေတည်ခြင်းနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း ၂၁ ပတ်
အသက် ၂၄ - နှောင့်နှေးမှုများစွာရှိသော်လည်းပင်သုတ်ရည်လွှတ်မှုသည်နှောင့်နှေးခဲ့သည်
အသက် ၂၄ - NoFap လုပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အပေါ်များစွာအကျိုးသက်ရောက်သည်။ ၎င်းသည်နှေးကွေးသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်
အသက် ၂၄ - ED & ဦး နှောက်မှေးမှိန်သွားပြီ၊ ပို၍ ပျော်ရွှင်၊ ပို၍ အကျိုးဖြစ်ထွန်းမည်၊
အသက် ၂၄ - ED & နှောင့်နှေးမှုသုက်ပျောက်ခြင်းပျောက်ကင်းသွားသည်
အသက် ၂၄ - ED နှင့်ထိခိုက်လွယ်သောခံစားမှု၊
အသက် ၂၄ နှစ် - ED နှင့် femdom fetish ။ တစ်နှစ်နီးပါး
အသက် ၂၄ နှစ် - ၉ လပြန်ဖွင့်ပြီး ၃ လကြာဝါယာကြိုးဖြုတ်ပြီးနောက် ED ကုသသည်
အသက် ၂၄ နှစ် - ED ကို ၈၅ ရက်ကုသပြီးပြီ
အသက် ၂၄ - ရက်ပေါင်း ၁၁၀ အတွင်းကုသမှုခံယူခဲ့။ မိန်းကလေးများနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ရိုးသားခြင်းသည် rewiring အတွက်သော့ချက်ဖြစ်သည်။
အသက် ၂၄ - ED ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ငါတောင်မှထင်ခဲ့ရင်တောင်ပျောက်ကင်းသွားတယ် (၂၀ လ)
အသက် ၂၄ - ED ပျောက်ကင်းသွားသည်၊ လိင်သည်အံ့သြစရာကောင်းသည်၊
အသက် ၂၄ - ED ပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးခဲ့သည်။ ၅ Viagras သည်အသွင်ကူးပြောင်းမှုတွင်ကူညီခဲ့သည်
အသက် ၂၄ နှစ် - ED ပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးခဲ့သည်။ ယုံကြည်မှုမြင့်မားသည်။ လိင်သည်ပိုမိုရှင်းလင်းပြတ်သားသည်။ GF ကကျွန်ုပ်ကိုကျေနပ်သည်
အသက် ၂၄ - ED ကုသပေးသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၁ နှစ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို ၂ လကွာဝေးကွာနေပြီးအနည်းဆုံးပြောရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်နေသည်။
အသက် ၂၄ - ED ပျောက်ကင်းသွားပြီ နောက်ဆုံးတော့ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာမယ်။
အသက် ၂၄ - ED ပျောက်ကင်းသွားသည်။ အတွေ့အကြုံများကပိုမိုတောက်ပလာပြီးသင်၏အာရုံများသည် ပို၍ နိုးနိုးကြားကြားရှိသည်။
အသက် ၂၄ - ED ပျောက်ကွယ်သွားပြီ။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာငါပြောင်းခဲ့တဲ့အတိုင်းငါအရမ်းပြောင်းလဲသွားပြီ။ NoFap ဟာကြီးမားတဲ့အခန်းကဏ္playedကနေပါဝင်ခဲ့တယ်။
အသက် ၂၄ - ED ရောဂါပျောက်ကင်းသွားသော်လည်းလိင်ဆက်ဆံမှုသည် (၇) ပတ်မျှအစပြုသည်။ ငါနောက်ဆုံးတော့အနာပျောက်
အသက် ၂၄ - ED ရောဂါပျောက်ကင်းသွားပြီဖြစ်သော်လည်းလိင်ဆက်ဆံရန်စိတ်မသက်မသာဖြစ်နေသည်။
အသက် ၂၄ - ED ပြန်လည်နာလန်ထူခြင်း - ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားသည်လုံးဝသေဆုံးသွားသော & cyberex စွဲစွဲလမ်းမှုစွဲလမ်းခဲ့သည်
အသက် ၂၄ နှစ် - ED သည်တစ်နှစ်အကြာတွင်ပုန်းအောင်းနေဆဲဖြစ်သည်
၂၄ နှစ် - ED အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်း။ ထွက်ပေါက်တစ်ခုရှိတယ်
အသက် ၂၄ - ED ။ ၁၁ နှစ်အရွယ် မှစ၍ PMO ။ အောင်မြင်စွာ 24 လအတွင်း Rebooted ။ လက်ထပ်လိုက်ပြီ။
(၂၄) နှစ် - ED: Reboot လုပ်ခြင်းကကျွန်တော့်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ (၂ နှစ်ထပ်တိုးခြင်း)
အသက် ၂၄ - အံ့သြစရာကောင်းတယ်၊ မိန်းကလေးတွေနဲ့မလုံခြုံမှုမရှိဘူး၊ ငါ့ဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိပါသလား
အသက် ၂၄ - နောက်ဆုံးတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်အဆင်ပြေသည်။ ကြီးမားတဲ့ယုံကြည်မှု။ လိင် drive ကိုအနာပျောက်။
အသက် ၂၄ - နောက်ဆုံးတွင်ရာသက်ပန်နှောင့်နှေးသည့်သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းကိုကုသပေးခဲ့သည်။
၂၄ နှစ် - စွမ်းအင်၊ အာရုံ၊ ယုံကြည်မှု၊ သနားခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုနည်းခြင်း၊
အသက် (၂၄) နှစ် - ကျောက်တုံးကဲ့သို့ခဲယဉ်းသည်။ စိတ် နည်း၍ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ စွမ်းအင်တိုးခြင်း၊
(၂၄) နှစ် - ပို၍ ခက်ခဲသောရေရှည်စိုက်ထူနိုင်မှု၊ စစ်မှန်သောအမျိုးသမီးများအတွက်ပြင်းထန်သောတိုက်တွန်းမှု၊
အသက် ၂၄ နှစ် - ကျွန်ုပ်၏ ED ကိုကုသသော်လည်း PMO မူးယစ်ဆေးဝါးများသည်လွန်ခဲ့သော ၁၈ လအတွင်းကျွန်ုပ်ကိုပြန်ထားလိုက်သည်
(၂၄) နှစ် - HOCD နှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု - ညစ်ညမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏အကြံဥာဏ်များအကျဉ်းချုပ်။
အသက် ၂၄ နှစ် - NoFap ကကျွန်တော့်ရဲ့အနာဂတ်အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်၊ ငါ့ကိုကောင်လေး ၄ ယောက်ရခဲ့တယ်
အသက် ၂၄ - ပုံမှန်အားဖြင့်မိန်းကလေးများနှင့်ကျွန်ုပ်စကားမပြောနိုင်ပါ၊ သူတို့ကိုမျက်စိတွင်ပင်ကြည့်။ မရပါ။
အသက် ၂၄ နှစ် - ယခုတွင်ကျွန်ုပ်၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာလုပ်ဆောင်နေသည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအာရုံစိုက်မှု၊ ရည်မှန်းချက်ပိုများလာရန်၊ စွမ်းအင်ပိုမိုရရှိရန်၊
(၂၄) နှစ် - ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုခံနေရသည်
အသက် (၂၄) နှစ် - ကျွန်ုပ် ပို၍ ပျော်ရွှင်သည်။ ကလေးငယ်တစ် ဦး အနေနှင့်ပြန်ခံစားရသည်။ စွမ်းအင်တန်ချိန်၊ ကျွန်ုပ်အသားအရေတွင်အဆင်ပြေပါသည်။
အသက် ၂၄ - ယုံကြည်မှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးလာခြင်း၊ ဂရုစိုက်မှုကင်းမဲ့သောစိတ်ထားရှိခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုနည်းခြင်း၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းများ - ကျွန်ုပ်တွေ့ဆုံသူတိုင်းကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သ
အသက် ၂၄ နှစ် - ယုံကြည်မှုနှင့်လူမှုရေးစွမ်းရည်များမြင့်တက်လာခြင်း၊ အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောအရာများကိုလုပ်ဆောင်ရန်ဆာလောင်မှု၊ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပိုပြီးအာရုံစိုက်စိတ်ကို
(၂၄) နှစ် - တစ်နှစ်အတွင်းမှာငါထင်ထားတာထက်ဘဝဟာပိုပြီးပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်
အသက် ၂၄ နှစ် - ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိ၊ ပျော်ရွှင်မှုနှင့်ပိုမိုစွမ်းအင်ပြည့်စုံမှု၊ အရာအားလုံးပိုကြည့်၊ တောက်ပသည်။ မိန်းကလေးများကိုသတိပြုမိသည်
အသက် ၂၄ နှစ် - လက်ထပ်ခဲ့သည်။ ED cured - ပစ္စည်းကိုပိုကောင်းအောင်၊ ပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိအောင်ထိန်းသိမ်းထားပါ။ မိန်းမတွေကအရာဝတ္ထုတွေထက်ပိုများတယ်
အသက် ၂၄ - ထိတ်လန့်တိုက်ခိုက်မှုရှိသောဆေးကျောင်းသူ
အသက် ၂၄ နှစ် - ဆေးကျောင်းသား - ယုံကြည်မှု၊ စွမ်းအင်၊ ပိုကောင်းသောလူမှုရေးဘဝ။ ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောစိတ်ခံစားမှု။
အသက် ၂၄ နှစ် - အမျိုးသမီးများအပေါ်ယုံကြည်မှုပိုမိုရှိခြင်း၊ စွမ်းအင်ပိုမိုများပြားလာခြင်း၊
အသက် ၂၄ - နိုဖပ်မှကျွန်ုပ်၏ကျန်းမာရေးအကျိုးခံစားခွင့်
၂၄ နှစ် - ပျော်ရွှင်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်စွမ်းရည်။ nofap ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အသက် ၂၄ - တစ်နှစ် - ဘဝဟာအံ့သြစရာကောင်းတယ်၊ လိင်ကအံ့သြစရာကောင်းပြီးငါလည်းပျော်တယ်။
(၂၄) နှစ် - PIED - ငါအသက် ၁၇ နှစ်ပြည့်နေပြီ။ စိတ်ပျက်စရာတွေ၊ ယုံကြည်မှုတွေနဲ့အားလုံးနီးပါးဟာငါဟာ pixel တွေမဟုတ်ဘဲတကယ့်မိန်းမတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။
အသက် ၂၄ - ရက် ၉၀ အပြီး PIED ပျောက်ကင်းသွားပြီ - ဒါပေမယ့်ငါကပြန်စပြီး PIED ကိုပြန်လုပ်တယ်။
အသက် ၂၄ - PMO ကငါ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးလုနီးပါးဖြစ်ခဲ့သည်။ အခုတော့ပိုပြီးပျော်ရွှင်ပြီးကျန်းမာလာပြီ
အသက် ၂၄ - ပြင်းထန်သော ED - တစ်နှစ်အကြာတွင်ပျောက်ကင်းသွားသည်။
အသက် ၂၄ နှစ် - လိင်မှုကိစ္စနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဖြတ်ပြီးပြန်ထွက်လာသည်
(၂၄) နှစ် - ကျွန်ုပ်ခရီးစတင်ချိန် မှစ၍ အကျိုးကျေးဇူးများစာရင်းအပြောင်းအလဲများစွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်
(၂၄) နှစ် - လူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်ကိုပိုကောင်းစေတယ်၊ ​​တခါတရံမှာအဖြစ်မှန်ဟာအံ့သြဖွယ်ကောင်းပြီးအမှန်တကယ်မှော်ဆန်တယ်လို့ခံစားရသူတွေကိုရတယ်။ ငါ့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကတကယ်တိုးတက်လာတယ်
(၂၄) နှစ် - လူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်များပျောက်ကွယ်သွားပြီ
အသက် ၂၄ နှစ် - တစ်နှစ်ရုန်းကန်နေရမှု
အသက် ၂၄ - အရာရာကိုလုံး ၀ ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်မှသင်စတင်မြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။
အသက်အရွယ် 24- မျက်လုံးအဆက်အသွယ်, လျှော့ချဦးနှောက်မြူတိုးတက်ကိုယ်ခံစွမ်းအားတိုးတက်အာရုံစိုက်တိုးမြှင့်
အသက် ၂၅ နှစ် - ကိုယ့်ကိုယ်ကို PMO စွဲသည်ဟုမထင်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏ပြproblemsနာများအားလုံးမှော်အတတ်ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းမရှိပါ။
အသက် ၂၅ - (ED) PMO သို့ပြန်လာပြီးနီးပါးအောင်မြင်သည်
အသက် (၂၅) နှစ် - (ED) အမြင်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများ၊ ယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်စွမ်းအင်တိုးတက်လာသည်
အသက် ၂၅ - (ED) Reboot လုပ်စဉ်အမျိုးသမီးများနှင့်ဆက်သွယ်ရန်
အသက် ၂၅ - (ED) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားသောရုပ်ပုံများနှင့်အခြားစွဲလမ်းမှုများ
အသက် ၂၅ - (ED) လက်ထပ်ပြီး၊
အသက် ၂၅ နှစ် - (ED) ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောင်းလဲခြင်းကမေးရိုးပေါ်သို့ကျဆင်းသွားသည်
အသက် ၂၅ - ၁ နှစ်ခက်ခဲသောအခြေအနေ - ပြင်းထန်သောလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုမှသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအရာတစ်ခုအထိဖြစ်သည်
အသက် ၂၅ နှစ်မှ ၁ နှစ်ထိ - အကျိုးကျေးဇူးများစွာခံစားခဲ့ရသည်
အသက် ၂၅ နှစ်မှ ၁ နှစ်အထိ - မယုံနိုင်စရာအောင်မြင်မှုများစာရင်း
အသက် ၂၅ နှစ် - ၁ နှစ်။ ပိုကောင်းတဲ့ရည်းစားနဲ့ပိုကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်။ ရငျးနှီးမှုတိုးလာသည်
အသက် ၂၅ - ၁ နှစ်လိင်ကြင်ဖော်ဖက်ကိုပြောင်းလဲသည်။ ကျွန်တော့် ဦး ခေါင်းကကြည်လင်နေပြီးမြူတွေကလည်းထွက်လာပြီ
အသက် ၂၅ - ၁ နှစ် - အလွန်ပြင်းထန်သည့် ED နှင့်ပြန်လည်ထူထောင်နေဆဲဖြစ်သော်လည်းယခုတွင်ငါသည်အဆင်ပြေမည်ဟုသေချာနေပြီ
အသက် ၂၅ ရက် - ၁၀၀ ရက် - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဖြည်းဖြည်းချင်းခွဲထုတ်ခြင်းကကျွန်ုပ်၏ဆက်ဆံရေးကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခွင့်ပေးသည်။
အသက် ၂၅ - ၁၆၅ ရက်နှင့်ကျွန်ုပ်သိရှိခဲ့ရာများ။
အသက် ၂၅ - ၁၈၀ ရက် - ED & morphing လိင်အရသာ
အသက် ၂၅ - ၁၈၀ ရက်၊
အသက် ၂၅ - ၁၈၅ ရက် - သင်သည်သင်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများကိုနှုတ်ဆက်နိုင်သည်
အသက် ၂၅ နှစ်မှနှစ်နှစ်အကြာကျွန်ုပ်၏ညစ်ညမ်းသော ED သည်ပျောက်ကွယ်သွားပြီဖြစ်သည်။
အသက် ၂၅ - ၄၁ ရက် - ကျွန်ုပ်ဘ ၀ နှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းစတင်ဆည်းပူးနေသည်
အသက် (၂၅) မှ (၄၇) ရက်အတွင်း၊
အသက် (၂၅) မှ (၆) လအကြာကျွန်ုပ်သည်ပေါင်းပင်များကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းမရှိတော့ပါ။ (ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလုပ်မိလျှင်) ကျွန်တော်သည်လူမှုရေးအရအထီးကျန်ဆန်ပြီးပိတ်ဆို့ခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါ။
အသက် ၂၅ - ၆ လ - ကျွန်ုပ်၏အနာဂတ်၊ အလုပ်အကိုင်နှင့်ဝါသနာများကိုယခုကျွန်ုပ်စဉ်းစားသည်။
အသက် ၂၅ - ရက် ၆၀ တွင် Porn-ED ဆေးကိုကုသရန်
အသက် ၂၅ - ၈၈ ရက်အစီရင်ခံစာ၊ အနည်းငယ်ကြိုးစားရန်လိုသည်
အသက် ၂၅ နှစ်မှ ၉ လအရွယ်ရှိသော porn-induced ED မှပြန်လည်နာလန်ထူရန်။
အသက် ၂၅ - ၉ လ။ ED ပျောက်ဆေး၊ HOCD အများစုပျောက်သွားသည်။
အသက် ၂၅ - ရက် ၉၀ အစီရင်ခံစာ။ ကျွန်ုပ်၏အင်ဂျင်ကိုစတင်ရန်အချိန်။
အသက် ၂၅ - ရက် ၉၀ အစီရင်ခံစာ။ မျှော်လင့်ချက်အားလုံးပျောက်ဆုံးပုံရသည်။
အသက် ၂၅ - ရက်အသစ် ၉၀ အတွင်းလူသစ် တစ်နှစ် - ၁၀ နှစ်အတွင်းပထမဆုံးအောင်မြင်သောလိင်ဆက်ဆံမှု
အသက် ၂၅ - ရက် ၉၀ - ယုံကြည်မှု၊ ဆွဲဆောင်မှု၊ ချစ်သူ၊ အကြံပေးချက်များ
အသက် ၂၅ - ၁ နှစ် nofap ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည် ၁၀၀% သောစိုးရိမ်စိတ်၊ HOCD နှင့် ED ရောဂါပျောက်ကင်းသည်
အသက် ၂၅ နှစ် - nofap ကြိုးပမ်းမှုတွေပြီးတဲ့နောက်ငါ ၂ လကြာအောင်လုပ်ခဲ့တယ်၊ ED ကိုကျော်ဖြတ်ပြီး၊
အသက် ၂၅ - ရက် ၁၅၀ တွင်“ The New Normal” ကိုရောက်သည်။
အသက် ၂၅ - ပုံမှန်မဟုတ်သောညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူသည် PIED ကိုပြတ်ပြတ်သားသားတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ပြုပြင်သည်
အသက် ၂၅ နှစ် - ငါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာကိုစွန့်ခွာပြီးကတည်းကငါ့ဘဝမှာ Awesomeness ဖြစ်ခဲ့တယ်
အသက် ၂၅ - reboot မလုပ်ခင်ငါအရမ်းစိတ်ပူပန်ခဲ့တယ်၊ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မှုတွေ၊ hypochondria၊
အသက် ၂၅ နှစ် - ကျန်းမာသန်စွမ်းသောအမျိုးသမီးများအတွက်ပျင်းရိခြင်း၊
အသက် ၂၅ - ကျွန်ုပ်၏ ED နှင့် DE ရောဂါပျောက်ကင်းသွားသည်
အသက် (၂၅) ရက် ၈၆ ရက် - မျက်လုံးချင်းထိတွေ့ပါ၊ ပို၍ ယုံကြည်မှုရှိပါကဖောက်သည်များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုသည်မလွယ်ကူပါ
အသက် ၂၅ နှစ် - စိတ်ကျဝေဒနာပျောက်သွားပြီ၊ ပို၍ စစ်မှန်။ နွေးထွေးမည်။ အမျိုးသမီးများသည်ကျွန်ုပ်ကို ပို၍ စွဲလမ်းစေသည်။
အသက် ၂၅ - schizotypal ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါဖြင့်ရောဂါလက္ခဏာပြ: ရောဂါလက္ခဏာများသိသိသာသာတိုးတက်ခဲ့သည်
အသက် ၂၅ နှစ် - သုံးနှစ်အတွင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများနှင့်အမျိုးသမီးများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း၌ကျွန်ုပ်သည်အလွန်မိုက်မဲသောအရာများဖြစ်သည်
အသက် ၂၅ နှစ် - ED -“ မင်းတစ်ယောက်ယောက်ကိုရှာရမယ်”
အသက် ၂၅ နှစ် - ED ရောဂါပျောက်ကင်းသွားပြီ။ ယုံကြည်မှုနှင့်လူမှုရေးစွမ်းရည်များပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်
အသက် ၂၅ နှစ် - ED နှင့်လိင်ဆက်ဆံလျှင် ၁ နှစ်ခန့်ကြာသည်
အသက် ၂၅ နှစ် - ၁၆ လရုန်းကန်ခဲ့ရပြီးနောက် ED ပျောက်ကင်းသွားသည်။
အသက် ၂၅ နှစ် - ED ရောဂါပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးခဲ့သည်။ ၃ လမပြည့်၊ ၁ လထိမထိပါ
အသက် ၂၅ - ED ကုသပေးသည်။ ကျွန်ုပ်သည်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ အကြောက်လွန်ရောဂါ၊ သတ်သေခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊
အသက် ၂၅ နှစ် - ED ပျောက်ဆေးပျောက်
အသက် ၂၅ - ED ပျောက်ကင်းသွားသည်။ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊ ပိုမိုအာရုံစိုက်။ မောင်းနှင်ပါ
အသက် ၂၅ နှစ် - ED ပျောက်ကွယ်သွားပြီ၊
အသက် ၂၅ နှစ်မှ ၁၈ လကြာသည်
အသက် ၂၅ - ED ရောဂါပျောက်ကင်းသွားပုံရသည်
အသက် ၂၅ နှစ် - ED သည်မပျောက်နိုင်သည့်နံနက်သစ်သားဖြင့်ထိတွေ့ခြင်း၊
အသက် ၂၅ နှစ် - ED၊ ပျော့ပျောင်းသော OCD၊ ယေဘူယျနှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်၊
အသက် ၂၅ - ED - စစ်မှန်သောလိင်နှင့်သက်ဆိုင်သည်
(၂၅) နှစ် - ED - ဒီနေ့အချိန်မှာကျွန်တော့်မှာစိုက်ထူခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးဘာမှမထူးခြားပါ
အသက် ၂၅ - ရှည်လျားပြီးမှောင်မိုက်သောဥမင်လိုဏ်ခေါင်းမှထွက်ပေါ်လာခြင်း
အသက် ၂၅ နှစ် - မီးစိုက်၊ မီး၊ စိတ်ဓာတ်ပြင်းပြမှု၊
အသက် (၂၅) နှစ် - ကျွန်ုပ်၏ပုံမှန်လိင်စိတ်နိုးထမှုနှင့်ရံဖန်ရံခါညစ်ညမ်းသောတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်
အသက် ၂၅ နှစ် - လေးနှစ် ED
အသက် ၂၅ - ၀ မှ ၁၀၀ အထိ။ တစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်း!
(၂၅) နှစ် - Porn-ED ဆေးမှသည်ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်းလိင်ဆက်ဆံမှုပြုသည်
အသက် ၂၅ နှစ် - လိင်တူချစ်သူအမျိုးသား: ကျွန်ုပ်၏အပျိုစင်ဘဝကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည်လင်ပြတ်သားမှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုသည်များစွာတိုးတက်ခဲ့သည်
အသက် ၂၅ နှစ် - လိင်တူချစ်သူ - ED သည်ရက်ပေါင်း ၁၅၀ အတွင်းကုသနိုင်သည်။ ငါ့အလုပ်အတွက်ပိုပြီးအောင်မြင်သော။
အသက် ၂၅ နှစ် - ရက် ၆၀ အကြာတွင် ED ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရပါကကျွန်ုပ်သည် ED လုံးဝနီးပါးလွတ်သွားပြီးအလွန်ခံစားရသည်။
အသက် ၂၅ နှစ် - ငါလိင်စွဲလမ်းသူတစ် ဦး ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းငါသဘောပေါက်ခဲ့တယ်
အသက် ၂၅ - ကျွန်ုပ်သည်ကွဲပြားခြားနားသောလူသားမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကွဲပြားခြားနားသောလူတစ်ယောက်ပါ
အသက် ၂၅ နှစ် - ကျွန်ုပ်၏ဆက်ဆံရေးကိုခြိမ်းခြောက်နေသောကျွန်ုပ်၏ PIED သည် ၉၀% ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်ပြီဟုအလွန်ဝမ်းမြောက်စွာဖော်ပြနိုင်သည်
အသက် ၂၅ နှစ် - ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုပြီးသတိထားမိလာတယ်။
အသက် ၂၅ - ငါ porn-induced ED ကိုကုသသော်လည်းငါ့အကျင့်ဟောင်းကိုပြန်ကျင့်ခဲ့သည်။
အသက် ၂၅ - ကျွန်ုပ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလွှာကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့သည်။
အသက် ၂၅ - စိတ်ကူးစိတ်သန်းနှင့်ဖန်တီးမှုစွမ်းအားပြန်လာပြီ။ အမျိုးသမီးများကိုကျွန်ုပ် ပို၍ တန်ဖိုးထားသည်
အသက် ၂၅ နှစ် - မျက်လုံးထိတွေ့ခြင်း၊ လူမှုရေးပိုမို၊ အာရုံစူးစိုက်မှုပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်း
အသက် ၂၅ - ရက်ပေါင်း ၉၀ တွင်ကျွန်ုပ်ဘဝပြောင်းလဲသွားပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်မှတ်မိနိုင်သည့်အချိန်ကတည်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။
အသက် ၂၅ နှစ် - ယုံကြည်စိတ်ချမှုတိုးပွားလာခြင်း၊
အသက် ၂၅ နှစ် - စွမ်းအင်နှင့်လှုံ့ဆော်မှုများတိုးပွားလာခြင်း၊ အတွေးများကြည်လင်လာခြင်း၊ ယုံကြည်မှုပိုမိုကြီးမားလာခြင်း၊
အသက် ၂၅ - ကျွန်ုပ် ဦး နှောက်နှင့်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံစပ်ကြားအဆက်ပြတ်သည်နောက်ဆုံးတွင်ပြန်လည်နာလန်ထူလာသည်ဟုခံစားရသည်
အသက် ၂၅ နှစ် - စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိုးရိမ်မှုလျော့နည်းခြင်း၊ ခင်မင်ရင်းနှီးမှုနှင့်ဆက်ဆံရေးအပေါ်ရှင်းလင်းခြင်း၊ ရက်စွဲအနည်းငယ်သာ
အသက် ၂၅ - ငါမွေးဖွားလာတာလိုပါပဲ
အသက် ၂၅ - အိမ်ထောင်ရေးသည်ယခင်ကထက်ပိုကောင်းသည်၊ ဦး နှောက်မှေးမှိန်သွားခြင်း၊ အိပ်စက်ခြင်းကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်း၊
အသက် ၂၅ နှစ် - အိမ်ထောင်သည်။ Holy s ** t သည်ယခု ပို၍ ကောင်းမွန်သောအရာများဖြစ်သည်။
အသက် ၂၅ - စိတ်ရောဂါပျောက်သွားပြီ တိုးမြှင့်အာရုံစူးစိုက်မှု။ အကြီးမားဆုံးအကျိုးကျေးဇူးကတော့ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ရှင်နှင့်စကားပြောနေစဉ်သင့်လျော်သောမျက်လုံးချင်းဆုံခြင်းဖြစ်သည်
အသက် (၂၅) နှစ်၊
အသက် ၂၅ - ကျွန်ုပ်၏ခံစားချက်သည်ရက် ၂၀ အတွင်း၌သာပြန်လာသည်
အသက် ၂၅ - အလုပ်သစ်၊ ရည်းစားအသစ်၊ ဘဝအသစ်၊
အသက် ၂၅ - NoFap သည်ကျွန်ုပ်၏ Asperger ရောဂါကိုကုသပေးခဲ့သည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေမှားယွင်းစွာစစ်ဆေးခြင်း?
အသက် ၂၅ - NoFap သည်ကျွန်ုပ်လိုအပ်သောဆေးထိုးဆေးဖြစ်သည်
အသက် ၂၅ နှစ် - တစ်နှစ်အစီရင်ခံစာ - ယခုလိင်သည် ၃၀x ပိုမိုကောင်းမွန်သည်
အသက် ၂၅ ရက် - ၉၀ ထိတစ်နှစ် - Low libido & ED ကုသသည်
အသက် ၂၅ - တစ်နှစ်ရှိပြီ။ ယခုကျွန်ုပ်လွတ်သည်။ မင်းလုပ်နိုင်တယ်။
အသက် ၂၅ နှစ် - ငါဘယ်လောက်ယုံကြည်မှုရှိသလဲဆိုတာလူတွေကငါ့ကိုမှတ်ချက်ချသည်။ စိုးရိမ်ခြင်းမရှိတော့ပါ
အသက် ၂၅ - PIED & DE ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်ခဲ့ - ကျွန်ုပ်မှတ်မိနိုင်သလောက်ကျွန်ုပ်၏စိုက်ထူမှုကိုနှိုးဆွခြင်းမရှိဘဲထိန်းသိမ်းထားသောပြproblemsနာများရှိသည်
အသက် ၂၅ - PIED ကုသမှု - ကျွန်ုပ်သည် ၁၀၀% ခိုင်ခံ့သောစိုက်ထူခြင်းကိုမလွယ်ကူစွာရနိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်၏ရည်းစားအကြောင်းစဉ်းစားရုံနှင့်လုံလောက်သည်
(၂၅) နှစ် - Porn သည်ဘဝကိုမှေးမှိန်စေသည်။ ငါဘဝကိုအပြည့်အဝအသက်ရှင်ချင်တယ်
(၂၅) နှစ် - порအသုံးပြုမှုသည်ကျွန်ုပ်၏ဆုံးဖြတ်ချက်အားချို့ယွင်းစေပြီးကျွန်ုပ်ကို A-hole တစ်ခုဖြစ်စေခဲ့သည်
အသက် ၂၅ နှစ် - ပိုချိန်းတွေ့သည်
အသက် ၂၅ နှစ် - Porn သွေးဆောင် ED သည်ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ငါဘာပဲဖြစ်ဖြစ် porn ကိုလုံးဝစိတ်မ ၀ င်စားဘူး။
အသက် (၂၅) နှစ် - DE ကြောင့်နုတ်ထွက်ခြင်း၊
အသက် ၂၅ နှစ် - OCD လျှော့ချခြင်း၊ လူမှုရေး၊ အမျိုးသမီးများနှင့်ပိုမိုအောင်မြင်မှုရခြင်း၊ ပို၍ ကောင်းသောအရာများ၊ ကျွန်ုပ်၏သခင်အစီအစဉ်ကိုပြီးဆုံးခဲ့သည်
အသက် (၂၅) နှစ် - ခံစားခဲ့ရသောခံစားချက်များကိုဖယ်ရှားပြီးလူမှုရေးအရရာထူးတိုးသည်
အသက် ၂၅ - ကျွန်ုပ်ပြန်လည်ထူထောင်ရန်သော့ချက်
အသက် (၂၅) - စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းခြင်း၊ ဘဝကိုစိတ်မ ၀ င်စားခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေခြင်းအတွေးများနှင့်ဘ ၀ တွင်အသုံးမကျဟူသောခံစားချက်ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ပျောက်ကွယ်သွားသည်။
အသက် ၂၅ - ဒါကငါ့ရဲ့လိင်မှုဘ ၀ ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်
အသက် ၂၅ နှစ် - အစပြုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအိမ်တွင်းပါတီပွဲတစ်ခုကျင်းပခဲ့သည်။
အသက် ၂၅ - နှစ်ပေါင်း ၇၀ အတွင်းလိင်ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းခဲ့သည်။
အသက်အရွယ် 25 - ငါအကောင်း, ရှင်းလင်းပြတ်သားနှင့်စွမ်းအင်ခံစားနေပါတယ်
အသက်အရွယ် 25 - ပိုလှုံ့ဆျောမှု, အချိန်နှင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအား, မိန်းကလေးများငါ့ကိုပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုကိုရှာဖွေ
အသက် ၂၆ - (အက်ဒီ) ၂၂၅ ရက် - ကျွန်ုပ်၏စိုက်ထူမှုသည်သံမဏိကဲ့သို့ခိုင်ခံ့ပြီးကျွန်ုပ်၏ libido သည်ကောင်းကင်ပြာဖြစ်သည်
အသက် (၂၆) နှစ် (ED) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးခံစားခွင့်အပြင် No Fap သည်ကျွန်ုပ်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သည်
အသက် ၂၆ - (ED) ရှောင်ခြင်းကိုသာအာရုံမစိုက်ပါနှင့်။ ပြန်လည်နာလန်ထူအာရုံစိုက်ပေမယ့်မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အတူအာရုံစူးစိုက်ပါ။
(၂၆) နှစ် - ED (ED) သို့တိုင်တက်နေဆဲဖြစ်သည်
အသက် ၂၆ - (အေဒီ) နှစ်ကြိမ်ပြန်ဖွင့်ခြင်း - ပိုကောင်းသော်လည်းမပျောက်သေး။
အသက် ၂၆ နှစ်မှ ၁ နှစ် - ကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အရာများစာရင်း
အသက် ၂၆ - ရက် ၁၀၀၀ - ၃ နှစ်ပြည့်ကျန်းမာသောလိင်ဘဝ၊ ပိုမိုကျန်းမာသောဆက်ဆံရေးနှင့်ကျွန်ုပ်နှင့်ပိုမိုကျန်းမာသောဆက်ဆံရေးဖြစ်သည်။
အသက် ၂၆ - ၁၀ နှစ်နာတာရှည် ED ရောဂါပျောက်ကင်းသွားသည်
အသက် ၂၆ - ၁၀၅ ရက် - ED နှင့်လိင်ဆက်ဆံစဉ်ကာလအတွင်းမည်သည့်အခါကမှသုတ်ဆေးမထုတ်ပါ
အသက် ၂၆ - ၁၂ နှစ် PMO, ED: ယခုမူကားလူသစ်တစ် ဦး နှင့်တူသည်
အသက် ၂၆ - ၁၃၆ ရက် - NoFap ကကျွန်တော့်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သည်
အသက် ၂၆ - ၁၃၉ ရက်၊
အသက် ၂၆ မှ ၁၆၆ ရက်အကြာကျွန်ုပ်သည်ဘယ်သူမှမဟုတ်၊ ဆက်ဆံရေးနှင့်အလားအလာလည်းမရှိ၊
အသက် ၂၆ - ၂ လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ကကျွန်ုပ်သည်မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေရန်နီးကပ်လာပြီ။ ကျွန်ုပ်သည်ဒုတိယအခွင့်အရေးရရှိသည်ဟုခံစားရသည်
အသက် ၂၆ - ၃၃ ရက် - အောင်မြင်သောလိင် (ED)
အသက် ၂၆ - ၃၆၅ ရက် - ED မရှိတော့၊ ဆက်ဆံရေးချွေတာပြီးလိင်တိုးတက်လာသည်
အသက် ၂၆ ရက်မှ ၅၀ ရက်၊ ပျော်ရွှင်သော၊
အသက် ၂၆ ရက်မှ ၆၀ ရက်အတွင်း၊
အသက် ၂၆ - ၉၀ ရက်အစီရင်ခံစာ။ ဘဝကိုပြောင်းလဲခြင်း
အသက် ၂၆ - ရက် ၉၀ - ED သည်မကုသသော်လည်းအခြားအကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိသည်
အသက် ၂၆ - ၉၀ ရက် ဘဝအသစ်တစ်ခုလုံး!
အသက် ၂၆ - ရက်ပေါင်း ၉၀ မှတ်တမ်းနှင့်ရက်ပေါင်း ၂၅၀ update အသစ် vlog
ကျွန်ုပ်၏ ED ကိုကုသရန်အသက် ၂၆ မှ ၉၉ ရက်အကြား
အသက် ၂၆ - ယနေ့ကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ခဲ့သော NoFap အတွက်အကျိုးကျေးဇူးများအချို့
အသက် ၂၆ - ဝက်ခြံပျောက်သွားပြီး ၁၀ ကီလိုဂရမ်တက်နိုင်ပြီးမိန်းကလေးများတွင်အလှအပနှင့်စရိုက်ကိုရှာတွေ့နိုင်သည်
အသက် ၂၆ - PMO နှင့်မပြည့်စုံသော်လည်းကျွန်ုပ်၏ ED သည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်
အသက် ၂၆ နှစ် - လိင်ပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည်လင်ပြတ်သားမှုတိုးပွားလာခြင်း၊
အသက် ၂၆ ရက် - ၁၀၁ ရက် - သာယာတဲ့၊ တီထွင်ဖန်တီးမှု၊
အသက် ၂၆ ရက် - ၁၅၂ နှစ်။ ကျွန်ုပ်ဘ ၀ ၌ဤအရာကိုကျွန်ုပ်ဘယ်တော့မှမခံစားခဲ့ပါ။
အသက် ၂၆ ရက် - ၄၀၃: ကျွန်ုပ်၏ ED သည်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်ပုံရသည်။
အသက် ၂၆ - နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုသည်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်ခဲ့ခြင်း - ကျွန်ုပ်ဘဝတွင်အကောင်းဆုံးခံစားချက်တစ်ခုဖြစ်သည်
အသက် ၂၆ နှစ် - ကျွန်ုပ်သည်လူတစ်ယောက်ကိုကျွန်ုပ်အားတကယ့်လူတစ်ယောက်အဖြစ်ပြောင်းလဲလာသည်ဟုပြောခဲ့သည်
အသက် ၂၆ - ED သည်ရက်ပေါင်း ၂၄၀ တွင်ကုသခဲ့ပြီးနောက်အောက်ခြေကျောက်တုံးကိုထပ်မံထိမှန်ခဲ့သည်။
အသက် ၂၆ - ED ရောဂါပျောက်ကင်းသွားသည်၊ ယုံကြည်မှုပိုမိုမြင့်မားလာသည်
(၂၆) နှစ် - ED သည် HOCD ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ကုသပေးခဲ့ပြီးအပြင်ထွက်ပြီးမိန်းကလေးများနှင့်ထပ်မံတွေ့ဆုံခဲ့သည်
အသက် ၂၆ - ED ပျောက်ကင်းသွားပြီ၊ လူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်သုညသို့ရောက်သည်၊ ယုံကြည်မှုတိုးပွားလာပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြတ်သားသည်
အသက် ၂၆ နှစ် - ED သည်နေဆဲ DE နည်းနည်းပျောက်ကင်းသွားသည်။ သာ။ ကြီးမြတ်ပျော်ရွှင်မှု & ယုံကြည်မှု
အသက် ၂၆ နှစ် - ED ပျောက်ကင်းသွားပြီ - ဘဝသည်ယခုပင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်အကျိုးများစွာရှိ၏။
အသက် ၂၆ နှစ် - ED ပျောက်ကင်းသွားပြီ - ကောင်မလေးနှင့် rebooting
အသက် ၂၆ - ED ကုသသည်။ အလွန်စိတ်ရှည်သည်းခံ။ နားလည်သောရည်းစားနှင့်အသေးငယ်ဆုံးသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုမကြည့်ပါ
အသက် ၂၆ - ED ပျောက်ကင်းသွားသည်။ 26 ရက် Hard mode ။
အသက် ၂၆ - ED ပျောက်သွားပြီ နောက်ဆုံးတော့လိင်ဆက်ဆံမှုနှင့်အတူ orgasmed
အသက် ၂၆ - ED ပျောက်သွားပြီ ပြaနာတစ်ခု
အသက် ၂၆ - ED ကိုကုသပြီ။ ငါ့ဇာတ်လမ်း
အသက် ၂၆ နှစ် - ED ပျောက်သွားခါနီးပြီ၊ ငါဟာပိုပြီးပျော်ရွှင်ပြီးယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ
အသက် ၂၆ နှစ် - ED ပြီးပြီ ဘဝပြောင်းလဲသွားပြီ ရက်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်
(၂၆) နှစ် - ED: ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိနေပြီ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်တယ်။ နောက်တဖန်စွဲအားဖြင့်ထိန်းချုပ်ထား။
(၂၆) နှစ် - ED - လိင်ကိစ္စမှာလိင်အင်္ဂါဖြတ်တောက်ခြင်းကိုဆုံးရှုံးခြင်းမှသည်အော်ဂဇင်တစ်မျိုးတည်းကို ၄ ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်
အသက် ၂၆ - ED: ရက် ၉၀ တွင်တိုးတက်မှုရှိသော်လည်းမပြင်ဆင်ရသေးပါ။
(၂၆) နှစ် - ED - အကျိုးကျေးဇူးများစွာဖြင့်အောင်မြင်စွာပြန်လည် reboot လုပ်သော်လည်း porn သို့ပြန်သွားသည်။
(၂၆) နှစ် - ED - ဒါကကျွန်တော့်ဘဝကိုနည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်
အသက် ၂၆ နှစ် - ED: အောင်ပွဲ ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့်အတူ
၂၆ နှစ် - ED: ရည်းစားအသစ်နှင့်အပျိုစင်ဖြစ်သည်
(၂၆) နှစ် - ED: သာမန်အဆင့်မှမတည်ရှိသေးသောစိုက်ထူမှုများသို့ပြင်းထန်စွာမဆုတ်မနစ်ဖြစ်ခြင်းသို့သွားခဲ့သည်
အသက် ၂၆ - အိမ်တွင်တစ်ယောက်တည်းထိုင်။ မှမိန်းကလေး (ED) နှင့်လိင်ဘဝကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲစေရန်အထိ
၂၆ နှစ် - ဂေး။ အရာရာတိုင်းဟာငါ့အတွက်ပြောင်းလဲသွားပြီ
၂၆ နှစ် - ဂေး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုပိုရှိလာတယ်၊ စိုးရိမ်စရာမရှိတော့တဲ့အထိဖြစ်သွားတယ်၊ အဲဒါကငါဘဝတစ်ခုလုံးပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်
(၂၆) နှစ် - မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိခြင်း၊ ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအသံ၊
အသက် ၂၆ - ကျွန်ုပ်သည်သူ၏အခန်းထဲတွင်ဖန်သားပြင်ကိုကြည့်နေသည့်အချိန်၌ပင်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေသောလူတစ်ယောက်မဟုတ်တော့ပါ
အသက် ၂၆ - ကျွန်ုပ်လိင်နှင့် ၁၀၀ ဆပိုပျော်ရွင်ခြင်း
အသက် ၂၆ - ကျွန်ုပ်သည် ၁၂ နှစ်အရွယ် မှစ၍ ညစ်ညမ်းရုပ်မြင်သံကြားကိုမကြည့်မီကျွန်ုပ်၏ဘဝကိုပြန်လည်ထူထောင်နေသည်ဟုခံစားရသည်
အသက် ၂၆ - ငါမှတ်မိနိုင်သမျှကာလပတ်လုံးစိတ်ကျဝေဒနာခံစားခဲ့ရသည်။ ထို့အပြင်ပြင်းထန်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု။ လွန်ခဲ့သောရက်ပေါင်း ၁၀၀ အတွင်းထူးခြားသောပြောင်းလဲမှုများ
အသက် ၂၆ - YBOP တွင်ဖော်ပြထားသောအကျိုးကျေးဇူးများအားလုံးကိုကျွန်ုပ်သဘောပေါက်ခဲ့သည်
အသက် ၂၆ နှစ် - ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ငြိမ်သက်ခြင်းကိုထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ပြီထင်သည်
အသက် ၂၆ - ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းခဲ့သည် - နေ့တိုင်းသည်ယခင်ကထက်ပိုကောင်းသည်
အသက် ၂၆ - ငါပြောင်းလဲသွားပြီ။ ငါ့ခရီးကအစပဲရှိသေးတယ်
အသက် ၂၆ နှစ် - စွမ်းအင်၊ အာရုံ၊ မှတ်ဉာဏ်နှင့်လိင်စွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေသည်။ ကျွန်မရဲ့လိင်မှုကိစ္စကိုမေးခွန်းထုတ်စရာမရှိတော့ပါ
အသက် ၂၆ နှစ် - စွမ်းအင်တိုးလာခြင်း၊ ယုံကြည်မှုတိုးလာခြင်း၊
၂၆ နှစ် - မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှု၊ ယုံကြည်မှု၊ လှုံ့ဆော်မှု၊
အသက် ၂၆ နှစ် - စိုးရိမ်ပူပန်မှုနည်းပါးခြင်း၊
အသက် ၂၆ - ခရီးဝေးရည်းစား (ED)
အသက် ၂၆ - ရှည်လျားသော reboot၊ စွဲခြင်း + စိုးရိမ်ပူပန်မှုပြ,နာများ၊ ROCD
အသက် ၂၆ နှစ် - စွဲစွဲလန်းလန်းမဟုတ်ပေမယ့်၊
(၂၆) နှစ် - ယခုတွင်ပြဌာန်းခွင့်နှင့်ယုံကြည်မှုရှိခြင်း၊
(၂၆) နှစ် - Porn-ED ED ကိုအောင်မြင်ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပေမယ့်ဆက်ပြီးသွားဖို့လိုသေးတယ်
အသက် ၂၆ နှစ် - PE ပျောက်ကင်းသွားခြင်း၊ အားစိုက်ထုတ်ခြင်း၊ ယုံကြည်မှုရှိခြင်း၊
(၂၆) နှစ် - PIED၊ ယုံကြည်မှု၊ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်မောင်းထုတ်နိုင်
အသက် ၂၆ နှစ် - PIED သည်ထပ်မံချိန်းတွေ့ခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း၊
(၂၆) နှစ် - Porn-induated ED သည်ရောဂါပျောက်ကင်းသွားသည်။ ၎င်းကိုဆက်ထိန်းထားရန်ကျွန်ုပ်သည်စိတ်ကူးယဉ်များသို့မဟုတ်စိတ်ကူးများမလိုအပ်ပါ။
အသက် ၂၆ နှစ် - အပြုသဘောတိုးပွားလာသည်။ ကျွန်ုပ်၏စိတ်ခံစားမှုများနှင့်ထပ်မံဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ပိုမိုယုံကြည်မှုရှိသည်
(၂၆) နှစ် - Reboot သည် ၃ နှစ်ကြာခဲ့သည်။ ED၊ စိုးရိမ်ခြင်း၊ ချွေးခြင်း၊
အသက် ၂၆ - လူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်များပျောက်ကွယ်သွားခြင်း၊ ယုံကြည်မှုပိုမိုမြင့်တက်လာခြင်း၊
(၂၆) နှစ် - ၃ နှစ် (၃) နှစ်အကြာပြန်လည်နာလန်ထူပြီးနောက်၊
အသက် ၂၆ နှစ် - စွမ်းအင်ပိုများလေ၊ စကားလက်ဆုံပြောဆိုခြင်းသည်ပိုမိုလွယ်ကူသည်၊
အသက် (၂၇) နှစ် -“ Viagra မရှိ - ၄ နှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်” (ED)
အသက် ၂၇ - (ED) ပြည့်တန်ဆာမပါဘဲခက်ခဲသောဘဝ ... ?
အသက် (၂၇) နှစ် - (၃) နှစ်အစီရင်ခံစာ
အသက် (၂၇) နှစ် - (ED) ကျွန်ုပ်၏လိင်ဘဝသည်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကောင်းမွန်လာသည်။
အသက် ၂၇ - (ED) ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ကိုးမှတ်
အသက် (၂၇) နှစ်မှ (၁၁၃) ရက်အတွင်းအမျိုးသမီးများအားပိုမိုကြည်ညိုလေးစားပါ
အသက် ၂၇ မှ ၁၃ လအထိရက်ပေါင်း ၉၀ ရောက်ရန်
အသက် ၂၇ ရက်မှ ၁၄၀ ရက်ကြာသည့်သုက်လွှတ်ခြင်း။ နေဆဲ flatline အတွက်ဖြစ်နိုင်သည်
အသက် ၂၇ - ရက် ၁၅၀ - ရဲရင့်ခြင်း၊ တည်ငြိမ်ခြင်း၊ ယဉ်ကျေးခြင်း၊
အသက် ၂၇ - ၃၀ ရက် - WOW၊ ကျွန်ုပ်သည်အခြားသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်
အသက် ၂၇ - ရက်ပေါင်း ၄၀၀၊ ကျွန်ုပ်သည်ကမ္ဘာကြီး / ဘဝကိုမြင်တွေ့ရပုံသည်လွန်စွာပြောင်းလဲခဲ့သည်
အသက် ၂၇ - ၄၄ ရက်။ (နေ့ ၄၆၈ မွမ်းမံခြင်း - ကျွန်ုပ်၏ဇနီးကကျွန်ုပ်လက်များကိုကျွန်ုပ်အားမပိတ်နိုင်ပါ)
အသက် ၂၇ - ၅၁ ရက်နှင့်ဘဝသစ်
အသက် ၂၇ - ၈၀ ရက် - ကျွန်ုပ်ဟာပိုပြီးလူသား၊ ယုံကြည်မှုပိုရှိပြီး၊
အသက် ၂၇ ရက်မှ ၉၀ ရက်ထိ No Fap Report - ကျွန်ုပ်ငိုခဲ့ရသည်၊
အသက် ၂၇ - ၉၀ ရက်အစီရင်ခံစာ - ၎င်းသည်လုံးဝတန်ပြန်ထိုက်သည်
အသက် ၂၇ - ရက် ၉၀ ။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတိုးတက်မှု၊ လိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးအပေါ်ထင်ဟပ်မှု။ ပျော့ပျောင်းသော ED ကုသပေးခဲ့သည်။
အသက် ၂၇ - ပိုမိုကောင်းမွန်သောအာရုံစူးစိုက်မှု။ ဒေါသနည်းတယ် ငါ့ဘဝမှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်၊ ငါအနာဂတ်အောင်မြင်မှုကိုကြဲတယ်။ အခြားသူများ၏အောင်မြင်မှုကိုစိတ် ၀ င်စားသည်။
အသက် ၂၇ - အိပ်ချိန်ပိုကောင်းတယ်။ စွမ်းအင်နှင့်ယုံကြည်မှု။ အမျက်ဒေါသနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုလျော့နည်းသွားလျှင်အမျိုးသမီးများကိုတန်ဖိုးထားပါ
အသက် ၂၇ - လက်တွေ့စိတ်ဓာတ်ကျ - ငါနိုးလာပြီးစိတ်ဓာတ်မကျဘူး၊ ပန်းတိုင်တွေ၊ မျှော်လင့်ချက်တွေထပ်နေတယ်။
အသက် ၂၇ - ရက်ပေါင်း ၁၂၀ အတွင်း ED ဆေးကုသမှုခံယူသော်လည်း၊ ငါမူကား၊
အသက် (၂၇) နှစ် - ကျွန်ုပ်၏ Porn-ED ဆေးကုသမှုကိုကုသပေးခဲ့သည်။ ယခုကျွန်ုပ်သည်စတုရန်း ၁ သို့ပြန်ရောက်သွားသည်
(၂၇) နှစ် - OCD သည်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာဖြစ်သော်လည်းပျောက်ကင်းအောင်ကုသပြီး PJED နှင့်နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှု
အသက် (၂၇) နှစ် - သုတ်ရည်လွှတ်မှုသည်နှောင့်နှေးနေပြီးယုံကြည်မှုလွန်စွာမြင့်တက်ခဲ့သည်
အသက် ၂၇ - ED & နှောင့်နှေးနေသောသုတ်ရည်လွှတ်မှုပျောက်ဆေး - ဤအောင်မြင်မှုပုံပြင်များကိုဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
အသက် (၂၇) နှစ် - (၈) လအကြာတွင် ED ရောဂါပျောက်ကင်းသွားသည် (၆ နှစ်ပြင်းထန်သော ED)
အသက် ၂၇ - ED သည် ၁၁၅ ရက်ကုသခဲ့သော်လည်းငါ Levitra နှင့်စတင်ခဲ့သည်
အသက် ၂၇ - ED ကုသသည်။ အဲဒါကညစ်ညမ်းတယ်ဆိုတာသိဖို့ ၁၀ နှစ်ကြာခဲ့တယ်။
အသက် ၂၇ - ED ကုသခံခဲ့ရခြင်း - ကျွန်ုပ်ဘဝ၏အပြင်းထန်ဆုံးအော်ဂဇင်ခံစားခဲ့ရသည်။
အသက် ၂၇ - ED ကုသခြင်း။ ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးများကိုလေးစားစွာကြည့်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပျော်ရွှင်ပြီးတဖန်တကယ့်ယောက်ျားကဲ့သို့ခံစားမိသည်။
အသက် ၂၇ - ED ကုသပေးသည်။ ကျွန်ုပ်ကျောင်းသို့ပြန်လာပြီးကောင်မလေးတစ်ယောက်ရှိသည်
အသက် ၂၇ နှစ် - ED ကုသမှုခံယူခြင်းဖြင့်ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းပြီးစွမ်းအင်ပိုမိုရရှိသည်
အသက် ၂၇ - ED ပျောက်ကင်းသွားသည်။ ၁၀၇ ရက် - သူငယ်တော်သည်အသက်ရှင်သေး၏
အသက် ၂၇ - ED ပျောက်ကင်းသွားသည်။ ပြန် Libido ။ တိုးတက်အောင်ဆက်လုပ်ပါ
အသက် ၂၇ နှစ် - ED ပျောက်ကင်းသွားပြီ သေခြင်းချုပ်ခြင်းသည်ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ played မှပါဝင်ခဲ့သည်။
အသက် (၂၇) နှစ် - ED - လိင်မှုကိစ္စမရှိလျှင် (၁၀) နှစ် - ယခုတွင် (၇) လကြာနေ့စဉ်လိင်နှင့်ပြissuesနာမရှိဘဲ၊
အသက် ၂၇ - ED: ရက်ပေါင်း ၁၈၀ - တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ချိတ်ဆက်သည်
အသက် (၂၇) နှစ် - ED: ရက်ပေါင်း ၂၃၀ အရက်မသောက်ရ။ Edging ငါ့တိုးတက်မှုတားစီး
အသက် ၂၇ - ED ။ ၈ လခရီး
အသက် ၂၇ - အေဒီ - မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရောဂါပျောက်ကင်းသွားသော်လည်းလိင်မှတစ်ဆင့်လိင်မှုကိစ္စများစွာကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရသည်
အသက် ၂၇ နှစ် - ။ ဒါဟာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ Awesome!
(၂၇) နှစ် - ED: ကျွန်တော့်ဘဝကိုရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်းပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးခဲ့သည်။
(၂၇) နှစ် - ED: ကိုယ်ခန္ဓာအရ ၁၀၀% ရှိသည်။ စူပါ duper ခက်ခဲနံနက်စိုက်ထူပင်အလိုအလျောက်စိုက်ထူ
အသက် ၂၇ နှစ် - ED: ကျွန်ုပ်ဘဝ၏အကောင်းဆုံး၊ အားစိုက်ထုတ်။ မရသောလိင်၊ ထိုမိန်းမသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်အံ့သြ။ ပျော်ရွှင်ခဲ့သည်
အသက် ၂၇ - PMO ကိုငါ့ဘ ၀ ထဲကနေစပြီးကတည်းကအကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးတွေ့ခဲ့ရတယ်
(၂၇) နှစ် - Fetishes & Anorgasmia - မနေ့ညကပထမဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံစဉ်က Orgasmed
အသက် (၂၇) နှစ် - ကလေးဘဝမှရည်မှန်းချက်ရှိသောလူတစ်ယောက်အထိဖြစ်သည်။
အသက် ၂၇ - လိင်တူချစ်သူအမျိုးသား - လိင်မှတစ်ဆင့်ညစ်ညမ်းသောရောဂါများကိုကုသပေးသည်
အသက် ၂၇ - ကျွန်ုပ်ရက်ပေါင်း ၉၀ မှပေါ်လွင်ချက်များပြန်လည်စတင်သည်။ PMO မရှိပါ
(၂၇) နှစ် - HOCD & ပြင်းထန်သောစွဲလမ်းမှု - ကျွန်ုပ်ဘဝသည်ပြောင်းလဲသွားပြီ
အသက် ၂၇ - ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်လူမှုရေးဘဝတွင်အပြုသဘောဆောင်သောပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်နေသည်။ ငါကပိုပြီးအာရုံစူးစိုက် & ယုံကြည်မှု, တောက်ပသောမျက်နှာ။ နံနက်သစ်သားနောက်ကျော။
အသက် (၂၇) နှစ် - ကျွန်ုပ်သည် NoFap မတိုင်မီကျွန်ုပ်ရှိခဲ့ဖူးသူကိုအသိအမှတ်မပြုပါ
အသက် ၂၇ - ငါဟာတန်ဖိုးမရှိသူလို့မခံစားရဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမုန်းတီးခဲ့သည် ရှုံးနိမ့်သူလို့ခံစားရတော့မှာမဟုတ်ဘူး။
အသက် (၂၇) နှစ် - ကျွန်ုပ်၏ခံစားချက်များနှင့်ခံစားမှုများကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပြီး၊ လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုများကိုနည်းနည်းလျော့နည်းစေသည်
အသက် ၂၇ - ကျွန်ုပ်သည်အပျိုစင်ဘ ၀ ဖြစ်သည်။ ရက်ပေါင်း ၁၆၉ ရက်ကြာပြီးနောက်တွင်နောက်ဆုံး၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
အသက် ၂၇ - ယုံကြည်မှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ လူမှုရေးအရတိုးတက်လာခြင်း၊ အပျိုစင်မဟုတ်တော့ပါ
အသက် ၂၇ နှစ် - စွမ်းအင်ပိုမိုများပြားစွာ၊ အထွက်များ၊ ရင်းနှီးဖော်ရွေမှုပိုကောင်းသောအာရုံစူးစိုက်မှု
အသက် ၂၇ - အိမ်ထောင်သည်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှု။ များစွာသောအကျိုးကျေးဇူးများရှိသော်လည်းဘာသာတရားသည်ထိမိလဲစေသောအရာဖြစ်သည်
အသက် ၂၇ - ကျွန်ုပ်သည် porn ကိုကြည့်ပြီးနောက် ၃ နှစ်ကျော် - ဘဝပြောင်းလဲခဲ့သည်
အသက် ၂၇ - ကျွန်ုပ်၏နံနက်သစ်တောများသည်မကြာခဏဖြစ်လေ့ရှိပြီး GF နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်
(၂၇) နှစ် - ED သို့မဟုတ်နောက်ကျသောသုတ်ရည်လွှတ်မှုမရှိတော့ - ၁၃၁ ရက်
(၂၇) နှစ်၊ နံနက်သစ်သားသည်အပြည့်အ ၀ သက်ရောက်သည်
အသက် ၂၇ နှစ် - အခုငါအသက်ရှင်ပြီ။ နောက်တဖန်အရောင်များကိုကျွန်ုပ်မြင်နိုင်ပြီး၊
အသက် ၂၇ - PIED တော်တော်များများပျောက်ကုန်ပြီ။ ငါထင်သလောက်ယူခဲ့ပါဘူး!
၂၇ နှစ် - PIED - လတ်တလောမှတ်ဉာဏ်တွင်ပထမဆုံးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့မှု ၁၀၀% စိုက်ထူခြင်း!
အသက် ၂၇ နှစ် - PIED ။ ငါမျှော်လင့်ထားတာထက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြန်လည်နာလန်ထူလာခဲ့တယ်။ ဤတွင်ပိုကောင်းတဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးများအတွက်ပေါင်းစပ်ဖြစ်ကြသည်
အသက် ၂၇ နှစ် - NoFap ၏ကောင်းကျိုး၊ PMO ၏အားသာချက်များ
အသက် (၂၇) နှစ် - နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းပြင်းထန်သော ED ရောဂါပျောက်ကင်းသွားသည် - ဘယ်တော့မှမပေးနိုင်ပါ!
အသက် ၂၇ - ပြင်းထန်သော ED၊ လူအုပ်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ သူစိမ်းများနှင့်စကားထစ်ခြင်း - အရာရာတိုင်းပြောင်းလဲသွားပြီ။
အသက် (၂၇) နှစ် - ခံစားမှုအသစ်တစ်ခုကိုစတင်ခံစားခဲ့ရသည်
အသက် (၂၇) နှစ် - အမျိုးသမီးများအားတားဆီးခြင်း ငါအများကြီးပိုနိုင်စွမ်းဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်လာတယ်
အသက် ၂၇ - နောက်ဆုံးကောက်ရိုးသည် Maui တွင်ပင်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် porn ကိုတွေ့သည့်အချိန်ဖြစ်သည်။
အသက် ၂၇ - အပျိုစင်၊ ရက်ပေါင်း 27 NoFap ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ငါ့ရလဒ်။
အသက် ၂၇ - အားနည်းသည့်စိုက်ထူမှုများ၊ အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်ခြင်း၊
အသက် ၂၈ နှစ် - ကျွန်ုပ်သည်အကောင်းမြင်ခြင်း၊ စင်ကြယ်ခြင်း၊ ရှင်းလင်းခြင်း၊ ခေါင်းမာခြင်း၊ ကျန်းမာခြင်းနှင့်ရည်မှန်းချက်ကြီးခြင်းခံစားရသည်။
အသက် ၂၈ နှစ် - စွမ်းအင်၊ အာရုံ၊ နိုးကြားမှု၊
အသက် (၂၈) နှစ် - ပစ္စုပ္ပန်၊ သတိနှင့်ဖန်တီးမှု။ ချွန်ထက်သောအာရုံနှင့်မှတ်ဉာဏ်။ စိတ်ကျရောဂါ / စိုးရိမ်စိတ်မရှိခြင်း။ ပိုမိုလှုံ့ဆော်မှု & စွမ်းအင်။ ပို။ ငါ့ gf ချစ်ကြတယ်
အသက် ၂၈ နှစ် - (ED & DE) ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အိမ်ထောင်ကိုကယ်တင်ခဲ့သည်
အသက် (၂၈) နှစ် - (ED) ချိန်းတွေ့သောဆိုဒ်များသည်ပြန်လည်အသက်ဝင်လာသည်
အသက် (၂၈) နှစ် - (ED) ကျွန်ုပ်သည် GF အနံ့မှနှိုးဆော်ခြင်းခံရပြီးယခုကြည့်ရှုနေပါသည်
အသက် ၂၈ - (ED) ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၉ နှစ်မှစ၍ ဤခံစားမှုမျိုးမရှိခဲ့ပါ။
အသက် ၂၈ နှစ် - လိင်တူဆက်ဆံခြင်းသည်လုံးဝခြားနားသည်။
အသက် ၂၈ နှစ် - (စိတ်ရောဂါအထူးကု) Porn-induated ED သည်ဆေးကုသမှုခံယူပြီးကုသမှုခံယူခဲ့သည်
အသက် ၂၈ - ၁ နှစ် - လိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာခဲ့သည်
အသက် ၂၈ - ၁၂၀ ရက် - သွားရန်ကောင်းသော (ED Flatline)
အသက် ၂၈ - ၁၅ လကြာအစီရင်ခံစာ၊ (ED) 'အံ့သြဖွယ်ရာစိုက်ထူမှုများ'
အသက် ၂၈ - ရက်ပေါင်း ၂၄၀ - ကျွန်ုပ်သည်လွန်ခဲ့သော (၃) လတာကာလမှလွန်ခဲ့သော (၇) နှစ်ကထက်ပိုမိုကြီးထွားလာသည်
အသက် ၂၈ - ရက်ပေါင်း ၂၅၀: ED & ဦး နှောက်မှေးမှိန်သွားခြင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်ကလေးငယ်တစ် ဦး ကဲ့သို့ခံစားမိပြီးခံစားချက်များကိုထပ်မံခံစားရသည်
အသက် ၂၈ - ရက် ၅၀! အစဉ်အဆက်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အမြိုးသမီးမြားယနေ့ညချဉ်းကပ်။ နောက်တဖန်မလူကူး
အသက် ၂၈ - ၇၀ ရက် - ကျွန်ုပ်သည်အပြုသဘောဆောင်သောပြောင်းလဲမှုများစွာကိုသတိပြုမိခဲ့သည်
အသက် ၂၈ ရက် - ၇၀၀ ရက်၊ စွမ်းအင်, ယုံကြည်မှု, မယုံနိုင်စရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သား
အသက် ၂၈ မှ ၉ လအထိ - ရန်လိုမုန်းတီးမှုမှသည်ဝိညာဉ်ရေးတည်ငြိမ်မှုအထိဖြစ်သည်
အသက် ၂၈ ရက်မှ ၉၀ ရက်အတွင်းလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု၊
အသက် (၂၈) ရက် - ရက်ပေါင်း (၉၀) အရေးကြီးသောအကျိုးကျေးဇူးများ၊ ထူးကဲသောအကျိုးကျေးဇူးများ
အသက် ၂၈ - ၉၈ ရက်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်သည်လူသစ်တစ် ဦး နှင့်တူသည်။
အသက် ၂၈ - ၉၈ ရက်အကြာ - ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အတွင်း၌သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အသက် ၂၈ နှစ် - ရည်းစားတစ် ဦး ၏အမြင် - ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ NoFap !!!
အသက် (၂၈) နှစ် - နာတာရှည် ED သည်ညစ်ညမ်းသောရောဂါဖြင့်ကုသခြင်းခံရပြီးနောက်အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည်
အသက် ၂၈ ရက် - ၁၆၇ ​​ရက်၊
အသက် (၂၈) နှစ် - DE ပျောက်ကင်းသွားခြင်း၊
အသက် ၂၈ - ED ရောဂါပျောက်ကင်းသွားပြီ၊
အသက် ၂၈ နှစ်မှ ၅ နှစ်အထိ - ED သည်ဆေးလုံးပြတ်ကိုမသုံးဘဲလိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်
အသက် ၂၈ - ED၊ ရက် ၉၀ ကြာအစီရင်ခံစာ
အသက် ၂၈ နှစ် - ED သည်စွမ်းဆောင်ရည်ဖိအားကိုရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့သည်
အသက် ၂၈ - အေဒီ - ကျွန်ုပ်သည်ကွန်ဒုံးကိုတောင်သုံးရလွယ်ကူသည်။ ၅ နှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။
အသက် ၂၈ နှစ် - ရက် ၃၀ ရက်။ သန့်ရှင်းသောငရဲသည်အလုပ်လုပ်သည်။
အသက် ၂၈ နှစ် - ED ။
အသက် ၂၈ - ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု၊ လူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်၊
အသက် ၂၈ နှစ် - တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်မှု၊ ငါ့လက်သည်းဝါးခြင်းရပ်တန့်သွားသည်
အသက် (၂၈) နှစ် - သုတ်ရည်လွှတ်မှုသည်ပြင်းထန်သောဖြစ်ရပ်ရှိခဲ့ပြီး sensitivity နည်းသည်
အသက် (၂၈) နှစ် - HOCD သည်အလွန်ကောင်းသောဆက်ဆံရေးတွင်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ခြင်းမရှိတော့ပါ
အသက် ၂၈ - ကျွန်ုပ်၏အပြာစွဲစွဲလမ်းမှုကိုမည်သို့ရိုက်နှက်နိုင်မည်နည်း၊ သင်ထင်သည့်အရာကသင့်အားထပ်တူဖြစ်စေရန်ကူညီလိမ့်မည်
အသက် ၂၈ - ကျွန်ုပ်ဘဝကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်
အသက် ၂၈ - ကျွန်ုပ် NoFap ကိုလွန်ခဲ့သော ၃ နှစ်ကစတင်ခဲ့သည်။ ဒီနေ့ငါ ၉၀ ရောက်ပြီဆိုတာကိုပျော်ရွှင်စွာကြေငြာနိုင်ပါပြီ
အသက် ၂၈ နှစ် - ကျွန်ုပ်သည်နက်ရှိုင်း။ မှောင်မိုက်သောတွင်းထဲတွင်အလင်း / မျှော်လင့်ချက်လုံးဝမရှိခဲ့ပါ၊ သို့သော်ယခုဤနေရာတွင်ငရဲကဲ့သို့နေသာနေသည်
အသက် (၂၈) နှစ် - ကျွန်ုပ်သည် ပို၍ လူပေါင်းကောင်းသောလူဖြစ်လာသည်။ သာ။ ကြီးမြတ်အေးဆေးတည်ငြိမ်ခြင်းနှင့်လျော့နည်းလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု။ ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအသံ။
အသက် ၂၈ - တိုးတက်ကောင်းမွန်သောအိပ်စက်ခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းအတွေးများပျောက်ကွယ်သွားခြင်း၊ လှုံ့ဆော်မှုပိုများခြင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်မိမိကိုယ်မိမိဟောင်းနှင့်ပိုမိုခံစားမိသည်
အသက် (၂၈) နှစ် - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအထိခိုက်မခံခြင်း၊ ယုံကြည်စိတ်ချမှုတိုးပွားလာခြင်း၊ ကျွန်ုပ်၏ခံစားချက်များကိုခံစားရသည်
အသက် ၂၈ နှစ် - လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှု - ရက် ၃၆၅ ရက်၊ ဘုန်းတော်ကြီး ၅ ရက်၊ စုစုပေါင်း ၅၉၀ ရက်။
အသက် ၂၈ နှစ် - လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း - ကျွန်ုပ်၏ဇနီးသည်ကိုအော်ဂဇင်ပြုရန်အတွက် porn ကိုစဉ်းစားခဲ့ရသည်
အသက် ၂၈ နှစ် - လက်ထပ်ထားခြင်း
အသက် (၂၈) နှစ်မှ (၃၅) ရက်အတွင်းနူးညံ့သော PIED ကုထုံးကိုကုသနိုင်သည်။ စိုက်ထူအလွန်အားကောင်းတဲ့ဖြစ်ကြသည်။
အသက် ၂၈ နှစ် - လိင်မှုကိစ္စမှသည်ဇနီးနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုလျော့နည်းခြင်း၊
အသက် (၂၈) နှစ် - ကျွန်ုပ်ဘဝသည်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာသည်။ လွန်ခဲ့သော ၁၅ နှစ်အတွင်းကျွန်ုပ်ပြုခဲ့သမျှအကောင်းဆုံးအရာများ
အသက် ၂၈ - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲလမ်းခြင်းမဟုတ်သော်လည်းအချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်ခြင်းပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်ပုံရသည်
အသက် ၂၈ - တစ်ကြိမ်တွင်တစ်ရက်
အသက် ၂၈ - PIED ကုသမှု - ကန ဦး ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလအပြီးမိတ်ဖက်တစ်ယောက်ရရှိရန်အရေးကြီးသည်။
အသက် (၂၈) နှစ် - ကျွန်ုပ်၏ရှီအားရှူရှိုက်ခြင်း၊ အလုပ်အတွက်နောက်ကျခြင်း၊ ဦး နှောက်မှေးမှိန်ခြင်း၊
အသက် ၂၈ နှစ် - အောင်မြင်သော reboot: ပြင်းထန်တဲ့ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုများ
အသက် ၂၈ နှစ် - ဗာဂျီးနီးယား၊
အသက် (၂၈) နှစ် - သင်သည်သင်၏ရဲစွမ်းသတ္တိကိုပြန်လည်ရရှိမည် ငါအရမ်းဆင်းရဲသောကောင်လေးဖြစ်ခဲ့သည်။ အခုတော့ငါမဟုတ်ဘူး
အသက် ၂၉ - ED ပျောက်ကင်းသွားသည်
အသက် ၂၉ -“ ငါထတယ်လိုငါခံစားရတယ်”
အသက် ၂၉ - ED (၂၃၆) ရက်၊
အသက် ၂၉ - (ED) ကျွန်ုပ်သည်၎င်းအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောလူတစ် ဦး ဖြစ်သည်
အသက် ၂၉ - (ED) အေးခဲသည့်အမှန်တရား - ၂ နှစ်ပြန်လည်စတင်၊ ၁.၅ နှစ် - ညစ်ညမ်းမှုမရှိ
အသက် ၂၉ - ၁၇၀ ရက် - ED သည်လုံးဝပျောက်ကင်းသွားသည်မဟုတ်သော်လည်းယုံကြည်မှုမြင့်တက်လာခဲ့သည်
အသက် ၂၉ - ၃၇ ရက်သည်ရက်ပေါင်း ၉၀ သို့ရောက်ရန်ကြိုးစားသည်။ နောက်ဆုံးတွင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ကျဆင်းလာခြင်းနှင့်ငါ၏အပျိုစင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်
အသက် ၂၉ - ရက်ပေါင်း ၆၀: ED သည်ကုသမှုခံယူရသည်၊ လိင်သည်အလွန်ကောင်းသည် (ကျွန်ုပ်လက်ထပ်သည်)
(၂၉) နှစ် - r / Nofap ကိုပြန်လည်အကဲဖြတ်ခြင်း၊ တကယ့်ဘဝနှင့်ရင်ဆိုင်ရခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအတွေးများ (လူမှုရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှု)
အသက် ၂၉ - အလွန်အမင်း / လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းစေသောလိင်အကျင့်စွဲခြင်း
အသက် ၂၉ - ဦး နှောက်မြူမှုန်ဝါးသွားသည်။ စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်စိတ်အကြီးအကျယ်လျော့နည်းသွားသည်။ ပိုမိုယုံကြည်မှုရှိသော၊ အမျိုးသမီးများအားကန့်ကွက်ခြင်းမရှိတော့ပါ။
အသက် ၂၉ - ၅ နှစ် PIED ပြီးနောက်ကုသခြင်း
အသက် ၂၉ - ၄၄ ရက်၊
အသက် ၂၉ ရက် - ၆၀ ရက်။ ED၊ လူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်၊
အသက် - ၂၉ ရက် ၈၉ နှစ်ပြား၊
အသက် ၂၉ နှစ် - သံသယနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျမှု၊
အသက် ၂၉ - ED သည်တစ်လအကြာတွင်ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်
အသက် ၂၉ နှစ် - ED နှင့် femdom fetish ။ 29 ရက်အောင်မြင်ပြီ!
အသက် ၂၉ - ED သည်တစ်နေ့တာမှေးမှိန်သွားပြီ။ ငါ၌ကောင်မလေးရှိသည်
အသက် ၂၉ - ED သည်ပြaနာမဟုတ်တော့ပါ။ ငါ porn မလိုအပ်ဘဲပင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနိုင်သည်။
အသက် ၂၉ - ED၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊ ADHD - အားလုံးပျောက်ကွယ်သွားပြီးကျွန်ုပ်၏ဆေးဝါးများပျောက်ကင်းသည်
အသက် ၂၉ နှစ် - ED ။ တိုးတက်ရန်နေရာများရှိသေးသော်လည်းကျွန်ုပ်အောင်မြင်ခဲ့သည်
အသက် ၂၉ - Flatline, ED
အသက် ၂၉ - ၁၀ နှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးသည်။
အသက် ၂၉ - လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ယနေ့ကျွန်ုပ်ခံစားနေရသည်ကိုကျွန်ုပ်မယုံနိုင်ပါ။
အသက် ၂၉ နှစ် - ယုံကြည်စိတ်ချမှု၊ လှုံ့ဆော်မှု၊ စွမ်းအင်နှင့်ရဲရင့်မှုတိုးလာသည်
အသက် ၂၉ - လိင်စိတ်ပိုမိုတိုးလာခြင်း၊ ယုံကြည်မှုပိုမိုမြင့်မားလာခြင်း၊
အသက် ၂၉ - ခြုံငုံပျော်ရွှင်မှုတိုးပွားလာသည်
အသက် ၂၉ - ကျွန်ုပ် ဦး နှောက်သည်ပိုမိုရိုးရှင်း။ ပိုမိုပျော်ရွှင်သောဘဝသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည်
(၂၉) နှစ် - ကျွန်တော့်အခွံထဲကသိပ်အားစိုက်ထုတ်စရာမလိုပဲ
အသက် ၂၉ - Porn သွေးဆောင် ED: ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းပထမဆုံးအောင်မြင်သောလိင်ဆက်ဆံမှု!
အသက် ၂၉ - ပြင်းထန်သော ED & အိမ်ထောင်သည် ၉၁ ရက်
အသက် ၂၉ - ဒီစိန်ခေါ်မှုကိုစကတည်းကအပြောင်းအလဲတွေအများကြီးရှိတယ်
အသက် ၂၉ - အောင်မြင်သောလိင် (ED)
(၂၉) နှစ် - The Closet ရှိနဂါး
အသက် ၃၀ - (ED) အချို့လူများကကျွန်ုပ်သည်လုံးဝကွဲပြားသောလူတစ်ယောက်နှင့်တူသည်ဟုဆိုကြသည်။
အသက် ၃၀ - (အိမ်ထောင်သည်) ၁ နှစ် - NoFap ကသင်၏ဘဝနှင့်သင်ဆက်ဆံပုံကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်
အသက် ၃၀ မှ ၁၁၀ ရက်အတွင်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်လူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့သည်
အသက် ၃၀ - ၁၂၇ ရက်။ (ပျော့သော ED) ။ အရွယ်နှင့်တင်းကျပ်မှုတိုးများလာသည်ကိုကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်ဇနီးသည်တို့သတိပြုမိသည်။
အသက် ၃၀ - ၁၅၀ ရက် - နောက်ဆုံးရက် ၃၀ သည်များစွာကွဲပြားခြားနားခဲ့သည်
အသက် ၃၀ - ၁၈၀ ရက် - ကျွန်ုပ်၌ယခင်ကထက်ဘဝပိုမိုရှင်သန်လာသည်
အသက် ၃၀ - ရက် ၂၀၀ ခန့်။ ယခုကျွန်ုပ်သည်မငြင်းနိုင်သောလိင်ဆိုင်ရာမောင်းနှင်မှုတစ်ခုပြုလုပ်နေသည်
အသက် ၃၀ မှ ၃၀ နှစ်အပြည့်ရှိသောအပျိုစင်ဖြစ်ပြီးရက်ပေါင်း ၂၇၀ အတွင်းလိင်ဆက်ဆံရန်။
အသက် ၃၀ - ၄၁ ရက် - လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုလျော့နည်းခြင်း၊ ချိန်းတွေ့ခြင်းသည်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
အသက် ၃၀ မှ ၅ နှစ်အကြားရှိ porn-induced ED ကိုကုသရန်ကြိုးစားသည်။ နောက်ဆုံး၌၎င်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အသက် ၃၀ - ရက် ၉၀ - Mojo နှင့်ဟာသပြန်လာပြီ
အသက် ၃၀ - ရက်ပေါင်း ၉၀ ကကျွန်တော့်ကိုယုံကြည်မှုနဲ့ခွန်အားပေးပြီးဘဝအတွက်ရေငတ်ခဲ့တယ်
အသက် ၃၀ - ရက်ပေါင်း ၉၀ ကြီးထွားမှု၊
အသက် ၃၀ - ၉၂ ရက် - စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ဘူး၊ စိတ်ရှုပ်စရာမရှိတော့ဘူး၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု၊
အသက် ၃၀ - ၉၇ ရက်သည်ဤအနှစ် ၃၀ သက်တမ်းရှိသောအပျိုစင်ဘဝကိုမရရှိနိုင်ပါ
(၃၀) နှစ် - စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျမှုများပျောက်ကွယ်သွားပြီး၊
အသက် ၃၀ - လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီးကျွန်မရဲ့Femတ္တပ္ပစိတ်ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်
အသက် ၃၀ ရက် - ၁၃၁ ရက်၊
အသက် ၃၀ - ED နှင့်ရည်းစား: ၅၂ ရက်မှာကျွန်မတို့ပန်းတိုင်တွေရောက်ခဲ့တယ်
အသက် ၃၀ - ED ပျောက်ကင်းသွားသည်
အသက် ၃၀ - ED သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအမျိုးသမီးများကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိစေပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သောလိင်ဘဝကိုကုသပေးခဲ့သည်
အသက် ၃၀ - ED ပျောက်ကင်းသွားသည်။ ပုံမှန်လူတစ် ဦး နှင့်ထပ်တူထပ်မျှခံစားရပြီးစစ်မှန်သောဆက်ဆံရေးရှိနိုင်သည်။
အသက် ၃၀ - ED သွားပြီ; ငါတဖန်ခံစားရသည်နှင့်ယောက်ျားကဲ့သို့ပြုမူ။
အသက် ၃၀ - ED သင်လိင်၊ ကာယနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမှု၏အရေးကြီးမှုကိုသင်သဘောပေါက်သည်
အသက် ၃၀ - ED၊ ရက် ၁၃၀ ရက်အစီရင်ခံစာ
အသက် ၃၀ - ED၊ DE, HOCD: တစ်နှစ်အစီရင်ခံစာ။ (အသစ်ပြင်ဆင်ချက်တစ်ခုထပ်မံ - ဤ ၁ နှစ်အစီရင်ခံစာပြီးနောက် ၄ နှစ်!)
အသက် ၃၀ - ED၊ နောက်ကျသည့်သုက်လွှတ်ခြင်း၊ ၈ ပတ်
အသက် ၃၀ - အက်ဒ်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဆယ်ကျော်သက်တစ် ဦး ကဲ့သို့ပြန်ခံစားရသည်
အသက် ၃၀ - ED၊ ၅၃ ရက်အကြာတွင်အောင်မြင်သောလိင်ဆက်ဆံမှု
အသက် ၃၀ - ED - ကုသသည်။ ထို့နောက်ပြန်။ ယခုတစ်ဖန်ပြန်လည်ပျောက်ကင်းသွားသည်
အသက် ၃၀ - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရတင်းမာမှုများ - ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုရိုက်နှက်ရန်ကျွန်ုပ်၏အကြံပေးချက်များ
အသက် ၃၀ - ပိုမိုယုံကြည်မှုရှိပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိသည်ဟုခံစားရသည်
အသက် ၃၀ - ပထမရက် ၉၀
အသက် ၃၀ - NoFap မှ PIED ခံစားခဲ့ရသူတစ် ဦး မှ gf မှ!
အသက် ၃၀ - ကျွန်ုပ်သည်အပြည့်အဝပြန်ဖွင့်ပြီးကျွန်ုပ်၏ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုရိုက်နှက်သည်ဟုခံစားမိသည်
အသက် ၃၀ - ကြာရှည် ED၊ ၂ ပတ်သာကြာမှရလဒ်
အသက် ၃၀ - အိမ်ထောင်သည်။ သူမကသူမကပျော်ရွှင်တယ်လို့ပြောတယ်၊ အဲဒါကငါတို့အပေါ်ဘယ်လောက်အကျိုးသက်ရောက်တယ်ဆိုတာကိုသူဘယ်တော့မှမသိဘူးဆိုတာပါ။
အသက် (၃၀) - ပို၍ တက်ကြွသော၊ ပိုကောင်းသောကိုယ်ဟန်အနေအထား၊ ပိုမိုယုံကြည်မှုရှိရန်၊ နိုးထရန်လွယ်ကူသည်။
အသက် ၃၀ - စွမ်းအင်များများစားစား၊ စစ်မှန်တဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဆန္ဒပြင်းပြမှု၊
အသက် ၃၀ - အာရုံစူးစိုက်မှုပိုမိုများပြားပါ၊ ဘဝတွင်လှုံ့ဆော်မှုခံရသည်၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်းမရှိတော့သည့်အပြင်မိန်းကလေးများကိုလွယ်ကူစွာဆွဲဆောင်နိုင်သည်
အသက် ၃၀ - ကျွန်ုပ်၏ Porn-Inced Erectile Dysfunction ကိုကျော်လွှားနိုင်သည့်ကျွန်ုပ်၏ပုံပြင်
အသက် ၃၀ - စိတ်မကောင်းစရာ၊ အိပ်မက်အလုပ်အတွက်အင်တာဗျူးလုပ်ခြင်း၊ အခြားသူများနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း
အသက် ၃၀ - ထိတ်လန့်ခြင်း၊ စိုးရိမ်ခြင်းနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း - ငါဟာအများကြီးပိုကောင်းတယ်
အသက် ၃၀ - PIED
အသက် ၃၀ - Porn သွေးဆောင် ED သည်လျင်မြန်စွာကုသနိုင်သည်
အသက် ၃၀ - ခြောက်လလွတ်လပ်ခွင့်။ ကျွန်ုပ်၏အကြံပြုချက်များ
အသက် ၃၀ ကျော် - စွမ်းအင်၊ စိတ်ဓါတ်၊ ယုံကြည်မှု၊
အသက် (၃၀) နှစ် - ဘဝသည် ပို၍ ကောင်းမွန်သည်
အသက် ၃၀ - (ED & နှောင့်နှေးသည့်သုတ်ရည်လွှတ်မှု) - ကျွန်ုပ်တွေ့ကြုံခဲ့ရသောအရာအချို့သည်ညစ်ညမ်းသောဆက်စပ်မှုများဖြစ်သည်ကိုမသိရှိခဲ့ပါ
အသက် (၃၀) နှစ် - ED၊ ဒုတိယ၊
အသက် ၃၀ - ED ၁၀ နှစ်။ ၅၁ ရက်အကြာတွင်ကုသခဲ့သည်။
အသက် ၃၀ - Accutane နှင့်ဇနီးကိစ္စများ (ED)
အသက် ၃၀ - ED & DE သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောလူမှုရေး၊
အသက် (၃၀) နှစ် - ED - သင်ဆေးလိပ်ဖြတ်လိုက်လျှင်ပုဂိ်္ဂုလ်နှင့်စိတ်ချရမှုဟူသောခံစားချက်ကိုပြန်လည်ရရှိသည်
အသက် ၃၀ - အလွန်အမင်းညစ်ညမ်းသော၊ လူမှုရေးဆန့်ကျင်မှု - အရာရာပြောင်းလဲသွားသည်
အသက် ၃၀ - လိင်တူချစ်သူ (ED)
အသက် ၃၀ - ယုံကြည်မှုနှင့်အာရုံစိုက်မှုပိုခံရခြင်း၊ စိုးရိမ်စိတ်လျော့နည်းခြင်း၊
အသက် ၃၀ နှစ် - ၁.၅ နှစ်ကျော်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများမရှိ - ကျွန်ုပ်သည် MO ရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်၏စိတ်ကူးကိုအသုံးပြုသည်
အသက် ၃၀ - စူပါစပ်စုခြင်းနှင့်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခြင်းစသည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကျွန်ုပ်မတွေ့ရှိမီကပြန်လည်ထားခဲ့သည်
အသက် ၃၁ ရက် - ၁၀၀ ရက် - လူမှုရေး၊
အသက် ၃၁ - ရက်ပေါင်း ၂၈၀ ရက် (ED) - လိင်နှေးကွေးမှုသည်ယခုအခါသဘာဝကျလာသည်
အသက် ၃၁ - ရက်ပေါင်း ၆၀ - အိပ်ခန်းထဲတွင်ဗိုက်ကင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာသည်။
အသက် ၃၁ - ရက် ၉၀ - PMO ကိုကျွန်ုပ်စွဲစွဲလမ်းနေခဲ့ပါပြီ
အသက် ၃၁ - ၅ လကြာပြီးနောက် ED ပျောက်ကင်းသွားသည်
(၃၁) နှစ် - ကျွန်ုပ်၏လိင်ဘဝအတွက်ကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သမျှအကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်
(၃၁) နှစ် - ငါ့ဘ ၀ ရဲ့အကောင်းဆုံးစိုက်ထူမှု
အသက် ၃၁ နှစ် - စိတ်၏ကြည်လင်ပြတ်သားမှု၊
အသက် (၃၁) နှစ် - ED & libido နိမ့်မှုသည်နောက်ဆုံးတွင်ပျောက်ကင်းသွားခဲ့ပြီးလပေါင်းများစွာကြာခဲ့သည်
အသက် ၃၁ - ED နှင့်လက်ထပ်ပြီး၊
အသက် ၃၁ နှစ် - ED ရောဂါပျောက်ကင်းသွားခြင်း၊ လူမှုရေးစိတ်ပူပန်မှုနည်းခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊
အသက် ၃၁ - ED ပျောက်ကင်းသွားသည်။ ကျွန်မတို့ဟာရင်းနှီးချစ်ခင်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်
အသက် ၃၁ - ED ကို ၃၂ ရက်အတွင်းကုသနိုင်သည်
အသက် ၃၁ - ED၊ စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောမျောက်တစ်ကောင်သည်အမှောင်ခန်းထဲတွင်ဝှက်ထား၏
(၃၁) နှစ် - ED - စိတ်ကျဝေဒနာပျောက်သွားပြီးငါ့အလုပ်မှာပိုပြီးအောင်မြင်တယ်၊
အသက် ၃၁ နှစ် - ED: တိုးတက်မှုနှေးကွေးမှုသည်တိုးတက်မှုမရှိခြင်းထက်သာလွန်သည်။ ငါ့ဇာတ်လမ်း
အသက် (၃၁) - စုစုပေါင်း ၁၀၀% PIED မှသည် BJ ကာလအတွင်းအလွန်ခက်ခဲပြီးအောင်မြင်သောအော်ဂဇင်စသည်
အသက် ၃၁ နှစ် - ကင်ဆာရောဂါရှိခြင်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုနှိုးခဲ့သည်။ ဒီကနေ့အရာအားလုံးဟာအရင်ကထက်ပိုပြီးချိုမြိန်လှပါတယ်။
(၃၁) နှစ် - ကုသမှုခံယူပြီး၊
အသက် ၃၁ နှစ် - ကျွန်ုပ်သည်ဖတ်စာအုပ်ဥပမာ No No Fap သည်ကုထုံးမဟုတ်ပါ။
(၃၁) နှစ် - သင်ချည်နှောင်ထားသောချည်နှောင်ခြင်းမှလွတ်မြောက်သောအခါဘဝသည် ပို၍ ကောင်းမွန်လာသည်။
အသက် (၃၁) နှစ် - အထီးကျန်ဆန်သောအိမ်၊
အသက် ၃၁ - အိမ်ထောင်သည်၊ လိင် - Ohmygod အရမ်းကောင်းတယ်
(၃၁) နှစ်၊ လူမှုရေး, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘဝပြန်ပုံမှန်။
(၃၁) နှစ် - Nofap အလုပ်လုပ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲ၊
(၃၁) နှစ် - ကုန်ထုတ်စွမ်းအားမြင့်တက်လာခြင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်ပိုမိုအားကောင်းလာသည်ဟုခံစားရသည်၊ ဆက်ဆံရေးပိုကောင်းသည်
အသက် ၃၁ နှစ် - ကျွန်ုပ်၏ပုလ်ကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်ခြင်း
အသက် ၃၁ နှစ် - ငါညစ်ညမ်းနေတဲ့အချိန်မှာဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့်လိင်စိတ်ကိုပြန်ပေါ်လာတယ်။
အသက် ၃၂ ​​- အိမ်ထောင်သည် (ED)၊ ၁၈၀ ရက်အစီရင်ခံစာ ED
အသက် ၃၂ ​​ရက် - ၁၀၀ ရက် - အထွေထွေစိုးရိမ်ပူပန်မှုလျော့နည်းလာခြင်း၊ ပို၍ ယုံကြည်မှုရှိခြင်း၊ အမျိုးသမီးများအားကွဲပြားစွာရှုမြင်ခြင်း
အသက် ၃၂ ​​- ရက် ၁၀၀ လက်ထပ်ထိမ်းမြား: ငါ့အမူအကျင့်တစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားပြီ
အသက် ၃၂ ​​နှစ်မှ ၁၂ ခြေလှမ်းချဉ်းကပ်မှု၊ စီးပွားရေးအသစ်၊ ဆက်ဆံရေးအသစ်၊
အသက် ၃၂ ​​- ၁၇၇ နေ့များ - ကျွန်ုပ်၏လူမှုဘဝသည်များစွာတိုးတက်ခဲ့သည်
အသက် ၃၂ ​​- ၂၉၆ ရက် - ကျွန်ုပ်၏ ED သည်ဆီးချိုသွေးချိုဖြစ်သည်ဟုထင်သော်လည်း၎င်းသည်ညစ်ညမ်းစေသောရောဂါဖြစ်သည်
အသက် ၃၂ ​​- ရက် ၃၀၀၊ အရေပြားအခြေအနေ၊ အေးဆေးအေးဆေး၊
အသက် ၃၂ ​​- ရက်ပေါင်း ၅၀၀: Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု
အသက် ၃၂ ​​ရက် - ၆၀ ရက် Fapfree နဲ့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမပျော်ဘူး။
အသက် ၃၂ ​​- ရက် ၉၀၊
အသက် ၃၂ ​​- နာတာရှည် ED: ၈ နှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံခြင်းဖြင့်စိုက်ထူခြင်း
(၃၂) နှစ် - ကျွန်ုပ်၏ ED / DE နှင့်ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုမှုကြားတိကျသောဆက်နွယ်မှု။
အသက် (၃၂) နှစ် - ကျွန်ုပ်ဘဝတွင်ပထမဆုံးလူအဖြစ်ခံစားခဲ့ရသောကြောင့်စိတ်ကျဝေဒနာပျောက်ဆုံးသွားသည်
အသက် ၃၂ ​​- သင့်ကောင်မလေးအား“ ညစ်ညမ်းသောလိင်ဆက်ဆံမှု” ကိုမပြုလုပ်ပါနှင့်
အသက် ၃၂ ​​- ED ပျောက်ကင်းသွားပြီ၊ ပြင်းထန်သောစိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ ကြောက်ရွံ့မှုနှင့်စိုးရိမ်မှုများအားလုံးပျောက်ကွယ်သွားပြီ
အသက် ၃၂ ​​- ED၊
(၃၂) နှစ် - ED - ပြီးခဲ့သည့်ညကပထမဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ #nofapshitworks
အသက် ၃၂ ​​- ရက် ၁၂၀ ပြီးနောက်အာရုံစူးစိုက်မှု၊ လှုံ့ဆော်မှု၊ စွမ်းအင်နှင့်ပျော်ရွှင်မှု
အသက် ၃၂ ​​နှစ် - HOCD, ED: လိင်သည်လိင်မဟုတ်ပါ
အသက် ၃၂ ​​- ကျွန်ုပ်ရောဂါပျောက်ကင်းသွားပြီ။ ငါ့ ဦး နှောက်ကိုပြန်ရတယ် ကျွန်တော်ပျော်တယ်။
အသက် ၃၂ ​​နှစ် - ညစ်ညမ်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းကငါ့ကိုစိတ်ဓာတ်ကျစေပြီးလှုံ့ဆော်ပေးသည်ဟုလုံးဝယုံကြည်သည်
(၃၂) နှစ် - သတင်းအချက်အလက်ကြွယ်ဝပြီးရက်ပေါင်း ၉၀ စမ်းသပ်မှုအတွက်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှု
အသက် ၃၂ ​​- ကွန်ပျူတာများအားလုံးကိုပိတ်ထားပြီးဘဝပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်
အသက် ၃၂ ​​- အိမ်ထောင်သည် (ED)၊ တစ်နှစ်အစီရင်ခံစာ
အသက် ၃၂ ​​- အိမ်ထောင်သည်၊ ဂျာမန်
အသက် ၃၂ ​​- အိမ်ထောင်သည် - ED ကိုကုသတယ်။ ငါဟာလူတွေကိုပိုပျော်တယ်၊ ကျန်းမာသန်စွမ်းတယ်၊
အသက် ၃၂ ​​- အိမ်ထောင်သည် - အော်ဂဇင်ပိုမိုပြင်းထန်လာခြင်း၊
အသက် ၃၂ ​​- အိမ်ထောင်သည် တစ်နှစ် - ငါဟာလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကလောက်ထူးခြားတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။
(၃၂) နှစ် - ကျွန်ုပ်၏စွမ်းအင်အဆင့်များသည်ဇယားများမှကျပါသည်။
အသက် (၃၂) နှစ် - ၂၅ နှစ်အတွင်းကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးမဟုတ်သောပုံသဏ္eာန်စိုက်ထူခြင်း! ၅ မိနစ်ကြာသည် ငါမျှော်လင့်ချက်ရှိသေးသည်ကိုသဘောပေါက်။ ငိုတော့သည်။
(၃၂) နှစ် - PIED ကိုအလေးအနက်ထားသည် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောမိန်းမနှင့်ကောင်းသောဆက်ဆံရေးရှိသည်
အသက် ၃၂ ​​- ပြင်းထန်သော ED၊ လုံးဝပျောက်ကင်းသွားပြီ။
အသက် ၃၃ နှစ် - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲစွဲသူ ၁၇ နှစ် - ၈၈ ရက်အစီရင်ခံစာ
အသက် ၃၃ - ၁၈၀ ရက်အစီရင်ခံစာ။ Co-Op mode တွင် NoFap၊ NoOrgasm နှင့် Karezza
အသက် ၃၃ နှစ်မှ ၂ နှစ် (အိမ်ထောင်သည်) လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ကထက်ယခုကျွန်ုပ် ပို၍ ပျော်ရွှင်သည်
အသက် ၃၃ ရက်မှ ၅၀ ရက် - ကျွန်ုပ်ဘဝဟာသိသိသာသာပြောင်းလဲသွားပြီ၊
အသက် - ၃၃ ရက် - စာနယ်ဇင်းကွန်ဖရင့်ပုံစံဖြင့်
(၃၃) နှစ် - ကလေးဘဝအိပ်မက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်
(၃၃) နှစ် - ၁.၅ နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့စိတ်မရှိ၊
အသက် ၃၃ - ED ပျောက်ကင်းသွားပြီ။ ၃ နှစ်ကြိုးစားပြီးဖြစ်သည်
(၃၃) နှစ် - ED သည် ၅၁ ရက်အတွင်းကုန်ဆုံးပြီးကျွန်ုပ်၏ရည်းစားအသစ်နှင့်အတူဘ ၀ သစ်ရရှိခဲ့သည်။ (နောက်ဆက်တွဲ: ငါနောက်ကျော porn သို့ကျဆင်းသွားအဖြစ် ED ပြန်လာ)
၃၃ နှစ် - ED၊ ၆ လ
(၃၃) နှစ် - ED၊ ရလဒ်တွေကိုကျွန်တော်အံ့သြမိပါတယ်
အသက် ၃၃ နှစ် - ED: အောင်မြင်သောလိင်၊ ကျွန်ုပ်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကတည်းကအကောင်းဆုံးပုံသဏ္Inာန်ရှိသည်
အသက် (၃၃) နှစ် - လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတိုးမြှင့်ခြင်း၊
အသက် ၃၃ နှစ် - စိတ်ဖိစီးမှုနည်းပါးခြင်း၊ စွမ်းအင်ပိုများခြင်း၊ သက်သောင့်သက်သာရှိသောအိပ်စက်ခြင်း၊ ပိုမိုခိုင်မာသောဆက်ဆံရေး၊ လိင်ဆက်ဆံစဉ်ကောင်းမွန်သောတည်ဆောက်မှု၊ ကိုယ်ခန္ဓာနာကျင်မှုနည်းပါးခြင်း၊
အသက် ၃၃ နှစ် - အိမ်ထောင်သည်။ တစ်စုံတစ်ခုကိုမလုပ်ခဲ့သည့်ရက် ၃၀၁ သည်အခြားအရာများအောင်မြင်ရန်သင်ကူညီနိုင်သည်
အသက် ၃၃ နှစ် - ပိုမိုတည်ငြိမ်သောစိတ်ခံစားမှု၊ ယုံကြည်မှုပိုရှိခြင်း၊
(၃၃) နှစ် - ကျွန်ုပ်၏အိမ်ထောင်ရေးသာမကကျွန်ုပ်၏လိင်ဘဝတိုးတက်ကောင်းမွန်လာသည်။
(၃၃) နှစ် - လိင်မှုဆိုင်ရာအသက် (၂၀) ​​အားဖြင့်ကားမမောင်းပါ။ ED & နှောင့်နှေးနေသောသုတ်ရည်လွှတ်မှု - ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုကုသနိုင်ပါပြီ
အသက် ၃၃ နှစ် - PIED ပျောက်ကင်းသွားသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာပြီးနောက်မျက်လုံးများမှမိန်းကလေးများကိုပြန်ကြည့်။ ပြုံးမိသည်။ လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုသွားပြီ။
(၃၃) နှစ် - PIED - ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ကျွန်တော်ဟာတစ်နေ့တာအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုအောင်မြင်စွာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။
အသက် ၃၃ နှစ် - အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရပေမယ့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့အမြစ်ပြproblemနာကိုကျွန်တော်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်
(၃၃) နှစ် - အမျိုးသမီးအသစ်များနှင့်အောင်မြင်မှု၊ နှစ်ပေါင်းများစွာစွဲစွဲလမ်းလမ်းနှင့် ED
အသက် ၃၃ - ဆယ်နှစ် ED - လက်ထပ်ပြီးခါ ED သည်လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားသည်။
အသက် ၃၃ နှစ် - badass motherfucker အဖြစ်ပြောင်းသည်
အသက် (၃၃) နှစ် - လူမှုရေး၊ လူမှုရေး၊ အတွေးများပိုမိုရှင်းလင်းပြီးလှပသောအမျိုးသမီးများကိုဆွဲဆောင်သည်
အသက် ၃၃ (ED) - ၈ လ - ရည်းစားနှင့်လိင်ဆက်ဆံပြီး reboot လုပ်စဉ်တွင် Cialis ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်
အသက် ၃၄ နှစ် - ရလဒ်များသည်ထူးခြားသည်။ ကျွန်တော့်ဇနီးကိုဘယ်တော့မှတစ်ခါမှမခံစားခဲ့ဖူးသောဤချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုကျွန်ုပ်ခံစားမိသည်
အသက် ၃၄ - ၁ နှစ် - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ကျွန်ဘဝမှလွတ်မြောက်ခြင်းသည်မည်သည့်အရာထက်မဆို သာ၍ ကြီးမြတ်သောလက်ဆောင်ဖြစ်သည်
အသက် ၃၄ နှစ်မှ ၁၂ နှစ်အထိ - အပြည့်အဝပျောက်ကင်းသွားသည်။
အသက် ၃၄ နှစ်မှနှစ်ပေါင်း ၉၀ ရက်အထိ - ED သည်အခြားကောင်းမွန်သောပြောင်းလဲမှုများကိုကုသပေးခဲ့သည်
အသက် ၃၄ - ရက်ပေါင်း ၉၀၊ PE၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုပျောက်ကွယ်သွား
အသက် (၃၄) နှစ် - ကျွန်ုပ်ဘဝကိုထာဝရပြောင်းလဲစေခဲ့ပါပြီ။ အခြားလိင်အမျိုးအစားတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်ထပ်မံရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်
အသက် ၃၄ - ၁၀ လအကြာတွင် ED သည် PMO မပျောက်ကင်းပါ
အသက် ၃၄ နှစ် - ED သည်ရက်ပေါင်း ၈၀ အတွင်းပျောက်ကင်းသွားသည် -“ ကျွန်ုပ်သည်စွဲလမ်းမှုအမြင့်ဆုံး ၅% တွင်ရှိသည်။
အသက် ၃၄ နှစ်မှ ၁၆ နှစ်ထိ ED ။ ဤအရာသည်အဆင့်အားလုံးတွင်အောင်မြင်နိုင်သည်
အသက် ၃၄ နှစ် - ED၊ ဒါပေမယ့်ငါကစွဲစွဲလမ်းလမ်းမစွဲလမ်းဘူး
အသက် ၃၄ နှစ် - ED၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားမှုနှင့်အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်ခြင်း။ (အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် update - ၄ င်းပထမ ဦး ဆုံးပြန်ဖွင့်ခြင်းဇာတ်လမ်းပြီးနောက် ၄ နှစ်)
အသက် (၃၄) နှစ် - ကျွန်ုပ်အသက်ရှင်သောငရဲသို့မပြန်ချင်ပါ
အသက် ၃၄ နှစ် - ငါစိတ်ဓာတ်ကျတာ၊ ငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထား, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်အတွင်းစိတ်အစွမ်းသတ္တိကိုရရှိခဲ့သည်။
အသက် ၃၄ - ငါသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားတဲ့ဘ ၀ ကိုနေထိုင်နေတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားကသူမမြင်တွေ့ရသောတိုးတက်မှုများအကြောင်းအမြဲတမ်းပြောဆိုသည်
(၃၄) နှစ် - အိမ်ထောင်သည်ဘဝ၊ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုနှင့်စိတ်ဓါတ်များ၊ အရာအနည်းငယ်သာ ပို၍ ပျော်စရာကောင်းသည်
အသက် ၃၄ နှစ် - လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း - ကျွန်ုပ်ဇနီးနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်ထင်သည်ထက် ပို၍ သာသည်
(၃၄) နှစ် - အလယ်လတ်နောက်ဆုံးအဆင့် - PMO သို့မသွားရန် ၁၄ လ
အသက် (၃၄) နှစ် - ကျွန်ုပ်နှင့်ပိုမိုထိတွေ့ခြင်း၊ အိပ်ခန်းရှိအရာများသည်အဆသန်းတစ်ရာပိုကောင်းသည်
အသက် (၃၄) နှစ် - ယခုငါအလွယ်တကူစကားပြောနိုင်ပြီးအမျိုးသမီးများနှင့်ကျွန်ုပ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲ။
အသက် (၃၄) နှစ် - ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနှင့်ပြန်လည်လေးစားမှု၊ အချိန်ကုန်မှုနှင့်စွမ်းအင်တန်ချိန်
(၃၄) နှစ် - reboot တစ်ခုရဲ့မယုံနိုင်လောက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးများ
အသက်အရွယ် 34 - ပဲတစ်လအတွက်ဆိုပါသည်အပေါ် PIED
အသက် ၃၅ နှစ် - လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း။ ကျွန်ုပ်သည်ကောင်းမွန်သော၊ ယုံကြည်မှုနှင့်ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသောခံစားမှုကိုခံစားရသည်။
အသက် (၃၅) နှစ် (၆ လ) ကျွန်ုပ်၏ဘဝတိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်။ ငါကွဲပြားခြားနားသောမျက်လုံးများမှတဆင့်အမျိုးသမီးတွေကြည့်ရှုပါ
အသက် ၃၅ - ၆ လ - ကျွန်ုပ်ဘဝတွင်ကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်
အသက် ၃၅ - ၇၀ ရက် - ED ရောဂါပျောက်ကင်းသွားပြီ၊
အသက် ၃၅ - ရက် ၉၀ - ကျွန်ုပ်၏မူးယစ်ဆေးဝါးအကြံပေးက“ မင်းကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုစွဲလမ်းနေတယ်မဟုတ်လား” ဟုပြောသည်။
အသက် ၃၅ နှစ် - ED နှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများ - ရက်ပေါင်း ၉၀ အစီရင်ခံစာ
အသက် ၃၅ - ED၊ ရက် ၉၀ အစီရင်ခံစာ၊ မိတ်ဖက်နှင့်ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံခြင်း
အသက် ၃၅ နှစ် - ED သည်ကျွန်ုပ်ကြောက်ရွံ့သည့်အရာတိုင်းကိုရင်ဆိုင်ရန်အလေ့အကျင့်ရှိသည်
အသက် ၃၅ - ညစ်ညမ်းညစ်ညမ်းသောအကျင့်များတွင်အမြစ်တွယ်နေသောဆက်ဆံရေးပျက်ကွက်ခြင်း
အသက် ၃၅ - ကျွန်ုပ်တွင် HOCD & ED ရှိခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုလေးနှစ်အခမဲ့ခံခဲ့ရသည်။
အသက် ၃၅ - ဒုတိယ၊ နောက်ဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့ ၉၀ ကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ (porn သည်ကျွန်ုပ်အတွက်သေပြီ)
အသက် ၃၅ - အခြားသူများကိုလိင်နှင့်မဆက်ဆံတော့ပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ဇနီးမဟုတ်လျှင်။ ဒါ့အပြင်ငါ့အအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်ကြီးမားတဲ့ခြေလှမ်းတက်ယူခဲ့ပါတယ်
အသက် ၃၅ - ငါ ED ရောဂါလက္ခဏာခံစားနေရပေမယ့်ညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်ရတာကိုမသိခဲ့ဘူး။
အသက် ၃၅ နှစ် - အိမ်ထောင်ရေးသည်များစွာတိုးတက်လာသည်
အသက် ၃၅ - အိမ်ထောင်သည်၊ ကလေး ၃ ယောက်။ အကြှနျုပျ၏ဂျာနယ် - ရက်ပေါင်း 35, ပို့စ် 3
အသက် ၃၅ - ဇွဲရှိခြင်း
အသက် ၃၅ - လိင်ဘဝပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ သူမသည်ကျွန်ုပ်၏သဘောထားနှင့်လုပ်ဆောင်မှုများတွင်ခြားနားချက်ကိုတွေ့သည်
အသက် ၃၅ - ကျွန်တော့်ဇနီးနှင့်လိင်ဆက်ဆံသည်မှာအံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်။ ပိုပြီးပုံမှန်နှင့်ပိုပြီးရငျးနှီး
အသက် ၃၆ - (ED) - ၂၅ နှစ်ကြာညစ်ညမ်း - ဤအရာသည်အလုပ်လုပ်သည်
အသက် ၃၆ - နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားမှု
အသက် ၃၆ - စိတ်ကျရောဂါကိုရုပ်သိမ်းခြင်း
အသက် ၃၆ - ED ကို ၄၂ ရက်အတွင်းကုသနိုင်သည်
အသက် ၃၆ နှစ် - လိင်တူချစ်သူ - "ကျမစိတ်ဓာတ်ကျခဲ့တယ်၊ ဘယ်နေရာကိုမှမသွားဘူး"
အသက် ၃၆ နှစ် - အလွန်ဆိုးဝါးသောစွဲလမ်းမှုရှိသည်။ ငါအကြိမ် 36+ ကျော်ဆေးလိပ်ဖြတ်သောကွောငျ့ငါသိ၏။
အသက် ၃၆ - ဘ ၀ သည်လုံးဝပြောင်းလဲသွားသည်
(၃၆) နှစ် - လှုံ့ဆော်မှုနည်းခြင်း၊
(၃၆) နှစ် - လက်ထပ်ခြင်း - ညစ်ညမ်းသောအကျင့်စွဲခြင်းကိုအနှစ် ၂၀ ကြာသည်
အသက် ၃၆ - ကျွန်ုပ်စိတ်သည်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသားတစ် ဦး ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ပြီးလုပ်ဆောင်သည်။
(၃၆) နှစ် - လူမှုရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားပြီ။ ကျွန်ုပ်သည်လိင်စွဲလမ်းမှုမည်မျှရှိသည်ကိုလေ့လာခဲ့သည်
အသက် ၃၆ နှစ် - ရက်ပေါင်း ၉၀ လုပ်ရန် ၂ နှစ်။ ခြားနားချက်မှာနေ့ရောညပါဖြစ်သည်။
အသက် ၃၇ နှစ်မှ ၁ နှစ်အတွင်းယုံကြည်မှု၊ မှတ်ဉာဏ်၊ ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်စွမ်း၊ စိုးရိမ်စိတ်၊
အသက် ၃၇ - ၃၆၅ ရက် - ကျွန်ုပ်၏ကျန်ဘ ၀ ၏ပထမနှစ်
(၃၇) နှစ် - ED ရောဂါပျောက်ကင်းသွားတဲ့ပထမမိန်းကလေး
အသက် ၃၇ နှစ် - ED သည်ကျွန်ုပ်အတွက်ပြmeနာမရှိသလောက်နည်းပါသည်။ ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ကျွန်တော်ကြားမှာဆက်ဆံရေးဟာသိသိသာသာတိုးတက်လာတယ်။
အသက် ၃၇ နှစ် - ED၊
အသက် ၃၇ - ED၊ စိုးရိမ်ခြင်း၊
အသက် ၃၇ နှစ် - ၁၅ ပေါင်ကျသည်
အသက် ၃၇ နှစ် - လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှု - ဇနီးနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆက်သွယ်မှု
အသက် ၃၇ နှစ် - အပျိုစင်ဘ ၀
အသက် ၃၇ နှစ် - ကျွန်ုပ်၏ဇနီးနှင့်အောင်မြင်သောလိင်ဆက်ဆံမှု။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် NoFap!
အသက် (၃၇) နှစ် - တစ်နှစ်လျှင်ညစ်ညမ်းသောသူတစ် ဦး တစ်ယောက်၏အတွေ့အကြုံ
အသက် (၃၇) နှစ် - ညစ်ညမ်းသော ED ရောဂါ၏နှစ်များ
အသက် ၃၈ နှစ် - (ED) နှစ်ပေါင်းများစွာရုန်းကန်ခဲ့ရသည်
အသက် ၃၈ နှစ် - ED (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားမှု) ပြန်လာပေမယ့်စိတ်ဓာတ်ကျနေတုန်းပဲ
အသက် ၃၈ နှစ်မှ ၆ လအထိ၊ Porn ကမင်းကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်
အသက် ၃၈ နှစ်မှ ၂၅ နှစ်အကြာ PMO (ED) ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း ၉၀
(၃၈) နှစ် - ED & libido ပျောက်ကင်းမှုပျောက်ဆုံးခြင်း - ၂၀ နှစ်ထပ်မံခံစားရသည်။
အသက် ၃၈ နှစ် - လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်လိင်စိတ်နည်းခြင်း - ၄ ပတ် - ကျွန်ုပ်ဘဝတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံစဉ်ဇနီးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုခံစားခဲ့ရသည်
အသက် ၃၈ နှစ် - ED ရောဂါပျောက်ကင်းသွားသည် - ယုံကြည်မှုတိုးလာသည်၊ မျက်လုံးချင်းဆုံခြင်း၊
အသက် ၃၈ နှစ် - ED၊ ငါကြည့်ရတာကောင်းတယ်၊ ငါကပိုတန်ဖိုးရှိတယ်
အသက် ၃၈ နှစ် - လိင်တူချစ်သူအမျိုးသား - ကွန်ဒုံးဖြင့်အောင်မြင်သောလိင်ဆက်ဆံမှု။
အသက် ၃၈ - အိမ်ထောင်သည်၊ ရက် ၁၃၀ - ED Cured
အသက် ၃၈ - အိမ်ထောင်သည်၊ လူကန်လန် - ရက် ၃၀
အသက် ၃၈ - အိမ်ထောင်သည်၊ ED လုံးဝပျောက်သွားပြီ။
အသက် ၃၈ နှစ် - အိမ်ထောင်ပြု - ED ပျောက်သွားပြီးလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကသူမအတွက်ကျွန်ုပ်ခံစားခဲ့ရသည့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အလျင်အမြန်ခံစားခဲ့ရသည်
အသက် ၃၈ နှစ်မပိုသေးသော Yankie My Wankie: PIED နှင့်အတူလူဖြင့်ဘလော့ဂ်ပြုလုပ်သည်
အသက် ၃၈ နှစ် - စိတ်ကျရောဂါနှင့်ပုန်းလျှိုးနေရပြီ။ ယခုအိမ်ထောင်ကျပြီးပျော်ရွှင်ပြီ
အသက် ၃၈ နှစ် - ဆယ်နှစ်ရှာဖွေခြင်း (ED)
(၃၈) နှစ် - ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဆက်ဆံရေးအတွက်ကျွန်ုပ်ပြုခဲ့သမျှအကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုအခါငါအများကြီးပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုမြင်နေတာပါ။
(၃၉) နှစ် - ၁၀ နှစ်နီးပါးအချိန်မှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ကျွန်တော်မပေါင်းခဲ့ဘူး
အသက် ၃၉ နှစ်အရွယ် - ED သည်လက်ထပ်ပြီး Karezza
အသက် ၃၉ - ၃၇ ရက် PMO အခမဲ့ - နောက်ဆုံးမှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်ပြီ။
အသက် ၃၉ - ED ပျောက်ကင်းသွားသည်။ ရက်ပေါင်း ၅၀ လောက်မှာငါဟာအမျိုးသမီးတွေကိုကြည့်ပြီးလှည့်လာတယ် \_ t
(၃၉) နှစ် - ED သည်ကုသပြီးပြီ၊
အသက် ၃၉ နှစ် - လိင်တူချစ်သူ၊ ED - ငါ့ဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်
အသက် ၃၉ နှစ် - ရသေ့၊ အပျိုစင်၊ သူငယ်ချင်းမရှိ။ ငါငြင်းပယ်ခံရခြင်းကိုကြောက်တော့မည်မဟုတ်။ ငါ့ခွံထဲကထွက်လာတာပါ
အသက် ၃၉ နှစ် - ငါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတဲ့ထောင်ထဲမှာအနှစ် ၂၀ နေခဲ့ရတယ်
အသက် ၃၉ နှစ် - ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းသော၊ မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှု၊ လိင်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်သည်၊
အသက် ၃၉ နှစ် - ငါလုပ်ခဲ့သမျှအခက်ခဲဆုံးအရာတွေထဲကတစ်ခုကသွေးထွက်သံယိုခဲယဉ်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုငါလုပ်ခဲ့ပြီးပြီ
အသက် ၃၉ နှစ် - အနှစ် ၂၀ ကျော်စွဲစွဲလမ်းမှု - ဒီဟာကငါ့ဘဝကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပြီလဲ။
အသက် ၃၉ - PIED ပျောက်ကင်းသွားသည်။ လိင်ယခုအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါ၏အ anhedonia ကုသ။ ငါသာယာတဲ့ & ပိုပြီးအကောင်းမြင်မိပါတယ် (ရက်ပေါင်း ၄၃၀ မွမ်းမံခြင်း)
အသက် ၄၀ - ရက်ပေါင်း ၉၀ - အာရုံစူးစိုက်မှု၊ လှုံ့ဆော်မှု၊ စိုးရိမ်စိတ်လျော့နည်းခြင်း
အသက် ၄၀ - ညစ်ညမ်းမှုကို ၂၅ နှစ်ကြာစွဲစွဲလမ်းစေသောနေ့ - ၅၀ ရက်
အသက် ၄၀ - ၂၄ နှစ်ကြာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်“ အသစ်စက်စက်” ကိုငါတည်ဆောက်နေသည်ဟုခံစားရသည်။
အသက် ၄၀ - ၎င်းကို ၂၅ နှစ်ကြာနေထိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ ED သည်အမြဲတမ်းရှိနေကြောင်းသေချာပါသည်
အသက် ၄၀ - ငါခံစားခဲ့ရတာထက်ပိုပြီးလူသားဆန်တယ်လို့ခံစားရတယ်၊ ပိုပြီးအစွမ်းထက်တယ်၊ ထိန်းချုပ်မှုပိုရတယ်၊ ပိုပြီးထိတွေ့တယ်
အသက် ၄၀ - အိမ်ထောင်သည် - ရက် ၆၀ အစီရင်ခံစာ
အသက် ၄၀ - အိမ်ထောင်သည် - ၂၆ နှစ်တာကာလအတွင်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၊ PE နှင့် ED ကိစ္စများရှိခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၄၀ - အိမ်ထောင်သည် - ကျွန်ုပ်ဘဝသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ၀ ိညာဉ်ရေးအရပိုမိုကောင်းမွန်သည်
အသက် ၄၀ - သင်အတွင်းပိုင်းအနည်းငယ်ထွန်းလင်းတောက်ပလာသောအခါလူတို့သည်မတူဘဲပြုမူသည်။ နံနက်သစ်သည်ပြန်လာသည်
အသက် ၄၀ - ကျွန်ုပ်ဘဝဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကိုပြန်လည်ရယူခြင်း
အသက် ၄၀ - လူမှုရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုသည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွက်လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်၏စိတ်သည်ရှင်းနေသည်။
အသက် ၄၀ ကျော် - တတိယအကြိမ်အတွက်ရက်ပေါင်း ၉၀: ED ကိုရှုံးနိမ့်ခြင်း
အသက် ၄၀ ကျော် - အိမ်ထောင်သည် - ED & DE ပိုကောင်းတယ်၊ ငါတို့ဆက်ဆံရေးကပိုကောင်းတယ်
အသက် ၄၀ - (၇) နှစ်အတွင်းပထမဆုံးအောင်မြင်သောလိင်ဆက်ဆံမှု
အသက် ၄၀ - ၁၂၀ ရက်အစီရင်ခံစာနှင့်ရက်ပေါင်း ၂၀၀ အစီရင်ခံစာ - အမြတ်တနိုးများကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်
အသက် ၄၀ - ရက် ၂၀၀ အတွင်း။ ဒါဟာဒါနှင့်တူ၏ :)
အသက် ၄၀ - ၄ နှစ်သည်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ပြီးနောက် ၃ လသန့်ရှင်းသည်
အသက် ၄၀ - ရက် ၉၀: ဒီမှာလုပ်ရမှာကကျွန်တော့်ရဲ့ထိပ်ဆုံးစာရင်း ၁၀ ခုပါ
အသက် ၄၀ - ED & DE လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားပြီ လိင်သည်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်။ အလုပ်မှာယုံကြည်မှုတိုးလာ။
အသက် ၄၀ - အိမ်ထောင်သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအချိန်အတန်ကြာမကြိုက်ခဲ့သလို PMO လည်းအကြောင်းရင်းနှင့်လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်
အသက် ၄၀ - အိမ်ထောင်သည် - ကျွန်တော့်ဇနီးနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်ပိုမိုပြင်းထန်လာပြီးအထူးခြားဆုံးဖြစ်သည်။
အသက် ၄၀ - လက်ထပ် / ဖခင်။ ယုံကြည်မှုသိသိသာသာတိုးများလာသည်
အသက် ၄၁ - ၁၅ နှစ်ရှိသောညစ်ညမ်းရောဂါကို Porn-ED ဖြင့်အသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်ကုသပြီ
အသက် ၄၁ နှစ် - ညစ်ညမ်းသော ED ရောဂါပိုးရှိသူအပျိုစင်နှစ် ဦး စလုံးသည်ယခုအခါအတိတ်တွင်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
အသက် ၄၁ - ED & အသက် ၁၉ နှစ်မှစ၍ သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းကို ၃၅ ရက်အတွင်းကုသခဲ့သည်
အသက် ၄၁ နှစ် - ED သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောကုသမှုခံယူခဲ့သည်
အသက် ၄၁ နှစ် - ED သည်ပိုမိုလုံခြုံစိတ်ချရသော၊ လူမှုရေးနှင့်မောင်းနှင်နိုင်မှု၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောမှတ်ဉာဏ်နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုခံနိုင်သည်
အသက် ၄၁ - အိမ်ထောင်သည် ED
အသက် (၄၁) နှစ် - ED - ရက်ပေါင်း ၉၀ နှင့် testosterone ဟော်မုန်းတအားကြီးသည်
(၄၁) နှစ် - လက်ထပ်ထိမ်းမြားပြီးညစ်ညမ်းသော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့သည်
အသက် ၄၂ - ၅ ပတ်
အသက် ၄၂ မှ ၅၅ ရက် NoFap၊ ၁၉ နှစ်အတွင်းလိင်ဆက်ဆံစဉ်ပထမဆုံးအော်ဂဇင်ဖြစ်သည်။
အသက် ၄၂ - ၉၀ ရက်နှင့်ကာရက်ဇာ
အသက် ၄၂ နှစ် - ED ရောဂါပျောက်ကင်းသွားပြီဖြစ်သော်လည်းအိမ်ထောင်ရေးပြtroubleနာသည်
အသက် ၄၂ နှစ် - ED ပျောက်ကင်းသွားသည်။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ၁၁ လကြာခဲ့သည်
အသက် ၄၂ နှစ် - ED နီးပါးပျောက်ကွယ်သွားပြီ၊
၄၂ နှစ် - ကောင်းပါတယ် ခက်ခဲပါတယ်။ အပြောင်းအလဲတစ်ခု။ (စွဲချက် ၃၄ နှစ်)
အသက် ၄၂ နှစ် - အနုတ်လက္ခဏာ၊ ဆေးလိပ်ဖြတ်၊ (ED)
အသက် ၄၂ - ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်မှုဘ ၀ သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်များကထက်ကောင်းသည်
အသက် ၄၃ - ၁၀၀ ရက်၊ ကာရက်ဇာနှင့် PMO မရှိတော့ပါ
အသက် ၄၃ - ၁၆၃ ရက် - အမျိုးသမီးများအားလိင်ပစ္စည်းများကိုကြည့်ခြင်းမဟုတ်ဘဲလူများဖြစ်သည်။
အသက် ၄၃ နှစ် - အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ယုံကြည်မှု၊ လိင်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေး
အသက် ၄၃ နှစ် - Copulatory Impotence ၈ နှစ် - ကုသပေးခဲ့သည်။
အသက် ၄၃ နှစ် - ED သွားပြီ၊ စိတ်ငြိမ်သက်သွားပြီ၊ အလုပ်ကိုအာရုံစိုက်တယ်၊ ရက်ပေါင်း 43 နီးပါး
အသက် ၄၄ နှစ် - ED သည် ၈၄ ရက်အတွင်းပျောက်ကင်းသွားသည်။ ငါ့ဘဝမှာပိုပြီးပျော်ရွှင်နေတယ်လို့ငါမထင်ဘူး
အသက် ၄၅ နှစ်မှ ၁ နှစ်။ ယခုကျွန်ုပ်ခံစားချက်သည်ရောထွေးနေသောအိတ်တစ်ခုဖြစ်သည်
အသက် ၄၅ နှစ် - ED - နှစ်များစွာထုံပြီးနောက်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်
အသက် ၄၅ နှစ် - ခင်ပွန်းသည်၊
အသက် ၄၅ နှစ် - အိမ်ထောင်သည်
အသက် ၄၆ နှစ် - (၄၄၄ ရက်) အသက် ၁၈၀ ဒီဂရီပြောင်းလဲသွားသည်
အသက် ၄၆ - ကလေးများနှင့်လက်ထပ်ပြီး ၁၀၄ ရက် - ကျွန်ုပ်ခရီး
အသက် ၄၇ နှစ်မှ ၁၀ နှစ်အထိ ED & DE ရောဂါပျောက်ကင်းသွားသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည် porn သို့ပြန်သွားသည်။
အသက် ၄၇ - Autism Spectrum Disorder: လ ၂၀ - ၎င်းသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်မိမိကိုယ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သောခရီးဖြစ်သည်။
အသက် ၄၇ နှစ် - ED၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှု - အရာအားလုံးပြောင်းလဲသွားပြီ
အသက် ၄၇ - အမျိုးသမီးများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏တစ်ကမ္ဘာလုံးသည်လွန်ခဲ့သောသုံးလအတွင်းတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။
(၄၇) နှစ် - လက်တွဲဖော်နှင့်ပြန်လည်ပေါင်းသင်းပါကလိင်ကူညီသည်
အသက် ၄၇ နှစ် - ၅၂ ရက်ရုတ်တရက်ထိခိုက်လွယ်သောအရာ
အသက် ၄၇ - ကလေးလေးယောက်နှင့်လက်မထပ်ရ။ ငါဖြောင့်ပေမဲ့လိင်တူချစ်သူတွေကိုဆွဲဆောင်တယ်၊
အသက် ၄၈ နှစ် - နာတာရှည် ED ဆေးကုသမှုခံယူခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ အိပ်စက်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးများသည်ယခုလှပနေပြီ
အသက် ၄၈ နှစ် - ED & DE ဟာလူသစ်တစ်ယောက်လိုငါထင်နေတာပဲ
အသက် ၄၈ နှစ် - ED သည်ပိုမိုကျန်းမာလာပြီး၊ အမျိုးသမီးများနှင့်ပိုမိုခင်မင်ရင်းနှီးမှု၊
အသက် ၄၈ - ED သည်ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်းကုသနိုင်သည်
အသက် ၄၈ နှစ် - NoFap ကကျွန်မရဲ့အိမ်ထောင်ရေးကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်
အသက် (၄၉) နှစ် - အနှစ် ၄၀ ကြာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ၊
အသက် ၄၉ နှစ် - ED ပျောက်ကင်းသွားပြီ၊ Girlfriend ပျော်ရွှင်နေပြီးငါ့ဘဝလည်းတိုးတက်လာသည်
အသက် ၄၉ နှစ် - ED သည် ၉၀% ကျော်သွားပြီဖြစ်သည်။ ငါသည်ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊
အသက် ၄၉ နှစ် - Nofap သည်ကျွန်ုပ်အတွက်တစ်သက်လုံးပြန်လည်စတင်ခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်သည်ဟုခံစားမိသည်
အသက် ၄၉ - နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်၏လိင်ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ချမှုအပြည့်ဖြင့်အနားယူပြီးစိတ်ပူစရာမလိုတော့ပေ။
အသက် ၅၀ - (ED) ကျွန်ုပ်သည် ပို၍ ပျော်ရွှင်ပြီးပိုမိုအသုံး ၀ င်ပါသည်။ ငါယခုဖြုန်း, မဖြုန်းတီးဘူး
အသက် ၅၀ - ED ၇ နှစ်ကြာပြီးနောက်ကုသခြင်း
အသက် ၅၀ - ED သည်လိင်ကိစ္စမဟုတ်သောနှောင်ကြိုးနည်းပညာ၏အခန်းကဏ္uredကိုကုသပေးခဲ့သည်
အသက် ၅၀ - ED သည်ပျောက်ကင်းသွားပြီးမနက်ခင်းတွင်သစ်သားပြန်ပေါက်နေသည်
အသက် ၅၀ - ခင်ပွန်းသည်၊ တစ်သက်တာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု
အသက် ၅၀ - အမျိုးသားများစွာသည်သူတို့၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံး PMO ကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ကြသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုရနိုင်သနည်း၊ သို့သော်အမှန်တကယ်လိင်ဆက်ဆံမှုအတွက်အဘယ်ကြောင့်မမေးမြန်းကြပါ
အသက် ၅၀ - အိမ်ထောင်ရေး၊ လိင်၊
အသက် ၅၀ - လိင်ကျန်းမာရေးကိုပြန်ရောက်
အသက် ၅၀ ကျော် - လိင်တူချစ်သူ၊ BDSM ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်အခြားအရာများပျောက်ကင်းသွားသည်
အသက် ၅၀ - ကျွန်ုပ်သည်ကြောက်စိတ်ကင်းပြီးယုံကြည်မှုရှိသူ၊ SO သူမ၌ငါ၌မြင်၏အပြောင်းအလဲများကိုချစ်တော်မူ၏
အသက် ၅၀ - ED သည်ရက်ပေါင်း ၁၂၀ ပျောက်ကင်းသွားသည်
အသက် ၅၀ - ED၊ စာဖြင့်ရေးသားထားသော erotica, karezza
အသက် ၅၁ နှစ်မှ ၅ နှစ်အထိ ED
အသက် ၅၂ နှစ် - ED၊ နောက်ကျောကွဲကွာအိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အတူ
အသက် ၅၂ - အိမ်ထောင်သည်၊ ED သည်နောက်ဆုံးတွင်ပျောက်ကင်းသွားပြီးအခြားသောတိုးတက်မှုများစွာကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့သည်
အသက် ၅၂ - Porn၊ ED၊ ခြေလှမ်း ၁၂ ချက်ဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာဖွေခြင်း
အသက် ၅၃ - (အက်ဒီ) သည်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သောအခန်းကဏ္ played မှပါ ၀ င်ခဲ့သည်
အသက် ၅၃ နှစ် - ED & PE နှင့်လက်ထပ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများသည်ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်လာသည်
အသက် ၅၄ - ၁၀၅ ရက် - ကျွန်ုပ်ဘဝ၏အကြီးမားဆုံးသောစိန်ခေါ်မှုကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့သည်။
(၅၄) နှစ် - ED: အပြာလိုင်းအပြင်မှာဒီဟာကအပြုသဘောဆောင်တဲ့အတွေ့အကြုံပဲ။
အသက် ၅၇ နှစ် - Porn သွေးဆောင်မှုကို ED ၄ ပတ်အတွင်းကုသပေးခဲ့သည် - ဤအသက်အရွယ်အုပ်စုအတွက်ဂန္ထဝင်ဖြစ်ရပ်
အသက် ၅၈ နှစ် - အရှက်ခွဲခြင်းနှင့်အရှက်ကွဲခြင်း
အသက် ၅၉ နှစ် - အောင်မြင်မှု - စိတ်ကူးယဉ်မှုများပျောက်ကွယ်သွားပြီးသင်သူတို့ကို“ အစာကျွေးခြင်း” မပြုလုပ်သရွေ့သေဆုံးလိမ့်မည်။
အသက် ၆၀ - ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းစိတ်ကူးယဉ်စရာမလိုဘဲကျွန်တော့်ဇနီးကိုချစ်နိုင်အောင်လုပ်နိုင်တယ်
အသက် ၆၀ - ED & နှောင့်နှေးနေသောသုတ်ရည်လွှတ်မှုပျောက်ကင်းသွားသည်။ ဇနီးပျော်တယ်
(၆၃) နှစ် - ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများစွာ၊ သည်းခံခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကောင်းခြင်း၊
(၆၇) နှစ် - ကျွန်ုပ်သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဇနီးနှင့်အတူဒေါက်မြင့်ဖိနပ်ကိုပြန်လှည့်လာခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်ပိုပြီးနိုးနိုးကြားကြား & ယုံကြည်မှု
အသက် ၃၀ အရွယ် - လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုလျော့နည်းလာပြီး၊
အစပိုင်းမှာတော့စိန်ခေါ်မှုကိုကျွန်တော်တကယ်အလေးအနက်မထားခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲဒီနောက်မှာတော့ ဦး လေးသေဆုံးသွားတယ်။
NoFap မတိုင်မီကကျွန်ုပ်သည်လောကနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ အဲဒီအစားငါကတခြားသူတွေအမှုအရာလုပ်ကြည့်ကြည့်ရိုးရှင်းစွာ။
ငါလုပ်ဖူးသမျှထဲမှာအကောင်းဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုပဲ! + လနှင့်ချီ။ အောင်မြင်မှုနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းမှအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အကြံပြုချက်များ။
ဦးနှောက်မြူမိန်းကလေးငယ်တစ်ဝှမ်းပိုအဆင်ပြေ, ပို. လူမှုရေးပျောက်ကွယ်သွား
ရုပ်သိမ်းဦးနှောက်မြူ, လူမှုရေးဘဝတိုးတက်, အသက်တာ၌ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ပိုပြီးအမှန်တကယ်လူ့တူခံစား
ဇနီး - porn-induced ED နှင့်အတူခင်ပွန်း
သတိမထားမိမရှိဘဲ 90 နေ့ကစိန်ခေါ်မှုသုံးကြိမ်ပြီးစီးခဲ့, ငါငါ့အသက်ကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဘယ်သူမျှမ PMO ၏တိုးတက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါပြီမယ်လို့အလိုရှိ၏။
လုံးဝ, FAP မှလျော့နည်းလိုအပ်မိန်းကလေးတွေအကြောင်းကိုငါ့အသဘောထားကိုပြောင်းလဲသွား
လုံးဝပျောက်ကင်းအောင်ကုသ ED, လျှော့ချလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု, ပိုကောင်းတဲ့အိပ်စက်ခြင်းနှင့်ပျြောရှငျ
ငါ၏အ anorgasmia ပျောက်ကင်းအောင်ကုသ, Nofap ကလုံးဝတန်ဖိုးရှိပါ!
ကျွန်ုပ်၏ ED ကိုကုသပြီးပါပြီ - ညစ်ညမ်းသို့ပြန်သွားပြီး ED ကိုပြန်ဖွံ့ဖြိုးလာသည် - ယခုတွင်ပျောက်ကင်းသွားပြီ
(ငါ့အ 2nd reboot အတွက်) ပျောက်ကင်းအောင်ကုသ porn သွေးဆောင် ED, ပိုလူမှုရေး, နောက်ထပ်စွမ်းအင်
၃၁ နှစ်အတွင်းနေ့စဉ် PMO (ED) - ကျွန်ုပ်၏ရက်ပေါင်း ၉၀ အစီရင်ခံစာ - ပုံမှန်တိုးတက်မှု
Day 39 - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုရောဂါပျောက်ကင်းသွားပြီးကျွန်ုပ်အလွန်ခံစားရသည်။
Day 56 -“ ငါပလေယာ”
Day 60 - ဒီမှာမြင်ကွင်း
Day 61 - ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအသံ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားမှု။ ငါနေသင့်တဲ့လူဆီကိုငါပြန်လာပြီ
Day 77 - ပြင်းထန်သော ED ဆေးကုသမှုခံယူခြင်း၊ ယုံကြည်မှုနိမ့်ကျခြင်း၊
ဒါဟာကျိန်းသေတန်ဖိုးရှိ။7နှစ်ကြာပြီးနောက် NoFap အကယ်ဒမီကကူညီပေးခဲ့
နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှု (နှေးကွေးစွာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း) - အိပ်ရာထဲပြissuesနာအနည်းငယ်သာရှိခြင်း
နှောင့်နှေးသုတ်သင်ပယ်ရှင်းခြင်း, အထိခိုက်မခံမှုညံ့ဖျင်းခြင်း - ၆၅ ရက်အကြာတွင်ပျောက်ကင်းသွားသည်
စိတ်ကျရောဂါ၊ လူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်၊ လျစ်လျူရှုမှု - အားလုံးပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ပြန်လာမယ့်ခံစားချက်တွေကို။
ED & ဦး နှောက်မြူမှုန့်ပျောက်ကင်းသွားပြီ၊ လူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်များပျောက်ကွယ်လုနီးပြီ
ED & နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်ပျောက်ဆေး: PMO မရှိ7ပတ်
ED - ၁ နှစ်ရုန်းကန်ရပေမယ့်နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ပျောက်သွားတယ်
ကျွန်ုပ်၏စစ်မှန်သောလိင်စိတ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိစဉ် ED - ၁၀၁ ရက်ကုသရန်
ED - လိင်ဆက်ဆံဖို့ ၁၁ လ။ ၁၆ လလုံးလုံးငါတိုးတက်နေဆဲ။
ED - ရော့ခ် Hard စိုက်ထူရန်5လ။
ED - ရက် ၅၀ - ကျွန်ုပ်ရည်းစားနှင့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာလိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးသည်
ED - ဒီသီတင်းပတ်မှာလိင်ဆက်ဆံမှုအကြိမ်ကြိမ်များတယ်
ED - ၈ လလုံးလုံးပြန်လည်ကျန်းမာလာပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်မဟာအမြဲတမ်းလိင်ဆက်ဆံမှုပြုနိုင်ခဲ့တယ်
ED - စိုက်ထူအများကြီးပိုမိုအားကောင်းပါ၏ ကြီးမားတဲ့ယုံကြည်မှုတိုးမြှင့်
ED - ငါ PMO ကိုနောက် ၂-၃ ကြိမ်လောက်ဆုံးရှုံးမယ်။
ED - ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေမှုမှသည်ကမ္ဘာ့ထိပ်ဆုံးအထိ
ED - ငါနောက်ဆုံးတစ်ခြားဘက်ကိုလှည့်ပြီးငါရူးသွားတာကတစ်စက္ကန့်ကိုအလုံးစုံဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တယ်။
ED - ကျွန်တော့်ဇနီးကပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်၊ သူမရဲ့ porn actresses ကိုအတုခိုးချင်တော့တယ်
ED - တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ကျန်းမာသည်ဟုကျွန်ုပ်အားပြောခဲ့သည် ဒါဟာငါ့အိပ်မက်ကိုကုန်ကျခဲ့တယ်။
ED - ငါရောဂါပျောက်ကင်းသွားပြီ၊ ငါဒီမှာသင်ယူခဲ့တာပါ
ED - ညစ်ညမ်းသော ED ကိုကုသရန်နှစ်နှစ်ခွဲကြာခဲ့သည်။
ED - ကိုးလကြာတိုက်ပွဲအပြီးတစ်လအခမဲ့ဖြစ်သည်
ED - လိင်ဟာအချိန်နဲ့အမျှပိုကောင်းလာတယ်။ အခုစိတ်ကူးကောင်းပါတယ်
ED - ငါတို့မှာအံ့ sex စရာကောင်းတဲ့လိင်မှုဘ ၀ နဲ့အံ့ emotional စရာကောင်းတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာဘဝရှိတယ်။
ED - Wife's report: သူ့စိုက်ထူမှုဟာ ၁၀၀% ပြန်လာတယ်
ED & DE ပျောက်ကင်းသွားသည် - ကျွန်ုပ်သည် ၆ လခန့်ကြာသော်လည်းအလုပ်လုပ်သည်
ED & DE - ငါလွန်ခဲ့သောတစ်လကျော်က PMO ကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာကြီးမားတဲ့ရုန်းကန်မဟုတ်ခဲ့ပေ
ကျွန်ုပ်၏ ၂ နှစ်တာကာလအတွင်းထိုးထွင်းသိမြင်မှုများစွာ - ED & နှောင့်နှေးနေသောသုတ်ရည်လွှတ်မှုပျောက်ကင်းသွားသည်
ED & Fetish ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံက“ ပျောက်ကင်းသွားပြီ” - ဒါပေမယ့်ငါကနောက်ကိုပြန်လှည့်ပြန်သွားတယ်
ED & HOCD - အောင်ပွဲသည်ထင်သည်ထက် ပို၍ နီးသည်။
ED & ထူးဆန်းတဲ့ fetishes - Nofap တကယ်ငါ့အတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်
ED & သုသေသန - အလွန်မြန်သောပြန်လည်နာလန်ထူခြင်း
ED နှင့်နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသ: 75 ရက်ပေါင်း
ED ကုသမှု - ရက် ၁၀၀ - လွန်ခဲ့သောညကကျွန်ုပ်၌အကောင်းဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုဖြစ်သည်
ED ရောဂါပျောက်ကင်းသွားသည် - ၅ လ။ နိုးနေပြီ၊ အမျိုးသမီးများအမြင်ပြောင်းလဲသွားပြီ၊
ED ကုသမှု - စိတ်ကျဝေဒနာနှင့် porn စွဲလမ်းမှုနှင့်အတူ ၆၅ ရက်
ED ရောဂါပျောက်ကင်းသွားပြီ - ငါကလူသစ်တစ်ယောက်လိုခံစားရတယ်၊ ၁၉ ရက်ပဲ
ED ရောဂါပျောက်ကင်းခဲ့ - ငါဆယ်ကျော်သက်ကဲ့သို့ခံစားရတယ်။ ငါဟာပိုပြီးလှုပ်ရှားတက်ကြွပြီးအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောလိင်ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်သည်
ED Cured - ဖြစ်နိုင်တာကိုမင်းအားလုံးကိုမင်းသိစေချင်တယ်။
ED cured - ငါလုပ်ရင်မင်းယောက်ျားတွေမင်းလုပ်နိုင်မှာသေချာတယ်။
ED ရောဂါပျောက်ကင်း - အိမ်ထောင်သည် - ငါစောစောစီးစီးဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာခံစားခဲ့ရတယ်။
ED ကုသမှု - ဖြည့်စွက်ဆေးများသည် Flatline ဖြင့် ၁၀ ပတ်ခန့်တွင်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်
ငါဘယ်လောက်ရက်ပေါင်း (ရှည်လျားသောသမိုင်း) ပင်မသိရပြီးနောက် ED ရောဂါပျောက်ကင်း
26 ရက်အတွင်းပျောက်ကင်းအောင်ကုသ ED ။ အောင်မြင်မှု။
ED သည်ကုသခြင်း၊ ADD နှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ကုသပေးသော်လည်း PMO သို့ပြန်သွားသည်
ED ပျောက်ကင်းအောင်ကုသ; porn အသုံးပြုမှုနှစ်ပေါင်းတို့နှင့်အတူကြွသောလိုက်တယ် fetishes သွားပြီဖြစ်ကြောင်း
ED ကုသပေးခဲ့၏။ အကြှနျုပျ၏စိတျခံစားမှုလမ်းပိုမိုအားကောင်းဖြစ်ကြသည်။ မိန်းကလေးများပိုပြီးလှပများမှာ
ED သည် ၁၀၀% ပျောက်သွားပြီးနံနက်သစ်သားသည် ၁၁၂ ရက်ဖြစ်သည်
ED သည်လုံး ၀ ပျောက်ကင်းသွားပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်အရစွဲလမ်းခဲ့သည်
ရက်ပေါင်း ၁၀၀ - ED ကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသတယ်။ ငါဘယ်တော့မှ porn မလုပ်တော့ဘူး
ED ရောဂါပျောက်ကင်းသွားပြီ - ဇနီးကပျော်တယ်၊ ကျေးဇူးတင်တယ်၊ ငါဟာပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိပြီးရဲရင့်စွာနေထိုင်ပါ
ED ပျောက်ကင်းအောင်ကုသတာဖြစ်ပါတယ်: ငါကလူ porn နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအကြားကြောင်းကျိုးဆက်စပ်လင့်များနားလည်သဘောပေါက်ရန်စတင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
ယုံကြည်မှု၊ စွမ်းအင်နှင့်မောင်းနှင်ခြင်း။ ရည်းစားရှိလား
ED သွားပြီ: ငါကပိုပြုံး, လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုလျော့နည်းသွား
ED နီးပါးပျောက်ကင်းအောင်ကုသနေပါတယ်။ လိင်စိတ်ဟာဇယားပိတ်ထားသည်
ED ပြန်လည်နာလန်ထူရှည်လျား reboot ပြီးနောက်, meth နှင့်အတူ kickstarted ။
ED 56 ရက်အတွင်းပြေလည်ပေမယ့်သိပ်အများကြီး orgasm ကျောငါ့ကိုထား
ED သည်ပျောက်ကင်းသည်ဟုထင်ရသော်လည်း ၂၅ ရက်သာကြာသည်။
ED ပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေမယ့်ငါပြန် porn ထံသို့ ဝင်. ခဲ့သည်။ ဒီတော့ဒီမှာငါဖြစ်၏။
ED, စိုးရိမ်စိတ် & လိင်စိတ်ဆုံးရှုံးမှု။ ယခု: လိင်သည်ကြီးကျယ်ခမ်းနားပြီးကျွန်ုပ်သည်မိန်းမများနှင့်အလွန်ယုံကြည်မှုရှိသူဖြစ်သည်
ED, derealization လက္ခဏာတွေ - ရက်ပေါင်း 30 အစီရင်ခံစာ။
ED: အခုလိင်ဟာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ဖန်တီးမှုတွေအများကြီးရှိတယ်၊ ပျော်စရာပိုများတယ်၊ ပိုပြီးရိုးသားတယ်
Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအပြည့်အဝသွားကြောင်း - ဒီအလုပ်ဖြစ်တယ်။
femdom သို့ဆိုးရွားလာခဲ့သည်: ကလစ်ပြီးနောက်ကလစ်အပေါ်ဒေါ်လာရာနဲ့ချီ binging နှင့်ဖြုန်း။
103 days ago ဘဝမှာပျောက်ဆုံးခဲ့ကွောငျးအရာခပ်သိမ်း, နောက်ဆုံးတော့အပြည့်အဝစက်ဝိုင်းလာသေး၏။
အနှစ် ၄၀ ကြာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဖမ်းမိခဲ့ခြင်း - ED & PE ပျောက်ကွယ်သွားသည်
ပျော်ရွှင်မှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုခံစားရခြင်း၊ လူမှုရေးဖြစ်လာခြင်း၊ စွမ်းအင်ပြည့်ဝစွာပိုင်ဆိုင်ခြင်း၊ ရယူလိုသောဆန္ဒ
အမျိုးသမီး - ၃၅ ရက် - ယခုကျွန်ုပ်ကိုဖွင့်ရန်မလွယ်ကူပါ။
အမျိုးသမီး - ၁၉ နှစ် - ညစ်ညမ်းမှုကကျွန်တော့်အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်ခဲ့သလဲ။
အမျိုးသမီး - အသက် ၁၉ နှစ်နှင့်ပြင်သစ် - ကျွန်ုပ်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြည့်အဝပြန်လည်စတင်သည်၊ နာတာရှည်စိတ်ဓာတ်မကျတော့ပါ
အမျိုးသမီး - အသက် ၂၁ နှစ် - စွဲစွဲလမ်းမှုမပြီးနိုင်သော်လည်းရက်ပေါင်း ၉၀ သည်အံ့သြစရာကောင်းသည်။
အမျိုးသမီး - ၃၂ နှစ် (လိင်တူဆက်ဆံသူ) - လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ကိုယ့်အိမ်မှာပဲနေပြီး ၁ လလောက်မသွားနိုင်ဘူး
အမျိုးသမီး - အသက် ၃၆ နှစ် - စွမ်းအင်၊ လိင်ဆိုင်ရာအယူအဆများနည်းပါးခြင်း၊
အမျိုးသမီး - သူဟာစွမ်းအင်၊ ယုံကြည်မှုရှိပြီးသူဟာ MAN ဖြစ်တယ်
အမျိုးသမီး - ငါတင်လိုက်တယ်၊
အမျိုးသမီး - ကျွန်ုပ်တွင် PMO ပြProbleနာရှိခဲ့သည်။ ခင်ပွန်းသည် PMO တွင်မပါ ၀ င်ပါ၊ အတွေ့အကြုံသည်စိတ် ၀ င်စားပါသည်
မိန်းမ - ငါ့အတွက်တကယ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အရာတွေ
ပဉ္စမလ - အဘယျသို့အလုပ်လုပ်ခဲ့; အဘယ်အရာကိုမကျင့်
ငါးလ Update ကို
nofap / pornfree ရလဒ်များအရအိပ်ယာထင်တဲ့သူကိုလူတိုင်းအဘို့။
နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ် ... ငါလိင်ပျော်မွေ့။ ငါသူမကိုပျော်တယ်
အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ မှစ. အလုပ်အကိုင်နှင့်စိတ်အားထက်သန်ဖို့အနာဂတျအတှကျ
ယခု မှစ. ငါ့အသက်ကိုအပေါ် nofap ဖြင့်ပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်နှင့်ကိုယ့်ဘဝကို၌ငါ့ပန်းတိုင်များကိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။
3 လပြီးနောက်အပြည့်အဝစိုက်ထူခြင်းမရှိပါ PMO
လိင်တူချစ်သူအမျိုးသား - ၅၃ ရက်၊ ဘဝဟာအများကြီးပိုကောင်းတယ်
ငါသွားခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့တဲ့ 'ဦး နှောက်မြူ' တွေအများကြီးပျောက်ကွယ်သွားပြီ
ပိုမိုသိရှိနားလည်မှု၊ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်မိမိကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှု။ သေးငယ်တဲ့အရာများအတွက်တန်ဖိုးထား။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် & အခြားသူများနှင့်ပိုမိုအဆင်ပြေ
Orient မှနှုတ်ခွန်းဆက်သည်။ ပြtheနာမှာ UNIVERSAL ဖြစ်သည်
High Fructose Porn Syrup - တစ်ပတ်ကိုညအနည်းငယ်သာခံနိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏လိင်ဘဝအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်ခဲ့သည်
HOCD - အဖြေများကိုမရှာပါနှင့်။
အဘယ်သို့ငါတစျဦးက Shot အတွက် Porn Quit
ငါအင်တာနက်က Porn မှ Masturbating နှင့်ဘယ်လို My Life ပြောင်းလဲရပ်သွားကိုဘယ်လို
ငါ“ ထာဝရတစ်ယောက်တည်း” မှဥရောပတွင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအချစ်ဇာတ်လမ်းကိုရရှိခြင်းသို့ရောက်ပုံ။ (Plus အားတစ်နှစ် update)
ဘယ်လို porn ငါ၏အလူမှုရေးဘဝသက်ရောက်သည်။
HuffPost - ကျွန်ုပ်၏ Porn Detox: လိင်တူချစ်သူမပါဘဲပြောင်းလဲနိုင်သည့်နည်းလမ်း (၁၀) ချက်
ငါလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်၏။ ယုံကြည်စိတ်ချမှု, ကျန်းမာရဲအရေပြား, ချွန်ထက်စိတ်ဆွဲဆောင်နှင့်အလုပ်ကျင့်ဝတ်မယုံနိုင်စရာရှိပါတယ်
ငါကပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိတယ်လို့၊ အကောင်းမြင်ဝါဒ၊ ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ရပ်တည်ရန်သင်ယူနေသည်။ အမျိုးသမီးဆွဲဆောင်မှုသာ။ ကြီးမြတ်သည်။
ငါကပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိတယ် အုပ်စုများ၏ရှေ့မှောက်၌စကားပြောခြင်း၊ လူသစ်များနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ပေါင်းသင်းခြင်းကိုပိုမိုလွယ်ကူသည်။
ငါ 50 ကြိမ်အကြောင်းကိုအဘယ်သူမျှမ FAP ကြိုးစားခဲ့ခြင်းနှင့်အစဉ်အမြဲ3လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းအကြောင်းကိုစတင်ကျောပြန်ရောက်သွားတယ်
ငါဆရာ, ဆရာမစကားကိုနားထောငျ, ထိုပြဌာန်းစာအုပ်ကိုဖတ်လို့ရပါတယ်။ ဦးနှောက်အများကြီးလျော့နည်းမြူ။
လူတွေရဲ့မျက်လုံးကိုကြည့်ပြီးအမြဲစကားပြောနိုင်တယ်။ စွမ်းအင်ပိုကြီးသည်။ စိုးရိမ်ခြင်းမရှိတော့ပါ။ ငါ့ရဲ့ပြproblemsနာတွေကိုငါရင်ဆိုင်နေတယ်
ငါသညျဤအထွက်တစ်ဦးပျော်ရွှင်အဖြစ်ရှာပုံတော်, connected, ဝမ်းမြောက်မောင်းနှင်, အာရုံစူးစိုက်ဗဟိုပြုနှင့်မျှော်လင့်သောသူကိုဆက်လက်။
ငါရက်ပေါင်း 90 လုပ်ခဲ့တယ်, ဒါပေမယ့်ငါပြန်စတင်ပါ
ငါမိန်းမတွေကန့်ကွက်ပါဘူး။ ငါကလူကောင်းတစ်ယောက်၊ ငါကလူမှုရေး၊ ငါမရှက်တတ်တော့ဘူး။
ငါလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောခံစားရတယ်။ ငါလှုံ့ဆော်မှု, ယုံကြည်မှုခံစားရနှင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်မိန်းကလေးငယ်များဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့
ငါနောက်ဆုံးတော့တို့သည် လာ. , 90 ရက်ပေါင်းငါ၏အ ED ပျောက်ကင်းအောင်ကုသကြပါပြီ, ဒါပေမယ့်ငါနေဆဲသွားကြဖို့တစ်လမ်းရှိသည်။
ငါလိင်ဤမျှလောက်ပိုပြီးသဘာဝကပိုပျော်စရာကိုရှာပါ။ ငါကပိုလိင်အထိခိုက်မခံ, resensitised ခံစားရတယ်။
ကျွန်တော့်အသက် ၈ နှစ်အရွယ်တက်ဘလက်မှာပျော့ညံ့တဲ့အညိုရောင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ် - ဒီအဖြစ်အပျက်ကနောက်ဆုံးမှာငါရပ်တန့်ဖို့လိုအပ်တဲ့ခွန်အားနဲ့လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ခဲ့တယ်
ကျွန်ုပ်၌လူမှုရေးယိုယွင်းနေပြီ - ယခုတွင်ကျွန်ုပ်သည်ရွှင်လန်းမှုနှင့်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိလာပြီ၊ ကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုနိုင်ပြီ၊ ရည်းစားထားနိုင်သည်
ငါလိုချင်တဲ့အရာတို့ကိုပြီးမြောက်ဖို့လှုံ့ဆျောမှုရှိသည်။ nofap မီ, ငါ directionless ကြီးနှင့်အသက်တာ၌အဘယ်သူမျှမရညျရှယျခဲ့သညျ။
ကိုယ့်ကိုငါ့စူပါပါဝါတစ်ခု relapse ပြီးနောက်ကျန်ကြွင်းသောအတည်ပြုချင်
ငါမသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်နှင့်အတူစတင်ချင်: သင်ငါထက်ပိုကြီးတဲ့ asshole တွေ့ဆုံရန်ဘယ်တော့မှမ
ငါမ PMO နှင့်အတူယခုသည်မည်မျှဘဝကိုချစ်
ငါရည်းစားနဲ့လက်ထပ်ခဲ့တယ်၊ ရာထူးတိုးခံရတယ်၊ ငါအရင်ကထက်မိတ်ဆွေတွေပိုများလာတယ်၊ စာအုပ်တစ်အုပ်စရေးတယ်
ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက် porn အဖြစ်စွဲထင်ဘယ်တော့မှမ, ဒါပေမယ့်ကိုယ်ကလိင်ငါ့မျှော်လင့်ချက်ပုံဖော်၏ရေးသတိထားမိခဲ့တယ်
ငါအကြံပေးနှင့်အတူစကားပြောသည်အထိ porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအကြားခြားနားစေရန်ထင်ဘယ်တော့မှမ
ယခုတွင်ငါသည်ငါ၏အယခင်ဆက်ဆံရေးစိတ်ကူးယဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများအားဖြင့်မောင်းနှင် bullshit ခဲ့ကြသည်နားလည်သဘောပေါက်
ကျွန်မလိင်အရနှစ်သက်မှုနှင့်မကိုက်ညီသောညစ်ညမ်းသောကမ္ဘာ၏ညစ်ညမ်းသောနေရာအချို့သို့နစ်မြုပ်ခဲ့သည်။ \_ t
ငါကလူကဲ့သို့မအပိုင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးကိုကြည့်ပါ။ ငွေရှာဖို့မောင်းပြန်လာယခုအရူး / နံနက်သစ်သားဖြစ်ပါသည်
ငါယုံကြည်စိတ်ချမှုပင်မြင့်မားပိုပြီးဖန်တီးမှုအမျိုးသမီးများ, objectifying ရပ်တန့်
ငါလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုကနေခံစားရတယ်။ အဲဒါကကျွန်မကိုအများကြီးအထောက်အကူပြုတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါရှက်နေတုန်းပဲ
ငါ NoFap ကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာထက်ပိုပြီးတိုက်ခိုက်နေတဲ့ညစ်ညမ်းဆေးစွဲတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်သင့်တယ်လို့ထင်တယ်။
ငါက BS ထင်: ဒါပေမဲ့ငါကကိုပြု၏။ ငါကပိုကောင်းဖြစ်၏။
ငါတကယ်ငရဲနဲ့တူခံစားရတယ် အခုသင်“ စဉ်းစားကြည့်ပါ၊
ငါ 24 /7စိုးရိမ်စိတ်တို, အဆင်မပြေခဲ့, သူနှင့်ဆင်းရဲသောသူတို့သည်အာရုံစူးစိုက်မှုရှိခဲ့
ငါ meds အပေါ်ကိုပြန်မသွားနိုင်ဖို့ဒါမှနီးစပ်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခါ Nofap ငါ၏အစိတ်ကျရောဂါကုသပေးခဲ့၏။
ငါ porn နှင့် fapping မပါဘဲ 273 ရက်ပေါင်းသွားလေ၏။
ငါရက်ပေါင်း ၉၀ အားလပ်ရက်သွားခဲ့တယ်၊ ရက် ၉၀ မှာ“ ဆု” အဖြစ် fap ရှိခဲ့တယ်၊ ပြီးတော့ငါ့အသက် ၆ လပျက်စီးသွားတယ်
ကျွန်တော့်ရဲ့ရက် ၉၀ မှတ်တမ်းကိုသပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ကဗျာတစ်ပုဒ်ထဲမှာအတိုချုပ်ပြောပြပါမယ်
ငါ့ ဦး နှောက်၏အာရုံကြောများမလိုအပ်ဘဲအာရုံစူးစိုက်နိုင်သည်။
ငါပျော်တယ်ငါလွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်ကဒီလောက်ဝေးဝေးရောက်ဖို့စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့မှာမဟုတ်ဘူး။
ငါပိုပြီးပျော်ရွှင်လာတယ်၊ ယုံကြည်စိတ်ချမှုပိုရှိလာတယ်။ ပေါင်းသင်းခြင်းကလွယ်ကူတယ်၊
အခု ၁၄ လကြာပြီ။ မနေ့ညကကျွန်မရဲ့စွဲလမ်းမှုသေဆုံးသွားတယ်
ငါ NoFap ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိကတည်းကပေါင် ၁၀၀ ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးငါ့ဘဝမှာတကယ်အပြောင်းအလဲအများကြီးဖြစ်ခဲ့သည်။
သွားကျောင်း၌ - ADHD ဆေးသည်မလိုအပ်တော့သောကြောင့်အလုပ်မလုပ်တော့ပါ။
တိုးမြှင့်လှုံ့ဆျောမှု, စွမ်းအင်, သိမြင်မှုစွမ်းရည်များ, Self-လေးစားမှု, ငါပိုကောင်းအခြားသူများကိုဆက်ဆံပါ။
ဒါဟာ Asperger ရဲ့ငါ့ကိုပြန်ကိုင်ပြီးခဲ့ဘယ်တော့မှပဲ! ဒါဟာ PMO ပဲ! (မထင်မှတ်သောညစ်ညမ်းငါ့ကိုရန်ဤအမှုကိုပြု!)
ငါထဲကရှိတယ်မည်မျှနားလည်သဘောပေါက်ဒါက Porn (အဆိုပါ Debrief) Up ကို Give ရန်ကြိုးစားခဲ့သည့်အခါယင်းသည်သာလျှင်ခဲ့
ငါ NoFap အလုံအလောက်ကျေးဇူးတင်လို့မရဘူးပြောချင်တာကငါ့ဘဝကိုအကြီးအကျယ်တိုးတက်စေပြီးငါ့ကိုပိုကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာစေတယ်
မိမိကိုယ်မိမိသံသယကင်းမဲ့ခြင်း၊ စွမ်းအင်တိုးပွားလာခြင်းနှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံလိုခြင်း၊ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအမျိုးသမီးများနှင့်တွေ့ဆုံရန်စွမ်းရည်မြင့်ခြင်း
ဒီထက်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု, တိုးမြှင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှု, ငါသည်အတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးခံစားရ
ဘဝမတိုင်မီနှင့်နောက်မှဘဝ - ဘဝပြောင်းလဲသွားသည်
ဘဝ၌အရောင်ရှိပြီးထူးခြားသောလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုတစ်ခုရှိသည်၊ သင်သည်မည်သည့်စွဲလမ်းမှုတွင်မဆိုသင်မြင်တွေ့။ မရနိုင်သောအရာများဖြစ်သည်
ဘုရားသခင်၌ငါ၏အယုံကွညျခွငျးကိုဆုံးရှုံးကြှနျုပျ porn စွဲကျော်လွှားကကူညီပေးခဲ့
အိမ်ထောင်ပြုသည် - ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေး၊ အသက်ရှင်ခြင်းနှင့်ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ စွမ်းအင်ပိုမိုခံစားရခြင်းတို့ဖြစ်သည်
အိမ်ထောင်သည် - နှောင့်နှေးသုတ်သင်ပယ်ရှင်းခြင်း & ED ပျောက်ကင်းအောင်ကုသ
အိမ်ထောင်သည် - ငါပျော်တယ်
လက်ထပ်ထိမ်းမြား - ငါရက်ပေါင်း 40 မှာငါသတိပြုမိသောအရာကို
ယခုလွန်ခဲ့ငါ့ကို vs ငါ့ကို3လအတွင်း
စိတ်ကိုငါမရှိတော့လက်တွေ့ဘဝမှထုံဖြစ်ကြောင်းကို, ဤမျှလောက်ပြတ်သားဖြစ်ပါသည်, အများကြီးပိုယုံကြည်မှု
ပိုများသောယုံကြည်မှုနှင့်စွမ်းအင်, သွားပြီဟုဦးနှောက်မြူ, မိတ်ဆွေများကိုမနာလို
ပို၍ ယုံကြည်မှုရှိပြီးခိုင်မာမှုရှိခြင်း၊ လူမှုရေးအခြေအနေများတွင်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများလျော့နည်းသွားခြင်း၊ မိန်းကလေးများပိုမိုအာရုံစိုက်ခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစိုက်ထူခြင်းများ။
ပိုများသောစွမ်းအင်, cofidence, လှုံ့ဆျောမှု, တိုးတက်လာသောအာရုံစူးစိုက်မှု, နှင့်မိန်းကလေးများသည်ငါနှင့်အတူပရောပ
ပိုများသောစွမ်းအင်, လမ်းထပျြောရှငျ, လှုံ့ဆျောမှုခံစားရပိုပြီးလေးစားမှု
ပိုများသောစွမ်းအင်, အနည်းဆုံးဦးနှောက်မြူ, အားစိုက်ထူ, ယုံကြည်မှုတိုးမြှင့်စိုးရိမ်စိတ်ပျော်ရွှင်မှုပိုမိုလွယ်ကူ, တိုးမြှင့်စိတ်အားထက်သန်စီးဆင်းလျော့နည်းသွား
အမျိုးသမီးဆွဲဆောင်မှု သာ။ ကြီးမြတ်စွမ်းအင် & လှုံ့ဆျောမှု။ ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအသံ။ ဦး နှောက်မြူစရာမရှိပါ နောက်တဖန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်ခြင်း။
ပိုမိုအာရုံစိုက်, ကုန်ထုတ်စွမ်းအား, စွမ်းအင် & သူရဲ။ လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုသို့မဟုတ်တုန်လှုပ်နေသောခြေထောက်များမရှိတော့ပါ
ပိုမိုယုံကြည်မှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှု၊ ပို၍ ပျော်စရာကောင်းသော၊ ပို၍ ကောင်းသောလူမှုဆက်သွယ်မှုစွမ်းရည်များ
ပိုမို၍ လူမှုရေး၊ တက်ကြွမှု၊ ရှင်းလင်းမှုနှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်သောအတွေးအမြင်၊
ကျွန်ုပ်၏ + ၁၀၀ အပေါင်းသည်ရက်ပေါင်း ၉၀ သို့ရောက်ရန်ကြိုးစားသည်။ (နောက်ဆုံးအခြေအနေ - ရက်ပေါင်း ၅၀၀ အထိပြုလုပ်သည်)
ကျွန်ုပ်၏ဒုတိယရက်ပေါင်း ၉၀ - ကျွန်ုပ်သည်အံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းသောအရာမှာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကြောင့်ဖြစ်သည်။
ပြောင်းလဲမှုအကြှနျုပျ၏ 90 ရက်။
အကြှနျုပျ၏ ဦး နှောက် rewired ဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့အဲဒါကိုအားဖြည့်ဖို့အချိန်ပဲ။
အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအကြှနျုပျ၏ပြောင်းလဲမှု: တစ်ဦးစိုးရိမျ Sissi ကနေမကြောက်မရွံ့တိုက်လေယာဉ်မှ (Muay ထိုင်းလက်ဝှေ့)
အကြှနျုပျ၏ယုံကြည်မှုကောင်းကင်ပြာ-တစ်ဟုန်ထိုးဖြစ်ပါသည်, ငါပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုခံစားရတယ်, ငါသည်အသိပညာနှင့် Self-တိုးတက်မှုများအတွက် hungrier ခံစားရတယ်
ကျွန်တော့်စိုက်ခင်းကနောက်ပါ ကျွန်တော့် ဦး ခေါင်းကပိုကောင်းတယ်။ ကျွန်တော့်ဇနီးကိုချစ်တဲ့စိတ်ကပိုခိုင်တယ်၊ ငါအပြုံးနဲ့အနာဂတ်ကိုမျှော်နေတယ်
ကျွန်ုပ်၏ပထမ ဦး ဆုံးရက်ပေါင်း ၉၀ - ဤသည်မှာလုံးဝကျိုးနပ်ပါသည်
အခုငါ့ဘ ၀ ဟာမပြည့်စုံဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါမရောက်ရှိနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုခုကိုငါရှာနေသလိုမျိုးငါမခံစားရဘူး
ငါ့အသားအရေကတုန်ခါနေတယ်။ ငါ့မျက်လုံးတွေဖောက်နေတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ငါကစစ်မှန်တဲ့လူပဲ။ ငါဘဝအတွက်စွမ်းအင်ရှိသည်
အကြှနျုပျ၏လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု, လျော့နည်းစိတ်ကျရောဂါနီးပါးသွားကြောင်းဖြစ်ပါသည်, ငါခိုင်မြဲစွာမျက်စိထဲမှာလူတိုင်းကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်
အကြှနျုပျ၏ပုံပြင်: Porn-မေတ္တာ, လျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်ကိုယ်ပိုင်မုန်းတီးမှု
PIED ၏အဆိုးဆုံးအမှုအခင်းအနီးတွင်ကုသခဲ့သည်။ လူတိုင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်
ရက်ပေါင်း ၉၀ - ကျွန်ုပ်၏ဘဝကိုလှည့်စားခဲ့သည်
အသက်တာသစ်: လွတ်လပ်မှု, မျှော်လင့်ချက်နှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်း
နောက်တဖန်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိ။ ပိုမိုတိုက်ရိုက်နှင့်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှု gradschool ၌တော့ဘူးပျင်းရိ။ ဤမျှလောက်များစွာသောမိတ်ဆွေများကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးအာရုံစူးစိုက်မှု။
လူမှုရေးအရအဆင်မပြေသော၊ ပို၍ ယုံကြည်မှုရှိသော၊ ပို၍ ရှင်းလင်းသော၊ အာရုံစူးစိုက်မှုမရှိတော့ပါ
အဘယ်သူမျှမ, စိတ်ကျရောဂါသို့မဟုတ်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုပိုမိုတိုးမြှင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှု, ငါသည်ကျောက်များကဲ့သို့ခံစားမိ
အဘယ်သူမျှမကပို lethargy သို့မဟုတ်စိတ်ကျရောဂါ, တိုးမြှင့်ယုံကြည်မှု, ငါ့အနုပညာတိုးတက်လျက်ရှိသည်
အဘယ်သူမျှမကပို PIED ။ ကျွန်တော့်ဇနီးနှင့်အတူကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ဆကျဆံရေးရှိခဲ့ပါပြီ။
အဘယ်သူမျှမကပိုညစ်ညမ်း-သွေးဆောင် ED: ငါ့အလိုက်တယ်နှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သော fetishes ကွာနွမ်းနေကြသည်။ ငါဝါယာကြိုးပြန်လည်ငါ၏အဦးနှောက်ခံစားရနိုင်ပါတယ်
3 နေ့ရက်ကာလအဘို့ 4-50 လ, အဘယ်သူမျှမ FAP အဘို့အဘယ်သူမျှမက porn ။ နောက်ကျော ED ကုသပေးခဲ့, ဦးနှောက်မြူ / ခေါင်းကိုက်
NoFap ငါ၏အ PIED တညျ့နှင့် SO မြို့ထဲကနေငါမိုက်ပြန်ရောက်သွားတယ်။
NoFap အခုက သာ. အရာတစ်ခုခုသည်ကိုသိခပ်သိမ်းသောမိန်းမတို့သည်ဆွဲဆောင်အကြောင်းကိုခဲ့သည်
အဲဒါကို Self-လေ့လာရေး၏လမ်းကြောင်းပေါ်မှာငါ့ကိုဦးဆောင်ကတည်းက NoFap, အသက်ရှင်ခြင်း-ပြောင်းလဲနေတဲ့မဟုတ်ဘဲခဲ့သည်
"စွဲ" မဟုတ်ပေမယ့်ငါ့အဟောင်းနွမ်း bullshit တွေအများကြီးလမျးသို့ကျဆင်းခဲ့သည်
စွဲ။ မထား - ယခု ပို၍ တည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်မှုရှိခြင်း၊
တော့ဘူး porn စွဲဘဲ, ငါပိုပြီးပြုံးတာကျန်းမာသန်စွမ်းထက်ပိုလှုံ့ဆျောမှု, ရှိသည်။
စွဲ, ဒါပေမယ့်မတည်ငြိမ်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှု, ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်မှု, ပိုကောင်းတဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်နည်းလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ထို့ထက် ပို. ။
ယခုငါအမြဲထက်ပိုကောင်းတဲ့ feeling ပြန်လမ်းကြောင်းအပေါ်ယခင်ကထက်ပိုမိုကျန်းမာနှင့်အစဉ်အဆက်ထက်အမှန်တကယ်ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။
ယခု၎င်းသည်“ vanilla” နှင့်“ ငြီးငွေ့ဖွယ်” ဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်နှင့်သူမ၏ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝ၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော၊ စိတ်ခံစားမှုနှင့်အကောင်းဆုံးသောလိင်ဖြစ်သည်။
အခုတော့ငါ့အအရူးအမူးနမ်း, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်ပေါ့ပါး 30lbs
အခုတော့ငါက pornstar တူသောငါနောက်ဆုံးတော့ cum porn မကြည့်ကြဘူးကြောင်း
အမြင့်နှင့်အနိမ့်များ၏ရွှင်လန်း -go- ပတ်ပတ်လည်ကိုချွတ် - Taoist အလေ့အကျင့်၏အကူအညီဖြင့်
ယခုအံ့သြဖွယ် orgasm ။ ငါကဆက်ဆက်တစ်ဦးဘဝကိုပြောင်းလဲနေတဲ့အတွေ့အကြုံ, ငါ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့ NoFap လုပ်ပါမယ်။
2 နှစ်တွေ: TL; ဒေါက်တာ NoFap မိမိကိုယ်ကိုတိုးတက်မှု၏ပေါ့ပါးအရည်ဖြစ်ပါတယ်။
အများကြီးတဖန်ငါ့မိသားစုနှင့်အတူ Bonding, အခြားသူများတော်တော်လေးလွယ်လွယ်ကူကူရယ် Make တစ်ဦးပိုမိုနက်ရှိုင်းအဆင့်တွင်လူတွေနဲ့ငါ့ဝါသနာ Expanded နှစ်ခုအလုပ်အကိုင်များ, Connect ကိုတက်ခူး။
PIED - ၃၂ နှစ်အရွယ်မှာအပျိုစင်မဟုတ်တော့ဘူး။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့အတွေးဟာနောက်ဆုံးတော့ငါ့ဆီပြန်လှည့်လာတယ်။
PIED - နောက်ဆုံးတော့ rebooted ။ ဘာမှမလုပ်ဘဲနေရင်တောင်ငါအရမ်းပျော်တယ်။ ထိုအခါငါမဆိုအချိန်မရွေးမိန်းကလေးတစ် ဦး အဘို့အခက်ခဲရနိုင်သည်။
PIED & DE သွားပြီ လိုက်တယ် fetish အဘို့အဘယ်သူမျှမအလိုဆန္ဒ။ စွမ်းအင်နှင့်ယုံကြည်မှုပိုရှိခြင်း၊
PIED နှင့် DE သွားကြောင်း
PIED ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနှင့် recurred
PIED ပျောက်ကင်းအောင်ကုသ: အခုကျန်းမာပုံမှန်လိင်ရှိသည်နှင့်ငါ့အဖက်ဘာမှထက်ပိုမိုပေါ်မှာငါ့ကိုလှည့်! အတော်များများကပိုအကျိုးခံစားခွင့်။
PIED ပျောက်ကင်းအောင်ကုသ: ဒါဟာတကယ်ကြီးမြတ်ခံစားရတယ်။ ကျွန်မရှင်းရှင်းလင်းလင်း6လကြာမျှ-FAP နှင့်မျှမညစ်ညမ်း၏အကျိုးကျေးဇူးများတွေ့နိုင်ပါသည်
PIED လုံးဝသွားပြီ။ လိင်ကပိုကောင်းတယ်။ ဒါဟာ porn နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အများကြီးပိုမိုနက်ရှိုင်းအတွေ့အကြုံကို။
PIED သည်အနာပျောက်ပြီးကျွန်ုပ်အောက်ထပ်တွင် ပို၍ ထိခိုက်လွယ်သောအရာ
porn ကြှနျုပျလိင်မေးခွန်းထုတ်စေ၏။ NoFap ဒီကနေငါ့ကိုကယ်တင်ပေးခဲ့သည်။
porn ငါ့ကိုကျော် fucked ။ ဒါဟာငါ့ကိုပြောင်းလဲသွားတယ်ငါ့ကိုအထီးကျန် လုပ်. ကောင်းသောမိတ်ဆွေများကအများကြီးဆုံးရှုံး
porn သွေးဆောင် ED ကိုတည်ရှိ, ငါကအောင်နိုင်!
သင့်ရဲ့လိင်၏ porn လိမ့်မည်လုယက်သငျသညျ: ငါကိုမှန်ကန်မိန်းမတို့အားဆွဲဆောင်မခံခဲ့ရ
nofap လုပ်ခဲ့တယ်ထက်ငါ့အဘို့အများကြီးပိုကောင်း porn-အခမဲ့အကငျြ့
porn- သွေးဆောင် ED - 132 နေ့ရက်များ။ ငါအနာပျောက်ပြီ
Porn-ED သွေးဆောင် - ED - ၉၅% ကုသပေးသည်။ mini reboots ငါးခု
ညစ်ညမ်း ED - ငါစွဲလမ်းမှုကိုကျော်လွှားနိုင်ပြီ
Porn-ED သွေးဆောင်မှု - Ok, Guys, This works! အလေးအနက်ထား!
Porn-ED သွေးဆောင်မှု - ရိုးသားမှုနှင့်ဆာဆာ၏စွမ်းအား
porn-သွေးဆောင် ED ကုသပေးခဲ့၏။ သို့သော်လည်းငါသည်နေဆဲအချို့ရှိနေဆဲဟုစွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်စိတ်များ
porn-သွေးဆောင် ED: ငါမကြာခဏပြန်ပုံမှန်ရတော့မှမယ်လို့ကြောက်
အကြိုကျောင်းသား - ၆၅ ရက် - လူမှုရေးအခြေအနေမှာပိုပြီးရဲစွမ်းသတ္တိရှိပြီးစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှု
ငါတနေ့လက်ထပ်ပါလိမ့်မယ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏မျက်နှာကိုထောက်။ PMO နုတ်ထွက်
ရီးရဲလ်, အစိုင်အခဲငါ့မေတ္တာအသက်တာ၌တိုးတက်မှု, စိုးရိမ်ပူပန်အတွက်လျှော့ချ, ထိတ်လန့်တိုက်ခိုက်မှု, လူမှုရေး angst ။
Reboot Complete - Neural Network Calibrated - ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် - ၁၀၀% အောင်မြင်မှု
လေးနက် ED ၏နှစ်ပေါင်းများစွာကနေပြန်လည်: တစ်နေ့တာ 45 အပေါ်လိင်။
လျှော့ချလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု, တိုးယုံကြည်မှု, အများကြီးလျော့နည်းစိတျအပွောငျးအလဲ
ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်းရောင်ပြန်ဟပ်မှု - ပြန်ပေါ်လာခြင်း၊ အလေ့အထ၊ စွဲလမ်းအတွေးများနှင့်အကူအညီရတဲ့။
Relapse rebound - ငါယုံကြည်မှုနဲ့နွေးထွေးမှုကိုဖော်ထုတ်မယ်၊
စိတ်ပျက်စရာ fetishes ၏ပြောင်းပြန်
ပြင်းထန်သော ED - အဆိုးဆုံး ၁% (ပြန်လည်ထူထောင်နေဆဲ)
ငါ NoFap လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကတွေ့ရှိခဲ့ကတည်းကငါ့အသက်ကိုသိသိသာသာတိုးတက်လာခဲ့ပါသည်
ခြောက်ပတ် - အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲကောင်းသောခံစားရသည်။ တကယ်တော့ငါမျက်ရည်များနှင့် sooo ကောင်းသောခံစားရတယ်
လိင်တ္ထု, ပိုမိုစွမ်းအင်, လျော့နည်းဦးနှောက်မြူအဖြစ်မိန်းကလေးငယ်များမှာရှာဖွေနေရပ်တန့်
အတွက် + တစ်စုံတစ်ဦးက2နှစ်ပေါင်းကနေယူပါ: NoFap တစ်ဦးက start ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ NoPorn ရောဂါပျောက်ကင်းသည်။
ငါမှပယ်ရရှိရန်သင်ယူဒါက fuck ဆိုတဲ့စုစုပေါင်းနှင့်လိုက်တယ် Shit ကိုထပ်လိုက်တယ်ထူထပ်ဖြစ်လာသည်
“ အမှိုက် - အမှိုက်သရိုက်” အမြင်ပြperနာ
ပထမဦးဆုံးအ 90 ရက်ကယ်လီဖိုးနီးယားကမ်းခြေကိုဆင်းလမ်းမကြီး 101 ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။
ဤရွေ့ကားအတိတ် 97 ရက်ပေါင်းငါ့ကိုသိပ်ထိုးထွင်းသိမြင်ပေးပြီ
ဤသည် pornfree ပစ္စည်းပစ္စယငါ၏အ ED ပျောက်ကင်းအောင်ကုသ
ယနေ့တွင်ခရီးပြောင်းလဲနေတဲ့ယခုဘဝအပေါ်စတင်ငါ၏2နှစ်နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်ပါတယ်
တကယ်တော့ဒါဟာငါ့ဘ ၀ ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်ဆိုတာမယုံနိုင်စရာပါပဲ။ ငါကအဆင်မပြေ creepy ကောင်လေးဖြစ်လေ့ရှိတယ်။
နှစ်နှစ် - အကြံပေးချက် - သင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ပါ
porn မှခေါက်မ - လိင်ခြားသူများအတွက်အရသာပျောက်ကွယ်သွားသည်၊
Update ကို: ငါ့2လ NoFap စိန်ခေါ်မှုပြီးပါကပြီးနောက်6နှစ်ပေါင်း
ပထမ 21 နေ့ရက်များ၏အတက်အကျ
ကောင်းပြီ, ငါ 2017 ကနေတဆင့်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဒါဟာစင်ကြယ်သောနှစျရဖို့သုံးနှစ်လောက်ကြာပေမယ့်ကိုယ်ကကိုပြု၏။
အလိုဆန္ဒ, တာဝန်များကိုဆက်ဆံရေးနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုနှင့်အတူလူငါ့အသက်ကိုနှင့်အတူဘာမျှလုပ်နေတစ် PMO / ဂိမ်းစွဲလမ်းနှင့်အတူတစ်ဦးလူကလေးကနေသွား၏။
ငါနောက်ကျော porn မှထွက်သွားသောအခါငါ၏အအိုင်ကျူနေ့ရက်ကာလ၌ 30 မှတ်ကျဆင်းသွားကဲ့သို့ငါအကျွမ်းတဝင်ဦးနှောက်မြူပြန်လာခံစားခဲ့ရ
ဒီတပြင်လုံးကိုအရာကကျိန်းသေငါ၏အ psyche တခုတခုအပေါ်မှာသက်ရောက်မှုကို လုပ်. , ရလဒ်များအရအိပ်ယာသို့မဟုတ်မရှိမရှိ။
အသုံးပြုသူပုံပြင် -“ လုပ်ပါ”
၁၀ လ - ငါကပိုပြီးရွှင်လန်းမှု၊ ငါဆိုလိုတာကမင်းကိုနာမည်ပေးခဲ့တယ်
၁၀ လ - ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပိုကောင်းတဲ့ဗားရှင်း၊ 10 ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုလိုခံစားရတယ်။
၁၀ လ - ငါဟာကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့သူတစ်ယောက်၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းနှင့်ဝိညာဉ်ရေးအရ။
ရက် ၁၀၀ - ဒုတိယအကြိမ်၊ လူမှုရေး၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှုပိုများတယ်၊ ငါဟာလူတစ်ယောက်ရဲ့အခွံဖြစ်တယ်
ရက်ပေါင်း ၁၀၀ - ED သည်လူမှုရေးအရပိုမိုယုံကြည်မှုရှိစေသည်
ရက်ပေါင်း ၁၀၀ - ED ပျောက်ကင်းသွားပုံရသည်
ရက် ၁၀၀ - ယုံကြည်မှု၊ ရည်မှန်းချက်၊ ခိုင်မာမှုနှင့်စွမ်းအင်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊
ရက် ၁၀၀ - ပိုပြီးယုံကြည်မှု၊ စွမ်းအင်၊ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်း။ လေသည် ပို၍ လတ်ဆတ်သောအနံ့ရှိပြီးအစားအစာသည်ပိုမိုအရသာရှိသည်။
ရက် ၁၀၀ - ပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိပြီးအာရုံစိုက်ပြီးမရှက်တော့ဘူး
ရက် ၁၀၀ - ပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိပြီးလူတွေကိုပိုပြီးစကားပြောပါ၊ ဝါသနာတွေအတွက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအသစ်
ရက် ၁၀၀ - ပိုပြီးလှုံ့ဆော်မှုနှင့်ပိုပြီးလူမှုရေး
ရက် ၁၀၀ - ကျွန်ုပ်သတိထားမိခဲ့သည့်အကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲမှုများသည်ကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်မှု၊ အမျိုးသမီးများအပေါ်ကျွန်ုပ်၏အမြင်ဖြစ်သည်
ကျွန်မဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေစတင်ခဲ့ကတည်းက 100 ရက်ပေါင်း
ရက်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော် - ED၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊
၁၀၁ ရက်အစီရင်ခံစာ - အောင်မြင်မှု
ရက်ပေါင်း ၁၁၀ - (ED) ယုံကြည်မှု၊ ဆက်ဆံရေး၊ လိင်၊
ရက်ပေါင်း ၁၁၀ - (ED) ရှည်လျားသောတိုက်ခန်း။ ပိုကောင်းတဲ့စိုက်ထူအပါအဝင်အကျိုးကျေးဇူးများအများကြီး
ရက်ပေါင်း ၁၁၀ - (ED)၊ ငါအမြဲတစေမြဲမြံစွာနေခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးများကိုဆွဲဆောင်ရန်ခဲယဉ်းသည်
ရက်ပေါင်း ၁၁၀ - ပိုကောင်းသောအဆင့်များ၊ ပို၍ ကောင်းသောအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှု၊ အခြားသူများနှင့်ပိုမိုရင်းနှီးမှုရှိပါစေ
ရက်ပေါင်း ၁၁၀ - မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ခြင်း၏အဆုံးသတ်ပုံစံဖြစ်သည်
၁၁၁ ရက် - ဒါက reboot လုပ်ခံရတာနဲ့တူရဲ့လား။
ရက်ပေါင်း ၁၂၀ - ယုံကြည်မှုတိုးလာခြင်း၊ လူမှုရေးအရပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်။ အသံသည်ပိုမိုနက်ရှိုင်းလာပြီးအရာရာကိုပြုလုပ်သည်
ရက်ပေါင်း ၁၂၀ - (ED) ကျွန်ုပ်ငပဲကိုတောင်မခံစားနိုင်တော့ပါ
ရက်ပေါင်း ၁၂၀ - (ED) အောင်မြင်သောလိင်၊ စိုးရိမ်ခြင်းမရှိ
ရက်ပေါင်း ၁၂၀ - လုံးသားကိုမွေးဖွားသည်၊
ရက်ပေါင်း ၁၂၀ - အလွန်ခံစားရတယ်၊ လူမှုရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပါ၊ အနားယူပါ၊ မိန်းကလေးများနှင့်ပြောဆိုပါ
ရက်ပေါင်း ၁၂၀ - ကျွန်ုပ်တိုတိုနှင့်ယခုစကားပြောသောကျွန်ုပ်၏ကလေးများကဲ့သို့အံ့သြစရာပြန်လာသည်
ရက်ပေါင်း ၁၂၀ - ယုံကြည်မှုတိုးလာသည်၊ မိမိကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားခြင်း၊
ရက်ပေါင်း ၁၂၀ - ပြင်းထန်သော ED သည်ရောဂါပျောက်ကင်းသွားသည်
126 နေ့အစီရင်ခံစာ။ ကျွန်မအသစ်တစ်ခုကိုလူတစ်ဦးနဲ့တူခံစားမိ
၁၂၇ ရက် - လိင်ကိစ္စကိုမကုန်တော့အောင်၊
၁၂၈ ရက် - ကျွန်ုပ်ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်သည်။ ရှည်လျားသောမြူခိုးများမှနိုးလာသည်နှင့်တူသည်။
ရက်ပေါင်း ၁၃၀ - အရက်ဖြတ်ခြင်းကငါ့ကိုလူမှုရေးအရတစ်ယောက်တည်းဖြစ်စေသည်။ ငါ porn အခမဲ့အခါငါဖြစ်သူကိုလက်လွတ်။
၁၃၁ ရက် - ကျွန်ုပ်၏နာကျင်မှုကိုအတိတ်ကမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ငါသာပိုမိုလွယ်ကူလာပြီကြည့်ပါ။
၁၃၂ ရက် - ED: အောင်မြင်သောလိင်။ အရာအားလုံးအကြီးအအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ရက်ပေါင်း ၁၄၀ - စိတ်ကူးယဉ်ခံစားခွင့်များ
ရက်ပေါင်း ၁၄၀ ကြာပြီးနောက်ငါနောက်ကွယ်မှရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သော reboot ကိုတွေ့မြင်နေရသည်
ရက်ပေါင်း ၁၅၀ - ဂျပန် fapstronaut
ရက်ပေါင်း ၁၅၀ - NoFap အတွေ့အကြုံကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည်
ရက်ပေါင်း (၁၆၀) - ED ချို့တဲ့သည်။ မိန်းကလေးများသည် ပို၍ ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်
ရက်ပေါင်း ၁၆၀ - ဒါဆိုဘာပြောင်းလဲသွားပြီလဲ။ အဲဒါကိုပေါင်းဖို့ .... အရာအားလုံး။
၁၆၆ ရက် - ED သတ်မှတ်ချက်နှင့်အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်မှုသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်
၁၆၆ ရက် - ED ။ လူတွေကပြောင်းလဲသွားပြီ
၁၇၇ ရက် - မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့အကူအညီနဲ့ ED & HOCD
ရက်ပေါင်း ၁၈၀ - သင်၏မိတ်ဆွေများသို့“ အသက်ရှင်ပါစေ” ဟူသောစာကိုချိုးပါ။
ရက်ပေါင်း ၁၈၀ - ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည် ပို၍ ပျော်ရွှင်မှု၊ ယုံကြည်မှုစသည်တို့ဖြစ်သည်။ နှောင့်နှေးသောသုက်လွှတ်မှုပျောက်ကင်းသွားသည်
ရက်ပေါင်း ၁၉၀ - ကျွန်ုပ်သည်လူသားများကဲ့သို့သောအမျိုးသမီးများကိုယခုကြည့်ရှုသည်။
2 နှစ် - ထင်ဟပ်
ရက်ပေါင်း ၂၀၀ - ငါ့ကိုစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ငါ porn လိုတယ်။ porn အသစ်။ လိမ် porn
ရက်ပေါင်း ၂၁၀ ရက် - သုက်လွှတ်မှုနှောင့်နှေးခြင်း၊ လိင်သည်ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းပြီးစံနှုန်းများလည်းမြင့်မားသည်
ရက်ပေါင်း ၂၃၀ - များစွာသောအပြုသဘောပြောင်းလဲမှုများ (ED)
ရက်ပေါင်း ၂၅၀ - ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးပါပြီ - PMO သို့လုံးလုံးလျားလျားပျောက်ကင်းသွားသည်
ရက်ပေါင်း ၂၆၀ - သန္ဓေတည်ခြင်းမရှိ၊
၄ လ - အသက်တာရှည်သောအချိန်မတိုင်မီသုတ်ရည်လွှတ်မှုလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားသည်။
ရက် ၄၀ - ဒါဟာအသက်ရှင်ဖို့မှန်ကန်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်
၅ လ - ကျွန်ုပ်၌မိန်းမပျိုများများများစားစားရှိသည်။ လိင်အရာများကဲ့သို့၎င်းတို့ကိုမကြည့်ပါ
50 နေ့အစီရင်ခံစာနှင့် Just ထဲကစတင်ခြင်းသူတို့အဘို့အားပေးစကား
ရက် ၆၀ - ပိုမိုကောင်းမွန်သောစိုက်ထူမှုများ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆက်သွယ်မှုများ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအိပ်စက်ခြင်း၊ ADD နှင့် IBS ပျောက်ကွယ်သွားခြင်း
ရက်ပေါင်း ၆၀ = ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဇနီး ၁ ။ ငါမှာ ED & libido နည်းတယ်။
၆၄ ရက် - စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ ပထမ ဦး ဆုံးရည်းစားမရှိတော့ပြီ၊ ဘဝကပြောင်းလဲသွားပြီ
ရက်ပေါင်း ၇၀ နှင့်ရက် ၉၀ အစီရင်ခံစာများ - အံ့ဖွယ်ကောင်းသောခရီး
8 လ - အပျိုစင်ကနေဆက်ဆံရေးမှ
၈ လ - ED နှင့်လက်ထပ်သည် - ကောင်းမွန်သောအကျိုးကျေးဇူးများ
နေ့ ၉၀ - ပိုပြီးပျော်ရွှင်၊ ပိုပြီးယုံကြည်မှုနှင့်ဖော်ပြမှု
90 နေ့က mini ကိုအစီရင်ခံစာ
90 ရက်ကြာအစီရင်ခံစာ - ဒါဟာသင်ထင်သည်မဟုတ်
ရက်ပေါင်း ၉၀ အစီရင်ခံစာ - စိုက်ထူခြင်း၊ လိင်ကိစ္စအတွက်ဆန္ဒမရှိခြင်း၊ ဘာမှမ ပြင်းထန်သော flatline
ရက်ပေါင်း ၉၀ အစီရင်ခံစာ - ဤနေရာတွင်သုံးနှစ်ကြိုးစားရန်။
ရက်ပေါင်း ၉၀ - အေးဆေးတည်ငြိမ်၊ ချိုသာသော၊ စည်းကမ်းပိုရှိခြင်း၊
ရက်ပေါင်း ၉၀ - ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်သည်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာပြီ (ED)
ရက်ပေါင်း ၉၀ - ကျွန်ုပ်ဘဝတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်စတင်ချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာဆက်ဆံမှုကိုပုံမှန်ပြုလုပ်ခဲ့သည်
ရက်ပေါင်း ၉၀ - (ED & DE) - ပိုမိုကောင်းမွန်သောလိင်ဆက်ဆံမှု၊ ယုံကြည်မှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုပိုများသည်
ရက်ပေါင်း ၉၀ - (ED) သည်ယုံကြည်မှုနှင့်လူမှုစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေသည်
ရက်ပေါင်း ၉၀ - ၁၀ နှစ်ဒီအချိန်ကိုစောင့်နေတယ်
ရက် ၉၀ - အမြဲတမ်းလုံ့လရှိသူ၊ အထွက်၊ ပိုကောင်းသည့်မှတ်ဉာဏ်၊
ရက် ၉၀ - ပိုမိုကောင်းမွန်သောအဆင့်များ၊ အခြားသူများနှင့်ပိုမိုချိတ်ဆက်နိုင်ခြင်း၊
ရက် ၉၀ - ကြည်လင်သောစိတ်၊ ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအသံ၊ ပိုမိုယုံကြည်မှုရှိခြင်း။ ငါ porn မလိုအပ်ပါဘူး
90 Days - အရည်အချင်းကိုယုံကြည်မှုရှိစေတယ်
ရက်ပေါင်း ၉၀ - ယုံကြည်မှုမြင့်မားတယ်၊ ငါဟာပိုပြီးစွမ်းအင်ရှိတယ်၊
ရက်ပေါင်း ၉၀ - ယုံကြည်မှု၊ အသိဉာဏ်နှင့်လိင်ကိုပြန်လည်ရရှိစေသည်။ ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမကျန်းမာဖူးဘူး
ရက် ၉၀ - အမျိုးသမီးများနှင့်ယုံကြည်မှု၊ နက်ရှိုင်းသောအသံ၊ ပုလ်သဘောထား၊ အစိုင်အခဲနှင့်ရဲရင့်ခြင်း
ရက်ပေါင်း ၉၀ - ကြာရှည်စွာသုက်ပိုးပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးခြင်း၊ ပိုမိုယုံကြည်မှုရှိခြင်း၊
ရက်ပေါင်း ၉၀ - နှောင့်နှေးကြန့်ကြာခြင်း - ကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်အစဉ်အမြဲခံစားခဲ့ရသောအထိခိုက်မခံဆုံးဖြစ်သည်။
ရက်ပေါင်း ၉၀ - စိတ်ကျရောဂါနှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုများသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအလုပ်နှင့်ရည်းစားရခဲ့သည်
ရက်ပေါင်း ၉၀ - ED နှင့် fetishes များပျောက်ကုန်ပြီ။
ရက်ပေါင်း ၉၀ - ED သည်ငါ့ဘဝ၏အကောင်းဆုံးကုသမှုကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့သည်
ရက်ပေါင်း ၉၀ - ED ရောဂါပျောက်ကင်းသွားပြီးအများပြည်သူအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိတော့ပါ
ရက်ပေါင်း ၉၀ - လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်စိတ်ပျက်စရာအကြောင်းမဟုတ်တော့ဘဲ ED (မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရှိခြင်း) ပျောက်ကွယ်သွားသည်
ရက်ပေါင်း ၉၀ - အလွန်အမင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံသို့ဆိုးရွားသွားပြီး၊
ရက်ပေါင်း ၉၀ - အလွန်အမင်းလူမှုရေး၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအာရုံစူးစိုက်မှု။ ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးများဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်မြင်သည်
ရက်ပေါင်း ၉၀ - သုတ်ရည်လွှတ်မှုနှောင့်နှေးခဲ့လျှင် shemale porn နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်
ရက်ပေါင်း ၉၀ - ခက်ခဲသောအခြေအနေ: ယုံကြည်မှု၊ လှုံ့ဆော်မှု၊ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားမှု။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုသိတယ်
ရက်ပေါင်း ၉၀ - သင်ဖတ်ရန်လိုသည့်ပို့စ် ၂ ခုသာဤတွင်ရှိသည်။ (ED)
ရက်ပေါင်း ၉၀ - ငါကပိုပြီးရဲရင့်တယ်။ ငါကအတွင်းကနေတက်တဲ့တက်ကြွခံစားရတယ်
ရက်ပေါင်း ၉၀ - အတွင်းစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်နှစ်သိမ့်မှုတိုးလာသည်။ လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုများလျော့နည်းသွားသည်
ရက်ပေါင်း 90 - ငါ rewired ခံစားရတယ်။ ငါနှစ်ပေါင်းများစွာသိကျွမ်းခဲ့တဲ့သူငယ်ချင်းသူငယ်ချင်းများငါ့ကိုကွဲပြားစွာကြည့်ပါ
ရက်ပေါင်း ၉၀ - လူတိုင်းက nofap ဆိုတာဘာလဲ၊ ဒါကမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုမစခင်မှာလူတိုင်းသတိထားသင့်တယ်။
ရက်ပေါင်း ၉၀ - ကျွန်ုပ်သည်စွဲလမ်းခြင်းမရှိသော်လည်းအကျိုးကျေးဇူးများစွာခံစားခဲ့ရသည်
ရက်ပေါင်း ၉၀ - ငါအဆင်ပြေသွားလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ပြောရန်ဤတွင်ကျွန်ုပ်ရောက်နေပြီ
ရက်ပေါင်း ၉၀ - ကျွန်ုပ်သည်လူမှုရေး၊
ရက်ပေါင်း ၉၀ - ကျွန်ုပ်သည်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောပင်လယ်ထဲတွင်ရေကူးပြီးမိနစ်တိုင်းတွင်ပျော်မွေ့သည်
ရက်ပေါင်း ၉၀ - ကျွန်ုပ်သည်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်များစွာကိုဖွဲ့နိုင်ခဲ့ပြီးယခုတွင်မူလူမှုရေးအရတက်ကြွစွာလှုပ်ရှားနေသည်
ရက် ၉၀ - အရာအားလုံးအပေါ်ထားရှိတဲ့သင့်ရဲ့သဘောထားပြောင်းလဲသွားပြီ၊ ငါ့ဘဝကိုလုံးလုံးပြောင်းလဲသွားပြီ
ရက်ပေါင်း ၉၀ - အလုပ်လုပ်သည်
ရက်ပေါင်း ၉၀ - ဦး နှောက်မှေးမှိန်သွားခြင်း၊ စွမ်းအင်နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုနည်းပါးခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်မှုပိုရစေသည်
90 Days - အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရတယ်
ရက်ပေါင်း ၉၀ - Mild ED ပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးခြင်း၊ မိန်းကလေးများသည်လှပသည်ကိုကြည့်ခြင်း၊
ရက်ပေါင်း ၉၀ - ယုံကြည်မှုပိုမို၊ စွမ်းအင်၊ အာရုံစူးစိုက်မှု၊ စိုးရိမ်ခြင်း၊
ရက်ပေါင်း ၉၀ - ယုံကြည်စိတ်ချမှုအပြည့်ရှိ၊
ရက်ပေါင်း ၉၀ - ပိုမိုအားတက်၊ လူမှုရေးနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုလုံးဝမရှိ။
ရက်ပေါင်း ၉၀ - စွမ်းအင်၊ ယုံကြည်မှု၊ လှုံ့ဆော်မှု၊ မှတ်ဉာဏ်နှင့်ကြောက်ရွံ့မှုပိုများလာသည်
ရက်ပေါင်း ၉၀ - ပိုမိုအာရုံစိုက်၊ စနစ်ကျပြီး၊ ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိသည့်အဆင့်များ၊ ကျွန်ုပ်လက်သည်းများကိုကိုက်ခြင်းရပ်လိုက်သည်
ရက်ပေါင်း ၉၀ - ပိုမိုစိတ်အားထက်သန်မှု၊
ရက်ပေါင်း ၉၀ - ပိုမိုစိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်လူမှုရေးပိုမိုကောင်းမွန်မှု၊
ရက် ၉၀ - ပိုပြီးပျော်ရွှင်၊ အများကြီးပိုပြီးလူမှုရေးနှင့်စွမ်းအင်ပြည့်ဝသည်
ရက်ပေါင်း ၉၀ - ကျွန်ုပ်၏တိုက်တွန်းချက်များသည်ညစ်ညမ်းသောနေရာတွင်မဟုတ်ဘဲသူမအားပတ်ပတ်လည်၌သာဖြစ်သည်
ရက် ၉၀ - စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းမရှိတော့၊ လူမှုရေးအရပိုမိုများပြားသည်
ရက်ပေါင်း ၉၀ - ဦး နှောက်မှေးမှိန်သွားခြင်း၊ သူစိမ်းများနှင့်စကားပြောဆိုခြင်းကိုအမှန်တကယ်ပျော်မွေ့ပါ၊
ရက်ပေါင်း ၉၀ - လေးလံသော PMO'er မဟုတ်ပါ။ ငါဒီကဘယ်ကိုသွားတာလဲ
ရက် ၉၀ - ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လူမှုရေးအရအများကြီးပိုကောင်းတယ်။
90 days - PMO သည်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူကိုမကြာခဏပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ
90 days - ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း၊
90 Days - လိင်ဟာပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းလာတယ်
ရက်ပေါင်း ၉၀ - လူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်ကကျွန်မရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်၊ ဒါကအများကြီးလျော့ကျသွားတယ်
ရက်ပေါင်း ၉၀ - ဤ reboot သည်လုံးဝကျိုးနပ်ပါသည်။
ရက်ပေါင်း ၉၀ - ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးနောက်ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတစ်ညလုံးထိုင်ခုံတွင်ကျွန်ုပ်ရောက်နေသည်။
90 နေ့ရက်များနှင့်အပြင်: စွဲထံမှကုသမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု
90 Days down - ကျန်တဲ့ငါ့ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံး ..
အရေးပါသောအ, ရှင်းလင်းမှုများနှင့်ပါဝါမှ 90 နေ့ရက်များ
ရက်ပေါင်း ၉၀ ကြာအောင်မေ့ထားခြင်းမရှိဘဲအောက်ပါအတွေးများကိုကျွန်ုပ်အကျိုးခံစားခွင့်တစ်ခုတည်းစာရင်းပြုစု။ မရပါ။
ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိရက်ပေါင်း ၉၀ - ကျွန်ုပ်၏လိင်ဆန္ဒသည်ရှင်းလင်းစွာတိုးလာသည်
90+ Days - ဘယ်ကသင်ယူတာလဲ
91 နေ့ရက်များအစီရင်ခံစာသို့မဟုတ်ဒါဟာတကယ်ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား Is ?!
၉၄ ရက် - ED ပျောက်ကင်းသွားသည်။ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်အတူလိင် - စတင်ခဲ့သည်။
၉၅ ရက် - လူမှုရေးအရစိုးရိမ်ပူပန်မှုမှအလွန်အမင်းယုံကြည်မှုရှိခြင်း၊ ၎င်းသည်အံ့သြစရာကောင်းသည်။
၉၅ ရက် - ကျွန်ုပ်သည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏ရပ်တည်ချက်ကိုယခုငါသိပြီ
၉၅ ရက် - လူမှုရေးအရအဆင်မပြေမှုနည်းပါးခြင်း၊ ယုံကြည်မှုနှင့်စွမ်းအင်ပိုမိုနည်းခြင်း၊
၉၅ ရက် - ဦး နှောက်မှေးမှိန်သွားခြင်း၊ မလှုပ်ရှားနိုင်သည့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများ၊ ရှုထောင့်တိုးများလာခြင်း
၉၆ ရက် - ကျွန်ုပ်ဘဝပြောင်းလဲသွားသည်။ ED သည်လိင်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်းမရှိဘဲကုသခဲ့သည်